ကာရံဆူး ၏ စုံစီနဖာ အပိုင်းအစများ...: 2009
မြကမ္ဗလာ မြက်ခင်းစိမ်းပေါ်မှာ ဆောင်းကတ္တီပါ နှင်းဝတ်လွှာက ပါးပါးလေး လွှမ်းခြုံကျနေတယ်… နေခြည်နုနု ထိုးဖောက်လာတော့ သစ်ရွက်ထိပ်မှာ တွဲလွဲခိုနေကြတဲ့ ကိုင်းဖျားနှင်းလေးတွေက စိန်ပွင့်လေးသဖွယ်… တလက်လက်နဲ့ … ဒီလို လှပတဲ့ မနက်ခင်းမျိုးမှာ..အလွမ်းတွေနဲ့ နိုးထလာခဲ့တဲ့ ကျွန်မ သူ့ ကို သတိရမိလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မထားပါဘူး… ဒါပေမဲ့ တိုက်ဆိုင်လိုက်တိုင်း သတိရမိတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ဒီလို တိုက်ဆိုင်မှုတွေကြောင့်ပဲ သတိရလိုက်မိတယ်… ဒီနေ့ ဆိုရင် ၁၀နှစ်ပြည့်ပြီပေါ့… ကျွန်မအတွက်တော့ အမှတ်ရနေရမယ့် နေ့ ကလေးပါပဲ ကိုကိုရယ်…
အလုပ်အတွက် အင်တာဗျူးဖြေဖို့ စိတ်စောပြီး ခပ်သွက်သွက် လျှောက်လာတဲ့ ကျွန်မ ဘေးဘီကို ဂရုမစိုက်အားပါ… နေပူကျဲထဲမှာ လျှောက်လာရလို့ လည်း လူက ချွေးတစို့ စို့ … ချိန်းဆိုထားတဲ့ နေရာရောက်လို့ ကြည့်လိုက်တော့ အင်တာဗျူး ဖြေရမှာက ငါးထပ်မှာ..ဓါတ်လှေကားက မရှိ ခြေလျင် တက်ရမှာ..မောလိုက်တဲ့ ဖြစ်ချင်း..ပထမဆုံး အလုပ်ခွင်ဝင်ဖို့ ဖြေဆိုရမဲ့ အင်တာဗျူးမို့ တက်ကြွနေလို့ သာ မမောမပန်း တက်လာနိုင်သည်… အခန်းဝ ရောက်လို့ ကြည့်လိုက်တော့ ဖြေဆိုမဲ့သူတွေ နည်းမှ မနည်းပဲ… အပြင်မှာ ယောကျာ်းလေးတွေက ပြူတစ် ပြူတစ်… အထဲလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လဲ ထိုင်စောင့်နေကြတဲ့ မိန်းကလေးတွေက အပြည့်… ကိုယ်လည်း နေရာ ရလို ရငြား အထဲ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ အထဲက ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့ အစ်မတစ်ယောက် လှမ်းခေါ်တယ်… “ အင်တာဗျူး ဖြေဖို့ လား…” “ ဟုတ်ကဲ့..” “ ဒါဆို လာ” ဆိုပြီး ကျွန်မကို နေရာချပေးတယ်… ကျွန်မလည်း နေရာရတော့မှသာ အမောဖြေနိုင်တယ်… အဲ့ဒီတော့မှ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကဲခတ်မိတယ်… ကိုယ့်အသိများ ပါလို ပါငြားပေါ့…
ထိုအခိုက် မျက်ဝန်း တစ်စုံက သိသိသာသာ ကျွန်မကို ပြုံးလို့ ကြည့်နေလေရဲ့ … ဘယ်အချိန်ကတည်းက ကျွန်မကို အကဲခတ်နေသည် မသိ… လည်ကတုံး ရှပ်အဖြူနဲ့ ကချင်ပုဆိုးကို သေသပ်စွာ ၀တ်ဆင်ထားပြီး မျက်လုံး နဲ့နှုတ်ခမ်းတွေက ပြုံးနေတဲ့ သူ့ ကို တွေ့ လိုက်ရတယ်…ကျွန်မ စိတ်ထဲ ခိုးလို့ ခုလုနဲ့ ပေါ့…. နဂိုကတည်းက အလုပ်အတွက် ရင်ခုန်နေရတာ… သူက ကျွန်မကို ကလေးတစ်ယောက်ကို ကြည့်သလို ရွှန်းရွှန်းစားစားကြီး ကြည့်နေတော့ အနေရခက်ပြန်ပြီပေါ့… ဒါပေမဲ့ အလုပ်အတွက်သာ အာရုံကများနေတော့ သူ ကြည့်တာ မကြည့်တာလည်း မဆိုင်သလို နေပြီး ဘုရားစာသာ စိတ်ထဲ ရွတ်နေလိုက်တယ်… ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မ ဖြေရမဲ့ အလှည့်ရောက်လာလို့ မေးခွန်းတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူပဲ ကျွန်မ ဖြေခဲ့လိုက်တယ်… ပြန်ထွက်လာတော့လည်း သူက ကြည့်နေတုန်းပဲ… ကျွန်မလည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အိမ်ပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်…
နောက်တစ်ပတ်နေရင် အဖြေတွေကို အလုပ်မှာ ကပ်ထားမယ်ဆိုလို့ကျွန်မရယ် အမေရယ် စောစီးစွာ ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်…ဆယ်တန်းအောင်ခါစ သင်တန်းပြီးကာစ အလုပ်အရမ်း လုပ်ချင်လို့ တက်ကြွနေတဲ့ သမီးတစ်ယောက်ကို မရင့်ကျက်မှာ စိတ်ပူတဲ့ အမေက “ သမီး မကြည့်ရဲရင် အမေသွားကြည့်ပေးမယ်” လို့ တော့ ပြောတယ်.. ကျွန်မက ကိုယ့်ကို ကိုယ်လည်း ယုံကြည်တဲ့ အပြင် အကောင်းတွေကိုချည်း မျှော်လင့်မထားတဲ့အတွက် အမေနဲ့ တူတူသွားကြည့်မယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်… ကျွန်မ လျှောက်တဲ့ အလုပ်က ကုမ္ပဏီကြီးလည်း ဖြစ်ပြန် ပြီးတော့ ရန်ကုန်မြို့ အနှံ့ မှာ ဆိုင်ခွဲတွေလည်း အများကြီး ဖွင့်ထားတဲ့ နာမည်ကြီး အ၀တ်အစား ရောင်းတဲ့ ဆိုင်.. အလုပ်လာလျှောက်တဲ့သူတွေကလည်း အယောက် နှစ်ရာကျော်ဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ စိတ်ထဲ ပူမိတာပေါ့…. စောနေသေးတော့ လာကြည့်တဲ့သူ လေးငါးယောက်ပဲ ရှိသေးတယ်… ဒါနဲ့ ကျွန်မလည်း အဖြေစာရွက်ကို ကြည့်လိုက်တော့ ရွေးတဲ့သူ ၁၁ယောက်မှာ ကျွန်မနာမည်က ၄ နေရာမှာ…အိုး ပျော်လိုက်တဲ့ ဖြစ်ချင်း... အမေကလည်း သူ့ သမီးလေး အလုပ်ကောင်း ရလို့ ဝမ်းသာလို့ မဆုံးဘူး…
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မ အလုပ် စ၀င်ရတဲ့ နေ့ ရောက်လာခဲ့တယ်…ဒီအချိန်ထိ ကျွန်မ သူ့ ကို သတိမရ မိသေးပါ… ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်လို့အပေါင်းအသင်း အသစ်တွေ ရခဲ့တယ်… ကျွန်မ အလုပ်က အ၀တ်အစား ရောင်းတာဆိုတော့ ယောကျာ်းလေးရော မိန်းကလေးရော အတူတူ လုပ်ကြရတယ်…ဒီလိုနဲ့ ကိုယ့် အကြောင်း သူ့ အကြောင်း ဖလှယ်ကြတော့မှ ကျွန်မနဲ့ တူတူဝင်တဲ့ လေးယောက်က တစ်မြို့ နယ်ထဲ ဘတ်စ်ကားဆိုလည်း တစ်မှတ်တိုင်တည်း စီးတဲ့သူတွေ ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်… အလုပ်သွား အလုပ်ပြန် တူတူသွား လာခဲ့ကြတယ်… တကယ့်ကို ငယ်ပေါင်းတွေလို နေလာကျတာပေါ့… ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့ အလုပ်က ပြန်တော့ သူငယ်ချင်းသျှားသျှားက မိတ်ဆက်ပေးချင်တယ်ဆိုလို့ ကြည့်လိုက်တော့.. “သူ”.. ကျွန်မ မှတ်မိတာပေါ့…ကျွန်မ မှတ်မိအောင်လည်း သူ့ အကြည့်တွေက ထူးခြားနေတာ….သူ့ နာမည်က “ ခိုင်မြဲ” တဲ့… ကျွန်မထက် နှစ်နှစ်ကြီးတယ်… ကျွန်မလည်း အသိအမှတ်ပြုရုံ ခေါင်းညိတ်ပြခဲ့တယ်… နောက်နေ့ ရောက်တော့ သျှားသျှားက ပြောသေးတယ်……တကယ်ဆို သူက သျှားသျှား အဖော်ရအောင်သာ အလုပ်လုပ်ချင်တာပါတဲ့…သူ့ အခြေနေက အိမ်က စီးပွားရေးကို ၀ိုင်းကူလုပ်နေလို့ ရတဲ့ အခြေနေတဲ့.. သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ဒီလိုမျိုး သံယောဇဉ်ကြီးတတ်တဲ့သူပါလားလို့ ကျွန်မ စိတ်ထဲ ထင်မိတယ်…
အဲ့ဒီနေ့ က စလို့ သူ ကျွန်မ လုပ်တဲ့ ဆိုင်ရှေ့ မှာ ညညဆို လာစောင့်နေတတ်တယ်… ကျွန်မတို့ အတူတူ ပြန်တော့ သူလည်း လိုက်လာတတ်တယ်…သူလည်း ကျွန်မတို့ နဲ့ တစ်မြို့ နယ်ထဲကပါ… တိုက်ဆိုင်လိုက်တာများနော်… သူနဲ့ ကျွန်မက အိမ်က နီးလို့ လည်း နေပြန်ပါတယ်… ဒီလိုနဲ့ သူလည်း ကျွန်မ အပေါင်းအသင်းထဲ စာရင်းဝင် တစ်ယောက်လို ဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကပါ သူနဲ့ ခင်သွားကြတယ်… ကျွန်မတို့သူငယ်ချင်းတွေ ဘယ်လောက်တောင် ချစ်သလဲဆိုရင် အလုပ်ပြီးတာက ညကိုးနာရီ..အိမ် ပြန်ရောက်တော့ ကိုးနာရီခွဲကျော်ပေါ့... ကားမှတ်တိုင်မှာ လူစု ခွဲပြီး ပြန်ဆုံဖို့ အချိန်နဲ့ နေရာကို ချိန်းပြီး ထပ်တွေ့ ကြပြန်တယ်…
ရေမိုးချိုး အ၀တ်အစားလဲ ပြီးတာနဲ့ ကျွန်မ အိမ်က ပြန်ထွက်ခဲ့တယ်…ငယ်ငယ်ကတည်းက မိဘတွေက ချုပ်ချယ်မှု မရှိခဲ့ဘူး..လွပ်လပ်စွာနေထိုင်ခွင့် ပေးထားတယ်… ထိုက်သင့်တဲ့ ပညာနဲ့ အသိဥာဏ်ပေးထားတော့ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ဆိုတာ ကျွန်မတို့ မောင်နှမတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အရာပါ…အဖေက ကျွန်မတို့ ကို သိတတ်စကတည်းက မှာထားတယ်…ကိုယ့်လမ်းကို ကိုယ်လျှောက် လဲရင် ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြန်ထပါတဲ့…မိဘဆိုတာ ဘယ်လမ်းကောင်းတယ် ဆိုးတယ်ဆိုတာသာ ညွှန်ပြလို့ ရတာ..လျှောက်တာကတော့ ကိုယ်တိုင် လျှောက်ရမယ်တဲ့…ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မ ကြီးပြင်း အရွယ်ရောက်လာတော့လည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထိန်းသိမ်းပြီး မိဘတွေရဲ့ ယုံကြည်ရတဲ့ သမီးတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ ပဲ နေထိုင်လာခဲ့တာ…ခုချိန်ထိပေါ့…
သူငယ်ချင်းတွေ ဆုံကြတော့… သူက ပါပါလာပြန်တယ်… သူ့ ကို ကြည့်လိုက်ရင် အမြဲတမ်း လူကြီး စတိုင်… ပလေကတ် ပုဆိုးနဲ့စပို့ ရှပ်ကို ၀တ်ဆင်တတ်တယ်… ကျွန်မတို့ တွေ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ပြီး အတွေ့ အကြုံတွေ ဖလှယ်..ဟို အကြောင်း ဒီအကြောင်း ပြောကြရင်း လမ်းခွဲခဲ့ကြတယ်… ဒီလိုနဲ့ ရက်တွေများလာတော့ သူက တစ်စ တစ်စ ကျွန်မ အိမ်ကို ကျွန်မရဲ့အခြားသူငယ်ချင်းတွေလို ၀င်ထွက်လာတယ်… မိဘတွေနဲ့ ရင်းနှီးလာတယ်… သူက လူကြီးတွေနဲ့ ပိုပြီး ပနာသင့်ပါတယ်… စကား အပြောအဆို ယဉ်ကျေးတယ်…သူက ကျွန်မ နဲ့ နှစ်ယောက်ထဲ ဆုံရင် အဖိုးကြီး တစ်ယောက်လို ဆုံးမတတ်တယ်လေ…ဆရာကြီးလေသံနဲ့ (ထိုအချိန်က) မိန်းကလေးဆိုတာ အစချီလို့ ပေါ့…သူ စကားတွေ ကြားရဖန်များလာတော့ သူ့ ကို အမြင်ကတ်လာတယ်… လက်ဘက်ရည်ဆိုင်တွေကို ချိန်းရင် သူ မသိအောင် ချိန်းဖြစ်ခဲ့တယ်…
ကျွန်မ အစာအိမ်ရောဂါဖြစ်ပြီး နေထိုင်မကောင်းပြန်တော့ ကျွန်မဆီကို သူ ရောက်ရောက် လာတတ်တယ်… သူ ပြောတဲ့ ဆုံးမ စကားတွေကို နားငြီးတယ်လို့ ပြောပြီး ကျွန်မ စိတ်ဆိုးတုန်းက ကျွန်မ အိမ်ပေါ်ကို မတက်တော့ပဲ ကျွန်မတို့ နေတဲ့ လေးထပ်ကို ခေါင်းလောင်းကြိုးလေးဆွဲပြီး နေကောင်းသွားပြီလားလို့ လာ လာမေးတတ်သေးတယ်… ရန်ကုန်မြို့ ကန်ထရိုက်တိုက်တွေမှာ ကြိုးချပြီး ခြင်းလေးတွေ ချိတ်ထားတတ်လေတော့ ကျွန်မနဲ့ တည့်မယ့် မုန့် လေးတွေကို ခြင်းတောင်းလေးမှာ လာလာချိတ်တတ်သေးတယ်… ဒါနဲ့ ကျွန်မလည်း စိတ်ပြန်လျှော့ပြီး သူ့ ကို အရင်လို ပြန်ခေါ် ပြန်ပြောဖြစ်တယ်…ကျွန်မ နာလန်ထခါစ နွားနို့ သောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ အချိန်က ညဉ့် နက်နေပြီ… ဒါပေမဲ့ ကျွန်မသောက်ချင်လှချည်ရဲ့ ဆိုလို့သူက ကျွန်မကို စက်ဘီးပေါ်တင်ပြီး နာရီဝက်လောက် နင်းရတဲ့ ဆိုင်ကို ပြုံးရွှင် ရယ်မောလို့ ပို့ နိုင်သေးတယ်လေ…
ဒါပေမဲ့ သူ့ ကို ကျွန်မ စိတ်မှာ သူငယ်ချင်းလို အစ်ကို တစ်ယောက်လို သံယောဇဉ်က လွဲလို့ဘာမှ မရှိခဲ့ဘူး… သူကတော့ ပိုချင်ပိုမှာပေါ့… သူငယ်ချင်းတွေက ပြောကြတယ်…သူ မရိုးသားဘူးတဲ့… ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ ရိုးသားပါတယ်… သူ့ ဘက်က ဘာမှ မပြောသေးသရွေ့ ကျွန်မ ဘက်က ဘာမှ ငြင်းဆို လက်ခံ ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလေ…. ကျွန်မ သူ့ အပေါ်မှာ အစ်ကို တစ်ယောက်လို ဆိုးနွဲ့ သမျှ သူ ကလည်း ပြုံးပြုံးလေး သည်းခံရှာတယ်…ခုချိန်မှာ ကျွန်မ သူ့ အပေါ်မှာ ဆိုးတာတွေက ပြောပြလို့ တောင် ကုန်မယ် မထင်ပါဘူး… ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ အနိုင်မကျင့်ခဲ့ပါဘူး ညီမတစ်ယောက်လိုမျိုး ဆိုးနွဲ့ ခဲ့ခြင်းမျိုးရယ်ပါ…
ရာသီတွေပြောင်းလို့ အချိန်တွေ အခါတွေ ဟောင်းသွားခဲ့တယ်…သူ့ ဘက်က ကျွန်မကို ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါတဲ့ စကားမျိုးတွေ ဖွင့်ဟမလာခင် ကျွန်မမှာ ချစ်သူ ရှိသွားခဲ့တယ်…သူ ဘယ်လို ခံစားရမလဲ.. ကျွန်မ မသိဘူး…. ကိုယ်ချင်းလဲ မစာတတ်ခဲ့ပါဘူး… ချစ်သူနဲ့ အဆင်မပြေ ဖြစ်တဲ့ အခါမျိုးတွေမှာသာ အစ်ကို တစ်ယောက်လို တိုင်ပင်ခဲ့တယ်…. အားကိုးခဲ့တယ်.. ဒါပေမဲ့ ထုံးစံအတိုင်း သူ့ ရဲ့ ဆုံးမစကားတွေကိုတော့ ခေါင်းမာတဲ့ ကျွန်မ လက်မခံချင်ခဲ့ပြန်ဘူးလေ… ကျွန်မ မတရားဘူးတဲ့လား… သူငယ်ချင်းတွေက ၀ိုင်းသနားနေကြတဲ့ သူ့ ကို ကျွန်မ ပိုအမြင်ကတ်တယ်…
နောက်ပိုင်း ကျွန်မ ချစ်သူနဲ့ အဆင်ပြေလာတဲ့ အခါတွေမှာ သူ့ ကို မေ့လာတတ်တယ်… သူ့ ကို တမင်တကာ ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ပေမဲ့ ရှောင်သလို ဖြစ်လာတတ်တယ်…သူလည်း ကျွန်မ ချစ်သူနဲ့ အဆင်မပြေ ဖြစ်မှာ စိုးလို့ထင်ပါတယ်…ကျွန်မတို့ အိမ်ဘက် ဆိုင်ဘက် အလာကျဲသွားခဲ့တယ်…. အင်း..မှတ်မှတ်ရရ သုံးလလောက် ရှိမလားပဲ… ဒီသုံးလ အတွင်း သူ့ ကို သိပ်မတွေ့ ခဲ့ဘူး… ကျွန်မလည်း ရာထူးတိုးပြီး ရုံးခန်းကို ရောက်ခဲ့တယ်… ကြီးမားတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကလွဲလို့အရာရာကတော့ ပုံမှန် လည်ပတ်နေခဲ့ပါတယ်…
ဒီနေ့ ရာသီဥတုက အုံ့ ဆိုင်းနေတယ်...မဆုံတာ သုံးလေးရက်လောက် ကြာနေပြီမို့ ညနေ သူငယ်ချင်းတွေ ဆုံဖို့ သျှားသျှားဆီ ဖုန်းဆက်တော့ သူမလာဘူးတဲ့…အင်း..ဒီကောင်ဘာလို့ ခွင့်ယူထားပါလိမ့်လို့ စိတ်ထဲတွေးမိတယ်… ခဏနေတော့ ရုံးက ဖုန်းမြည်လာတယ်… အစ်မ တစ်ယောက် ကိုင်တော့ မဇင်ဖုန်းတဲ့.. မဇင်ဆိုတာ သူ့ ရဲ့အရမ်းကို ခင်ရတဲ့သူငယ်ချင်းပါ..ကျွန်မတို့ ရုံးကို ရောက်တာ မကြာသေးဘူး… သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မဇင်နဲ့ ကျွန်မတို့ ညီအစ်မတွေလို ခင်သွားကြတယ်လေ… ဖုန်းပြောပြီး ပြန်လာတဲ့ မဇင် မျက်နှာကို ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်မပင် ရင်ထိတ်သွားသည်… “ မဇင် ဘာဖြစ်လို့ လဲ…” ကျွန်မမေးတော့ မဇင် မျက်ဝန်းက မျက်ရည်တွေနဲ့အသံက အက်ကွဲနေတယ်….ပြီးတော့ ကျွန်မကို သေချာ စိုက်ကြည့်ပြီး “ ခိုင်မြဲ ဆုံးပြီ” ဆိုပြီး ချုံးပွဲချ ငိုချလေရဲ့ …ဘုရားရေ.. ကျွန်မ နားပင် မယုံချင်… ပြောစရာ မေးစရာမရှိလောက်အောင် ကျွန်မ ဆွံ့ အသွားခဲ့တယ်… ကျွန်မနားလည်လိုက်တယ်… သျှားသျှား ဒီနေ့ဘာကြောင့် အလုပ်မလာတာလဲဆိုတာကို… သျှားသျှား ဘာလို့ကျွန်မကို မပြောတာလဲ… အရင်ကဆို သျှားသျှားဆီက သူ ကျွန်မကို ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားနေကြောင်း စတွေ့ ကတည်းက စွဲလန်းနေတဲ့ အကြောင်း ကျွန်မကို လွပ်လပ်စွာ ပိုးပန်းနိုင်ဖို့ အတွက်ပဲ သူအဲ့ဒီနေ့ က အင်တာဗျူးတောင် မဖြေတော့တဲ့ အကြောင်း အမြဲ ကြားနေကြပါ....အခုကိစ္စကျတော့ သျှားသျှား သူမကို ဘာလို့ မပြောတာလဲ…သူနဲ့ သျှားသျှားနဲ့ ကလည်း အရမ်းကို ခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပါ…
ကျွန်မလည်း အလိုလို မျက်ရည်တွေ ကျလာတယ်…. မဇင်က ဆက်ပြီးတော့ “ ဂျူလိုင်ကို ခိုင်မြဲက မပြောပါနဲ့ ဆိုလို့ …ခိုင်မြဲ ညကတည်းက ဆေးရုံတင်ထားရတယ်… ဆေးမူးနေတဲ့ လူတွေက လူမှားပြီး ဓါးနဲ့ ထိုးလိုက်တာ… ညက operation လုပ်တယ်…ခုမနက်ကမှ ဆုံးသွားတာ…ခုဏက သျှားသျှား ဆက်တာ..” ဟင်… သူ ကျွန်မကို စိတ်နာ သွားတာလား… မတွေ့ ချင်တော့တာလား… ကျွန်မ တကယ့်ကို ၀မ်းနည်းကြေကွဲမိပါတယ်….
ကျွန်မအိမ် ပြန်ရောက်တော့ အမေ့ကို ပြောပြတော့ အမေက မယုံဘူး…ကျွန်မတို့ အိမ်မှာ ၀င်ထွက်သွားလာနေတာ ကြာမှ မကြာခဲ့တာ…ကျွန်မကို စေတနာ ဘလဗွနဲ့ သွန်သင် ဆုံးမခဲ့ ဂရုတစိုက် ရှိခဲ့တဲ့သူ… လောကကြီးကို ကျောခိုင်းသွားခဲ့ပြီတဲ့… ကျွန်မ တွေဝေ ငေးငိုင်မိတယ်… လူ့ ဘ၀ ဆိုတာကို လည်း တုန်လှုပ်မိတယ်… ခုချိန်ထိ ကျွန်မရဲ့ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေထဲက ကျွန်မကို ခွဲသွားခဲ့တာ သူ ပထမဆုံးပါပဲ… ရင်ထဲမှာ အလိုလို ငိုချင်နေမိတယ်… အနားမှာ သူရှိခဲ့တဲ့ အချိန်.. သူ ပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေကို သူသာ ဒီလိုဖြစ်မယ်မှန်းသိရင် ကျွန်မ တန်ဖိုးထား နားထောင်ခဲ့မိမှာပါ… နောင်တဆိုတာ ဒါမျိုးများလား…
သူ ကျွန်မအပေါ် ထိန်ဝှက်ထားခဲ့တဲ့ သူ့ ရင်ထဲက စကားတွေ အတွက်…ပြီးတော့ သူ့ ရဲ့ ကြေကွဲမှုတွေကို ကျွန်မ ဝေမျှယူခဲ့မိဖို့ ကောင်းပါတယ်… သူကရော ဘာကြောင့် အချိန်တွေယူနေရတာလဲ… ဒါပေမဲ့ သေချာတာကတော့ သူ့ အတွက် ကျွန်မရင်ထဲမှာ အချစ်ဆိုတာ ယနေ့ အချိန်ထိ မရှိခဲ့ပါဘူး… သူသာ ကျွန်မရဲ့ အစ်ကိုဖြစ်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ စိတ်ကူး အတ္တလေး တစ်ခုသာ သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်မ လိုချင်ခဲ့တာပါ….ကျွန်မ သူရဲ့ နာရေးကို သွားသင့် မသွားသင့် ချင့်ချိန်နေမိတယ်… သူကျွန်မကို မမြင် မတွေ့ ချင်တော့လို့ ဒီလိုမျိုး ရုတ်တရက် ထားသွားခဲ့တာလား… ကျွန်မ တော်တော်ကို စိတ်ထိခိုက်မိပါတယ်… သူ့ ကို စကား မပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရက်တွေ အတွက်လည်း နှမြောမိသလိုပါပဲ… ကြေကွဲဆိုနင့်မှုက ကျွန်မရဲ့ တကယ့် မောင်နှမ တစ်ယောက် ဆုံးရှုံးသွားသလိုမျိုး….ရင်တစ်ခုလုံး တဆစ်ဆစ်နဲ့ နာကျင်ကိုက်ခဲနေတယ်… မနက်ဖြန်ဆိုရင် သူ့ ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို မီးရှို့ ကြတော့မယ်… သူ ဆိုတဲ့ ရုပ်အလောင်းက လောကကြီးထဲက ကွယ်ပျောက်တော့မယ်.. ကျွန်မ ဝေခွဲလို့ မရသေးဘူး…
စားပွဲပေါ်က နာရီသံ တစ်ချက်ချက်နဲ့ မနက်ဖြန်ကို ဦးတည်သွားနေတယ်… အချိန်က ညကိုးနာရီခွဲ ကျော်ကျော်… အခန်းထဲက ၀ါကျင့်ကျင့် မီးရောင်အောက်မှာ ကျွန်မ သူ့ အကြောင်း စဉ်းစားနေမိတယ်.. မနက်ဖြန်အတွက် ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်နေတယ်…. မသွားတော့ဘူးလို့ စဉ်းစားလိုက်တဲ့ အချိန်မှာပဲ ခေါင်းရင်းဘက် ဖွင့်ထားတဲ့ ပြတင်းပေါက်ဆီက လေကလေး တစ်ချက်ဝေ့လာတယ်… ကျွန်မ စိတ်ထဲ တစ်မျိုး ဖြစ်သွားတယ်…နှာခေါင်းထဲမှာလည်း အနံ့ တစ်နံ့ … ညှီစို့ စို့ ပုပ်အက်အက် အနံ့ တစ်နံ့ ..ကျွန်မ ကြက်သီးတွေ ဖြန်းကနဲ ထသွားတယ်…အိမ်ရှေ့ ကို အမြန်ပြေးပြီး အမေတို့ တီဗီ ကြည့်နေတဲ့ နားသွားထိုင်မိတော့ အမေက “ ဘာဖြစ်တာလဲ သမီး” “ ဟို နှာခေါင်းထဲမှာ အနံ့ တစ်မျိုးကြီးရလို့ ..” ကျွန်မ မျက်နှာ ဖြူဆုတ်နေပြီ…အမေက နားလည်သလို မျက်နှာနဲ့ “ မနက်ဖြန် သွားလိုက်ပါ သမီးရယ်..သူ့ ကို နှုတ်ဆက်လိုက်ပါ” တဲ့.. အဖေကလည်း ခေါင်းညိတ်ပြတယ်… နှုတ်ဆက်ခြင်းတဲ့လား…ကိုကိုရယ်..ကျွန်မ ပါးပြင်ပေါ်မှာ မျက်ရည်တွေ ပူကနဲ စီးဆင်းသွားတယ်…
ခဏနေတော့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းတွေ ရောက်လာတယ်… ကျွန်မကိုလည်းသွားဖို့ တိုက်တွန်းကြတယ်… အမေက နောက်ဖေးကနေ လက်ဖက်သုပ် ပန်းကန်ကိုင်ရင်း ထွက်လာပြီး ခုဏက အဖြစ်အပျက်ကို သူတို့ ကို ပြန်ပြောပြတော့ ကျွန်မ သူငယ်ချင်းတွေ မျက်နှာတစ်ချက် ပျက်သွားတာ သိလိုက်တယ်… သူတို့ ကြောက်တတ်တာကို ကျွန်မ သိတာပေါ့… သူတို့ လည်း လက်ဖက်သုပ်တောင် ကုန်အောင် မစားတော့ပဲ ပြန်တော့မယ်လို့ ကျွန်မကို နှုတ်ဆက်တယ်… ပြန်ခါနီး အိမ်အ၀ထိ လိုက်ပို့ တဲ့ ကျွန်မကို သူငယ်ချင်း “အိ” က “သူ နင့်အနားမှာ ရှိနေလိမ့်မယ်” လို့ ကျွန်မကို ပြောသွားသေးတယ်… တကယ်ပဲ ကျွန်မ အနားမှာ သူ ရှိနေမှာတဲ့လား….
သူ့ အိမ်ရောက်သွားတော့ သူ့ ကို လိုက်ပါ နှုတ်ဆက်မဲ့သူတွေက အိမ်အောက်က မဏ္ဍပ်အပြည့်ပါပဲ… ကျွန်မလည်း သျှားသျှား ခေါ်ဆောင်ရာ သူ့ အိမ်ပေါ်ကို လိုက်တက်လိုက်တယ်…အိမ်ထဲကို လှမ်းဝင်လိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ ကျွန်မ စတင်တွေ့ လိုက်ရတာကတော့ 1’ x 2’ ဘောင်ထဲက သူ့ အပြုံးကိုပါ… အရှေ့ မှာ ဖယောင်းတိုင် ထွန်းထားတဲ့ သူ့ ဓါတ်ပုံရှေ့ ကို ရောက်တော့ ကျွန်မ ဟန်မဆောင်နိုင်စွာပဲ ငိုချမိပါတယ်… ကျွန်မကို ပြုံးကြည့်နေသယောင်… ဒီအပြုံးတွေနဲ့ ကျွန်မတို့ စတင်သိခဲ့ရတယ်…အခုတော့ မမျှော်လင့်ပဲ ကျွန်မကို ရုတ်တရက် ခွဲသွားပြီပေါ့…
ကျွန်မ အိမ်ကို သူမကြာခဏ ၀င်ထွက်နေပေမဲ့ သူ့ အိမ်ကိုတော့ ကျွန်မ အခုမှ ရောက်ဖူးတာပါ… သူ့ အမေဆိုသူကို ကြည့်တော့လည်း ရင်ကွဲ ပက်လက် ဖြစ်နေတဲ့ပုံ … ဖြစ်ရင်လည်း ဖြစ်သင့်ပါတယ်…သူက သူ့ အိမ်မှာ သားအကြီးဆုံး..အဖေရဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ အားကိုးလောက်တဲ့သူ… မြေးတွေထဲမှာ မြေးဦး….သူ့ ကို ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ သူ့ မိသားစု မဆိုထားနှင့် တွေ့ ဖြစ်တာ မကြာသေးတဲ့ ကျွန်မတောင်မှ တော်တော်လေးကို ခံစားနေရတာ…သူနှင့် အသက် ၁၇နှစ်လောက်ကွာတဲ့ သူ့ ရဲ့ ညီအငယ်ဆုံးလေးကဆို အငို မတိတ်တော့ဘူး… သူက သူ့ ညီလေးကို သိပ်ချစ်တာလေ…ကျွန်မနဲ့ တွေ့ ရင်တောင်မှ သူ့ ညီလေးကို တစ်ခါတစ်လေ ခေါ်လာတတ်တယ်….
ကျွန်မလည်း သူ့ ညီမတွေနဲ့ အားပေးစကား ပြောနေတုန်း သူ့ အဖွားက “ သမီးလေးက ဒီဓါတ်ပုံ ပိုင်ရှင်လား..” ….ဟင်… ကျွန်မ အံ့သြသွားသည်… ကျွန်မရဲ့တစ်လက်မခွဲသာသာရှိတဲ့ ဓါတ်ပုံ ပါတဲ့ stand အသေးလေး အိမ်ရှေ့ မှာ ထောင်ထားတာ သူ ဘယ်အချိန်က ယူသွားတာလဲ… အိမ်မှာ ကျွန်မက ဓါတ်ပုံရိုက်ခံရတာ အရမ်းကို ၀ါသနာကြီးသူပါ…ဧည့်ခန်းမှာလဲ ကျွန်မ ဓါတ်ပုံတွေက နေရာမလပ် ထားထားတာပါ… ဒီ ဓါတ်ပုံ လျော့နေတာတောင် သတိမထားမိခဲ့ဘူး… အဖွားကပဲ ဆက်ပြီးတော့ “မြေးလေး ယူထားတာသိလို့ သမီးလေးကို ပြန်ပေးတာပါ”တဲ့…. သူ့ အဖွားက သူ့ ကို သိပ်ချစ်တာလေ… အဖွားကိုရော သူဘာတွေ ပြောသွားသေးလဲ…. ကျွန်မ သိချင်ပေမဲ့ ကြေကွဲ ၀မ်းနည်းနေတဲ့ အဖွားရဲ့ မျက်ဝန်းတွေကြောင့် ကျွန်မ ဘာမှ မမေးဖြစ်ခဲ့ပါဘူး… အော် ခုတော့ ဒီဓါတ်ပုံလေးကို သိမ်းထားပေးမဲ့သူက ကျွန်မကို ကျောခိုင်းသွားခဲ့ပြီ… ကျွန်မရင်ထဲ နင့်နင့်နဲနဲ ခံစားလိုက်ရတယ်… သူ့ ကို လှမ်းကြည့်တော့လဲ ပြုံးနေဆဲပါပဲ…
ကျွန်မတို့ အားလုံး အချိန်ကျတော့ သူရှိရာဆီကို ကားအသီးသီး နဲ့ ရောက်ခဲ့ကြတယ်… ဟို ရောက်လို့ကျွန်မ တွေ့ လိုက်ပြန်တာက သူ့ အပြုံးပါပဲ… အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ သေဆုံးသွားတဲ့ သူ့ ကို လာကြည့်ကြတဲ့ လူအုပ်ကြီးက ခန်းမ တစ်ခုလုံး အပြည့်ပါပဲ…. သူ့ ဆီကို ရောက်ဖို သျှားသျှား မဇင်နဲ့့ကျွန်မတို့ တွေ မနည်းအားတင်းပြီး လူအုပ်ကြီးကို ကျော်ဖြတ်လာခဲ့ရတယ်… အသုဘရှင်တွေပါလို့ မနည်းတောင်းပန်တော့မှ လူအုပ်ကြီးက ၀ိုင်းပြီး လမ်းဖယ်ပေးကြတယ်…. သူ့ ဓါတ်ပုံထဲက သူ့ အပြုံး..ဖယောင်းတိုင် ထွန်းထားတဲ့ ရှေ့ မှာ ဇာအဖြူလေး လွှားထားတဲ့ သူ… မျက်နှာမှာ ရေခဲမှုန်လေးတွေက အငွေ့ ပျံ သီးနေတာကလွဲလို့အိပ်နေသလိုပါပဲ… ကျွန်မ သူ့ ကို အိပ်နေတယ်လို့ ပဲ ပြောပါရစေ… ကျွန်မ လက်မခံနိုင်လွန်းလို့ ပါ… သူ အိပ်နေတဲ့ စင်လေးရဲ့ ဘေးမှာ သူ့ အတွက် သေတ္တာ ဖြူဖြူလေး တစ်လုံး “ ခိုင်မြဲ (၂၁နှစ်)တဲ့”..ကျွန်မ ငိုနေရင်းက အသံတောင် မထွက်တော့ပါ… မြင်နေရတဲ့ သူ့ မျက်နှာဟာ ပြုံးနေသေးသလိုပါပဲ… သူ့ ကိုတစ်လှည့် သေတ္တာဖြူဖြူလေးကို တစ်လှည့်ကြည့်ကာ ကျွန်မ ရှိုက်ရင်း ရှိုက်ရင်း ထို မြင်ကွင်းတွေရဲ့ တခဏမှာပဲ ကျွန်မ သတိမေ့သွားခဲ့တယ်… သျှားသျှား ဖေးမလိုက်လို့ သာ ကျွန်မ ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို ပြိုလဲကျ မသွားတာတဲ့…ကျွန်မ သတိယလို့ ကြည့်လိုက်တော့ သူ့ ရဲ့ အငွေ့ တွေကိုပဲ မြင်လိုက်ရပါတော့တယ်… ထို မီးခိုးအငွေ့ တန်းလေးတွေက ကျွန်မကို လက်ပြ နှုတ်ဆက်နေသလိုပါပဲ…
ထိုည ကျွန်မ တစ်ယောက်တည်း ဧည့်ခန်းမှာထိုင်နေတုန်း လေအေးလေး တစ်ချက်အဝေ့မှာ စံပယ်ပန်းနံ့ တွေ လှိုင်ထသွားတယ်… ကျွန်မတို့ နေတဲ့ လေးထပ်တိုက်မှာ ဘယ်ကမှ စံပယ်ပန်းနံ့ လာစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး… ကျွန်မ မျက်စိထဲ မြင်လိုက်တာက ဇာအဖြူလေးပေါ်က စံပယ်ပန်းတွေ….အော် သူ ကျွန်မကို အပြီးအပိုင် လာနှုတ်ဆက်သွားပြန်ပြီ…. ကျွန်မ အခုတစ်ခါမှာတော့ မကြောက်တော့ပါဘူး… စိတ်ထဲကနေလဲ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်…သူ ကောင်းရာ သုဂတိရောက်ပါစေလို့ …. အဲ့ဒီနေ့ ကစလို့ ဒီနေ့ ဒီအချိန်ထိ သူ ကျွန်မနားမှာ မရှိတော့ပါဘူး..ဘယ်လို အရိပ်အယောင်မျိုးကိုမှလဲ ကျွန်မ မမြင်ခဲ့ရပါဘူး… ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ညဘက်တွေမှာ ကျွန်မဆီကို မလာကြတော့ပါဘူး…
သူ့ ကိုမှားသတ်မိတဲ့ သူတွေလည်း တရားဥပဒေရဲ့ အဆုံးအမနဲ့ထောင်ဒဏ် ၁၀နှစ် ကျခံသွားကြပါပြီ… ဒါပေမဲ့ အခုဆိုရင် ဒီလူတွေက လောကကြီးထဲ ပြန်လည် ၀င်ရောက်ခွင့်ရပေမဲ့ သူကတော့ ကျွန်မတို့ ကို အပြီးအပိုင် နှုတ်ဆက် ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါပြီ…. လောကကြီးထဲမှာ သူ နောက်တစ်ဖန် ရောက်လာဦးမှာလား… ရောက်လာပါစေလို့ ကျွန်မ မျှော်လင့်နေပါတယ်…. သူ တကယ်လို့ များ ရောက်လာခဲ့ရင် သူ့ စကားတွေကို ကျွန်မ နားထောင်ခွင့် ရချင်လိုက်တာ…
ထိုအချိန်ကတည်းက ကျွန်မ နားလည်လိုက်တာက ကိုယ့်ကို ချစ်ခင်တဲ့ သူတွေကို ကိုယ့်အနားမှာ ရှိနေတုန်း တန်ဖိုး ထားဖို့ ပါပဲ… သူမရှိတော့ရင်ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုး ကျွန်မ ခဏလေးဖြစ်ဖြစ် တွေးကြည့်လိုက်ရင် ကျွန်မ အရမ်းကို ကြောက်သွားမိပါတယ်… ကိုယ့်ကို မုန်းတဲ့သူ တစ်ယောက်တိုးလာမဲ့ အစား ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူ တစ်ယောက် လျော့မသွားဖို့ ကို ကျွန်မ အလေးထားတတ်နေပါပြီ… လူ့ ဘ၀ရခိုက် ခဏလေးမှာ သာယာချမ်းမြေ့ မှုနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာပဲ ကျွန်မ နေသွားချင်ပါတော့တယ်… လောကကြီးထဲက ကျွန်မ ထွက်သွားရမဲ့ နေ့ ရောက်ခဲ့ရင်လည်း ကျွန်မရဲ့ အမှတ်တရများနဲ့ အတူ ကျွန်မကို အမှတ်ရနေမဲ့ သူတစ်ယောက်တော့ ရှိနေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်….
(၀န်ခံချက်။ ။ နာမည်များမှလွဲ၍ ကျန်တာ အားလုံးသည် ဖြစ်ရပ်မှန်များ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မ ဘ၀ထဲမှ အမှတ်တရရှိခဲ့သူ တစ်ယောက်ကို ၁၀နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ အဖြစ် ဒီဇာတ်လမ်းလေးကို ရေးသားပါသည်။ ကျွန်မ ကိုကိုလို့ ခေါ်တာကို သူ မကြားနိုင်တော့ပါဘူး။ ကျွန်မရဲ့ အစ်ကို တစ်ယောက်အဖြစ် အမြဲ အမှတ်တရ ဖြစ်နေမှာပါ။ ကိုကိုတစ်ယောက် ကောင်းရာ မွန်ရာမှာ ပျော်နေပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း….)
Posted by ကာရံဆူး at 3:16 PM 12 comments:
၀က်ဝံလေးရဲ့ တဂ် “ က ” for “ ကာရံဆူး”..
1.What is your name : ကာရံဆူး
2.က four Letter Word : ကုက္ကိုက်ကိုင်းကြီး
3.A boy's Name : ကရင်လေး (နင့်နာမည် ငါသုံးလိုက်တယ်..ခွေးလွှတ်..)
4. A girl's Name : ကြည်ဖြူသျှင် (ကိုယ်ကြိုက်တာကိုရေးတာ)
5. an occupation : ကြက်ကြော်ရောင်းတယ် (KFC ကိုအားကျလို့ ..)
6. color : ကြည်ပြာရောင်
7. Something you'll wear : ကုတ်အကျီ င်္
8. food: ကတက်ချဉ် (အရမ်းကြိုက်..)
9. place : ကမ်းခြေ (သူနဲ့ သာဆိုရင်…)
10.movie title : ကိုကိုဘာလို့ မုန်းတာလဲ
11. Something you drink : ကြံရည်
12. A musical group : ကာတွန်း
13. animal : ကျား
14. street name :ကင်းဝန်မင်းကြီးလမ်း (တို့ အဘိုးတော့ မဟုတ်ဘူး..ဟိဟိ)
15. type of car : ကက (သိတယ်မှတ်လား တက္ကဆီလေ.. ကိုယ်ပိုင်မှ မရှိတာ..)
16. The title ofasong: ကိုယ့်အနားရှိစေချင်
17.verb : ကဲသည် (ဟိုကောင်မလေးကို ပြောတာနော်..ဟွန်း)
ကဲ…၀က်ဝံလေးက မြန်မြန် တဂ်ပါဆိုလို့ လေ….“ က ” for ကာရံဆူးဆိုလို့ ..မြန်မာလိုပဲ တဂ်လိုက်ပါတယ်…ဟဲဟဲ..ရတယ်ဟုတ်..ဒီလောက်နဲ့ ကျေနပ်နိုင်ပါစေ… မဆိုင်းမတွ အမြန်ဆုံး ကြိုးစား ပမ်းစား တင်လိုက်ပါတယ်…
Posted by ကာရံဆူး at 4:38 PM 10 comments:
လောကတွင် လူအပါအ၀င် သတ္တ၀ါအပေါင်းတို့ သည် မသိခြင်းငါးမျိုးဖြင့် ရှင်သန်နေထိုင်ကြသည်။ ထို မသိခြင်းများမှာ-
၁။ မည်သည့်အရွယ်တွင် သေမည် မသိခြင်း
၂။ မည့်သည့်ကာလ (နံနက် ၊ နေ့ လည် ၊ ည) အခါ၌ သေမည် မသိခြင်း
၃။ မည်သည့်ရောဂါဘယ နှင့်သေမည် မသိခြင်း
၄။ မည်သည့်ဒေသ၌ သေမည် မသိခြင်း
၅။ သေပြီးနောက် မည်သည့်ဘုံရောက်မည် မသိခြင်း တို့ ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့ ရေရေရာရာ မသိသော ဘ၀၌ ကျင်လည် နေကြသော လူ ၊ သတ္တ၀ါများ အဖို့ တွင် ဘ၀ အာမခံချက်ဟူသည် အဘယ်နည်း ။ မိမိ ဘ၀သည်ပင် သေချာရေရာမှု မရှိပါက ဘယ်အရာသည် သေချာမှုရှိမည်နည်း ။ ဤကဲ့သို့ မသေချာ မရေရာမှုများကို မသိသော အချို့ သော လူများသည် အရာရာကို မှန်းကာ ရမ်းကာဖြင့် “မျက်ကန်းတစ္ဆမကြောက်” လျှောက်နေကြပေသည်။ တချို့ က ပိုင်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်း ဥစ္စာ ရာထူး ပညာ ပေါ်၌ တပ်မက်ခြင်း တချို့ သည် ဆန္ဒများ၌ ပျော်မွေ့ ၍ တချို့ ကတော့ သံယောဇဉ် အပူမီးများနှင့် ပျော်မဆုံး မော်မဆုံး ရှိနေကြသည်။ ယင်းသို့ တပ်မက်ကာ အပျော်ကြီးပျော်နေသော ပုထုဇဉ်အရေအတွက်မှာ များပြားလွန်းသောကြောင့် သေသည့် အခါတွင် ငရဲသို့ လားသော ဦးရေမှာ မည်မျှများပြားကြောင်း ဘုရားရှင်က အောက်ပါအတိုင်း မိန့် တော်မူသည်။
မြတ်စွာဘုရားရှင်က “ ချစ်သား ချစ်သမီးတို့ ငါဘုရား လက်သည်းပေါ်က မြေမှုန်လေးနှင့် မဟာ ပထ၀ီမြေကြီး ဘယ်အရာက များသလဲ” လို့ မေးမြန်းသည့် အခါ မဟာ ပထ၀ီ မြေကြီးက များသည်ဟု ဖြေဆိုကြရာ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်က “ ချစ်သား ချစ်သမီးတို့ ဒီ ဥပမာ အတိုင်းပဲ လူ့ ဘ၀ကနေ သေပြီးတော့ သုဂတိလို့ ခေါ်တဲ့ လူ့ ဘုံ နတ်ဘုံ ဗြဟ္မာဘုံ ရောက်တဲ့ လူသားတွေဟာ ငါဘုရား လက်သည်းပေါ်က မြေမှုန့် လောက်ရှိပြီး ငရဲ ၊ တိရစ္ဆာန် ၊ ပြိတ္တာ ၊ အသူရကယ် ဆိုတဲ့ အပါယ်လေးဘုံကိုကျတဲ့ လူသားတွေကတော့ ဟောဒီအောက်က မဟာပထ၀ီ မြေကြီးပေါ်က မြေမှုန်လောက် ရှိတယ်လို့ ” ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။
ပုထုဇဉ် လူသားများအဖို့ တွင် ကောင်းမှုထက် မကောင်းမှု၌ မွေ့ ပျော်လွယ်ကြပေသည် ။ ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသည့် အရာများပေါ်၌ တပ်မက်လွန်းကြသည် ။ သံယောဇဉ် ကြီးလွန်းကြသည် ။ “ငါ” ဟူသော အတ္တကို မြဲမြံစွာ ဆုပ်ကိုင်ထားကြသည် ။ ပုထုဇဉ် လူသားများကို မဆိုထားနှင့် ရဟန်းသံဃာများပင် အယူမှား အစွဲမှား၍ ငရဲသို့ လားရပေသည် ။ ပုံပြင်လေးတစ်ခုနဲ့ ဥပမာပေးပါမည်။
ဗုဒ္ဓလက်ထက်တွင် တိဿအမည်ရှိ ရဟန်းတစ်ပါးသည် ရဟန်းကျင့်ဝတ်နှင့် ညီသော ရဟန်းမြတ် တစ်ပါး ဖြစ်ပေသည်။ တစ်နေ့ သောအခါ သူ၏ တူမက လှူတဲ့ သင်္ကန်းသည် အင်မတန်မှ နူးညံ့ ပျော့ပျောင်းသော သင်္ကန်းဖြစ်သည့်အတွက် ရဟန်းသည်ပင် ပုထုဇဉ် ဖြစ်သောကြောင့် တပ်မက် စွဲလန်းမိရှာသည်။ သင်္ကန်းလေးအား စွဲလန်းရှာလွန်းတော့ ကျိန်းရင်တောင်မှ ခေါင်းအုံးအောက်တွင် ထား၍ ကျိန်းပါသည်။ ညသန်းခေါင်အခါ၌ ပုထုဇဉ် ဆိုသည့်အတိုင်း မည်သည့်အရွယ်တွင် သေမည်ကို ကြိုတင် မသိနိုင်ရကား ရောဂါတစ်ခုဖြင့် ပျံလွန်တော်မူလေသည် ။ ရဟန်းသံဃာများ အပ်နှံမထားခဲ့လျှင် ကျန်ရှိသော ပစ္စည်းသည် “ မတသန္တက” မည်၏ ။ ထို့ ကြောင့် ကျန်သော သံဃာတွေက ဝေခြမ်းယူမည် လုပ်တော့ သင်္ကန်းခေါက်ထဲမှ အသံကြီး တစ်သံ ထွက်ပေါ် လာပါသည်။
“ ငါ့သင်္ကန်းကို မယူကြနဲ့ငါ့သင်္ကန်းကို မယူကြနဲ့ ” သို့ သော် ရဟန်း သံဃာများက မကြားဘူး ဘုရားရှင်က ကြားတော့ သူတို့ ရဲ့ ဝေခြမ်းမှုကို ခေတ္တ ဆိုင်းငံ့ခိုင်းတယ် ။ “ ချစ်သားတို့ မဝေခြမ်းကြနဲ့ ဦး ။ တိဿ ရဟန်းကြီးဟာ သင်္ကန်းကို စွဲလန်းတဲ့ လောဘကြောင့် သင်္ကန်းခေါက်ထဲမှာ သန်းပြိတ္တာကြီး ဖြစ်နေတယ် ။ မကျွတ်သေးဘူး ၇ ရက်စေ့မှကျွတ်ပြီး နတ်ပြည်ရောက်မှာ ဖြစ်လို့ ၇ရက်ပြည့်မှ ဝေခြမ်းကြပါ” လို့့မိန့် တော်မူတယ် ။ ထို့ နောက် ၇ရက် ပြည့်မှ သန်းပြိတ္တာ ဘ၀မှ လွတ်ပြီး နတ်ရွာသုဂတိကို လားပါတယ် ။ ရဟန်းသံဃာများသည်ပင် အပါယ်လေးဘုံသို့ ကျရောက်တတ်လျှင် စာရေးသူ အပါအ၀င် ပုထုဇဉ်များအဖို့ ကား ဆိုဖွယ်ရာ မရှိချေ။
ထို့ ကြောင့် စာဖတ် ပရိသတ်ကြီးလဲ စွဲလန်းမှုများကို တတ်နိုင်သလောက် ဖြည်းဖြည်းချင်း လျှော့ကာ စွဲလန်းမှု လောဘကို အပြီးတိုင် ပယ်သတ်နိုင်ကြပါစေ ။ မသိခြင်းများနှင့် အသက်ဆက်နေရသော လူ့ ဘ၀ကလေး ရခိုက်၌ ကောင်းမှုနှင့်သာ ပျော်မွေ့ ကာ ကုသိုလ် သဒ္ဒါစိတ်များ ပွားများနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဆရာတော် အရှင်ဇ၀န (မေတ္တာရှင် - ရွှေပြည်သာ) ရေးသားသော မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် တကယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာ တရားတော် စာအုပ်မှ အကြောင်းအရာတို့ အား ကိုးကား ရေးသားလိုက်ရပါသည်။ နောက်လည်း အလျဉ်းသင့်သလို ဖော်ပြပေးသွားပါမည်။ ဆရာတော်၏ မူရင်း ရေးသားမှုအား ဖတ်ရှုလိုပါက ဒီမှာ သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် ။
Posted by ကာရံဆူး at 11:01 AM 13 comments:
ဆီမီး ထွန်းညှိ မီးပုံးပျံလွှတ်
အမိအဖ ၊ ဘိုးဘွား ၊ ဆရာ ကျေးဇူးဖြာကို
ကိုယ် နှုတ် ၀စီ ထိုသုံးမည်နှင့်
ကျူးလွန် မှောက်မှား အမိုက်များအား
ဤ မင်္ဂလာ အခါသမယတည်း..
မနီး ဝေးကွာ ထိုနေရာများ
မျက်လုံးစုံမှိတ် အရိပ်တို့ အား မြင်ယောင်မှန်းထင်
ပြားပြားဝပ်ဆင်း ဘုရား ခြေရင်း၌
ဤ မင်္ဂလာ အခါသမယတည်း….
Posted by ကာရံဆူး at 11:34 AM5comments:
သက်မင်းမောင်နှင့် မေသက်ပိုင်ညို (ဇာတ်သိမ်းပိုင်း)
အညို မျက်လုံးတွေ ကျိန်းစပ်နေသည်..တနေ့ ကရော မနေ့ ကပါ ငိုနေခဲ့တဲ့ အချိန်တွေ နည်းမှ မနည်းပဲ… အညို နောင်တ ရနေတာလား သူမကိုယ်တိုင်ပင် မသိ.. မောင့်ရဲ့ စာအိတ်လေးကို သူမ ဖွင့်မကြည့်မိလျှင် ကောင်းမှာ..ဒါမှ မောင်လျှို့ ဝှက်ထားလည်း အညို ဘာမှ မသိပဲ ဆက်ချစ်နေနိုင်မှာ… တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တယ် ပြောပြော အတ္တကြီးတယ်ဆိုဆို..ဒီလို အတွေးမျိုး ခဏတော့ ၀င်ခဲ့မိတယ်… ဓါတ်ပုံထဲက အမျိုးသမီး နဲ့ ကလေးလေး နဲ့ တွဲရိုက်ထားတာ မောင် မဟုတ်နိုင်ဘူးလို့ အကြိမ်ကြိမ် ငြင်းဆန်ခဲ့ပေမဲ့ ကိုယ့်မျက်စေ့နဲ့ ကြည့်နေတာကို ကိုယ်ကိုတိုင် လက်မခံချင်လို့ မှ မရတာ… မောင်ရေ ရက်စက်တယ်ဆိုတဲ့ စကားထက် ပြင်းထန်တာ ရှိနေသေးရင် အဲ့ဒီ စကားတွေ အားလုံးဟာ မောင် အညို့ အပေါ် လုပ်ရက်ခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်တွေပါ… ဒါပေမဲ့ မောင့်ကို အညို မုန်းလို့ မရတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ခံပြင်းတယ်.. တနေ့ က သူ ရောက်ပြီဆိုတဲ့ အကြောင်း မောင် အညိုဆီကို ဖုန်းဆက် အကြောင်းကြားတုန်းက အညို ဘာလို့မမေးခဲ့လဲ..ဘာလို့ ဘာမှ မပြောခဲ့ရတာလဲ… ရင်ထဲမှာ ၀မ်းနည်းတာတွေ ဆို့ နင့်နေတာနဲ့ ဘာစကားမှ မဖွင့်ဟနိုင်ခဲ့ဘူး… မောင့်အသံကြားရတဲ့ ခဏ အညို အရာရာကို မေ့ထားလိုက်တာလား… ၀မ်းနည်းမှုတွေက လှိုက်ခနဲ ခုန်နေတဲ့ နှလုံးသား အစုံကို ဆွဲခါ ဖျစ်ညှစ်နေသလို နာကျင်လွန်းလှပါတယ်… ဒီအချိန်မှာ လေပြည်နုလေး ဖြတ်ပြေးသွားရင်တောင် လဲပြိုကျသွားနိုင်တယ်…အညိုရဲ့ ကြေကွဲမှုတွေက ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ပါပဲ…အညိုရဲ့ ဂုဏ် မိဘအသိုင်းအ၀ိုင်းဂုဏ် သိက္ခာ တခုမှ မရှိတော့ပါလား…
ပတ်ဝန်းကျင်က အညို့ ကို ဘယ်လိုတွေ ကြည့်နေ မြင်နေ ဝေဖန်နေကြမှာလဲ…ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက်သိပြီး အညို့ ကွယ်ရာမှာ ဟားတိုက် ရယ်မောပြီးပြီလဲ…အရင်က ရိုးရိုးသားသား ကြည့်တဲ့ အကြည့်တွေကိုတောင် အခုဆိုရင် အညို ကြောက်လာတယ်.. လူတွေကို အညို ရဲရဲ မကြည့်ရဲတော့ဘူး… အမှားလုပ်ထားတဲ့ တရားခံ တစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်မျိုးလား… အညိုမှာ ရင်ဆိုင်ဖို့ ခွန်အားတွေ ပျောက်ဆုံးကုန်ပြီ…ဒါကြောင့် အညို မောင်နဲ့ ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကို ကျောခိုင်းပြီး ဒီခရီးကို ထွက်လာခဲ့တာ..
မနေ့ က အညို ထွက်စာတင်တော့ မသီတာက အရမ်းကို အံ့သြ သွားပုံရတယ်.. စကားတွေတောင် မထွက်တော့ဘူး….အညိုကတော့ ကျန်းမာရေးကြောင့်လို့ ပဲ ပြောခဲ့တယ်…မသီတာ ယုံယုံ မယုံယုံ ဒီပတ်ဝန်းကျင်က ထွက်ပြေးသွားချင်ဖို့ သာ အဓိကပါ….မောင့်ကို အကြောင်းကြားပြီးပြီလို့လည်း လိမ်ခဲ့လိုက်တယ်…. တကယ်လည်း အညို့အခြေနေက ခပ်ယဲ့ယဲ့…စိတ်က ခံစားချက်ဟာ လူကို ဆွဲချလိုက်သလိုပါပဲ… တကယ့်ကို ရောဂါသည်ပုံ ဖြစ်သွားတယ်… ဒီအကြောင်းတွေ ဘယ်သူကိုမှ ထပ်မသိစေချင်ဘူး… နောက်ရင်ဆိုင်ရမှာကို တွေးပြီး အညို ကြောက်ကြောက်လာတယ်… သူများရဲ့အငယ်အနှောင်း ဘ၀မျိုး သူများ အသိုက်အမြုံကို ခွဲတဲ့ ဘ၀မျိုး သူမ မရချင်… သူမ အတွက်ဘယ် ဘ၀က ၀ဋ်ကြွေးတွေမို့ ဒီလောက် အထိ ရုပ်ဆိုး အကျည်းတန်ခဲ့ရတာလဲ… ဒီလို ဘ၀မျိုးထဲမှာ သိသိကြီးနဲ့ ဆက်လက်ပြီးတော့ မမိုက်ချင်တော့ပါ… အမေ့အိမ်ကို လွမ်းပေမဲ့ သမီးမိုက်တစ်ယောက်ကြောင့် မိဘတွေကို မပူလောင်စေချင်တော့ပါဘူး… သမီးကို ခွင့်မလွှတ်ပါနဲ့ အဖေနဲ့ အမေရယ်…စိတ်ထဲကသာ အကြိမ်ကြိမ် ကန်တော့ တောင်းပန်နေမိတယ်…
“ လက်တွေ့ မှာ ခဏခဏ ခြေချော်လဲတာကို ပြန်ထနိုင်ပေမဲ့ ဘ၀ရဲ့ လှည့်ကွက်တွေထဲ ချော်လဲခဲ့တဲ့ သူမအတွက်တော့ ပြန်ထဖို့ နေနေသာသာ နလန်မထူနိုင်လောက်အောင် လဲပြို ကျခဲ့ပြီလား…”
ရထားကြီးက မမြန်ပေမဲ့ ခပ်မှန်မှန် ခုတ်မောင်းနေတယ်… ရထားပေါ်ပါတဲ့ လူတွေထဲမှာ ကိုယ့်ကို သိတဲ့သူများပါလာမလား..ကိုယ့်အကြောင်းကို သိတဲ့သူတွေ ရှိမလားလို့တွေးပူမိပြန်တော့ ရထားပေါ် တက်တာတောင်မှ သူများတွေလို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ မတက်ရဲတဲ့ ဘ၀…အညို့ ဘ၀အကြောင်းတွေက ဘယ်လိုမှ မလှမပ… ကံကြမ္မာ ငြိုးချက်က ပြင်းထန်လွန်းတယ်… ရထားပေါ် လူတွေ အိပ်ချိန်မှာ အညိုက လူမမြင်အောင် တိတ်တဆိတ် ရှိုက်နေရတယ်…စည်းချက်မမှန်တဲ့ အသက်ရှုသံတွေနဲ့ မောလွန်းလို့လူကလည်း မျော့မျော့သာ ကျန်တော့သည်… အစာကိုတော့ ဗိုက်ထဲက ကလေးအတွက် စားတယ်ဆိုရုံ စားနေရပေမဲ့ သိပ်အားမပါလှဘူး… အစ်ကိုကြီးဆီ မြန်မြန်ရောက်ပါစေလို့ သာ..ဆုတောင်းနေရသည်…
ညို့ အစ်ကိုကြီးက တစ်နယ်သူနဲ့ အိမ်ထောင်ကျလို့ မိဘတွေနဲ့ ခွဲနေတာ တော်တော်ကြာပြီ…ဖုန်းအဆက်အသွယ် တစ်ခါတစ်လေ ရှိတာကလွဲလို့ မောင်နှမချင်း သိပ်မတွေ့ ဖြစ်… အစ်ကိုကြီးက အညို့ ကို ချစ်သည်…ညီမနှစ်ယောက်ထဲမှာ အညို့ ကို ပိုချစ်သည်..အညို့ ရဲ့ ညီမလေးကတော့ အမေတို့ နှင့် နေကာ ရန်ကုန်မှာပဲ စာပေးစာယူတက်နေသည်… အစ်ကိုကြီး အိမ်ထောင်ကျတုန်းက အညို ဖြင့် ၀မ်းနည်းလိုက်ရတာ..ငိုလွန်းအားကြီးလို့ တစ်ပတ်လောက် အိပ်ယာထဲ နေခဲ့ရတာ..အဲ့ဒီတုန်းက အစ်ကိုကြီးတို့အညိုနေကောင်းသည် အထိ ရန်ကုန်မှာ နေပေးရသည်.. အိမ်ထောင်ကျကာစမို့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေသင့်ပေမဲ့ အညို့ အတွက် အစ်ကိုကြီး ပူပန်နေရသည်.. ယောက်မ ဖြစ်သူက နားလည်မှု ရှိလို့ သာ တော်တော့သည်…
အခုလို အညို့ ရဲ့ အဖြစ်ကို အစ်ကိုကြီးသိရင် ဘယ်လိုနေမလဲ… အညို အစ်ကိုကြီးကို သိပ်တွေ့ ချင်လာသည်… ရထားပေါ်က ဆင်းတော့ အညို အားအင် မရှိတော့ လူက ယိုင်သွားသည်…ဘေးက ထိန်းမတ်ပေးသူကို မော့ကြည့်မိသည်… “ အဆင်ပြေရဲ့ လား..ဘယ်သွားမလို့ လဲ..” အညို မျက်ဝန်းတွေက အရောင်မရှိ ဖျော့တော့နေသည်… အညို စကားမပြန်ဖြစ်..လက်ထဲမှာ လိပ်စာရေးထားသော စာရွက်ကလေးကိုသာ ထုတ်ပြမိသည်…
“ အော် ဒီလိပ်စာသွားမှာလား ကျွန်တော်နဲ့ လိုက်ခဲ့ပါ..ကျွန်တော်လည်း အဲ့ဒီကို သွားမှာ.. ” အညို အင်းမလှုပ် အဲမလှုပ်… စိတ်ကို တင်းကာ သူ့ နောက် လိုက်သွားမိသည်…“ ဟိုရှေ့ မှာ မြင်နေရတဲ့ အိမ်က ညီမသွားမဲ့နေရာပဲ..” အညို အားယူလှမ်းရင်း အိမ်ရှေ့ ရောက်တော့ အစ်ကိုကြီး မျက်နှာကို ၀ိုးတိုးဝါးတာမျှ မြင်လိုက်ရပြီး အညို လောကကြီးကို ခေတ္တမေ့သွားခဲ့သည်…
နိုးလာတော့ အစ်ကိုကြီးနဲ့ အတူ ယောက်မရော အညို့ ကို ကူညီခဲ့တဲ့သူပါ…ပူပန်နေတဲ့ မျက်နှာများနဲ့ ဝိုင်းကြည့်နေကြသည်…“ ညီမလေး အညို သတိယပြီလား..စိတ်ပူလိုက်ရတာ ညီမလေးရယ်… ဘယ်လိုများ ဖြစ်ရတာလဲ..အစ်ကိုကြီးကို ပြောပါဦး..” အညို အင့်ခနဲ့ ရှိုက်ကာ ငိုချလိုက်ပါတော့သည်… “ ညီမလေးရယ် ..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ညီမလေးနားမှာ အစ်ကိုကြီး ရှိတာပဲ…ပြောစရာရှိတာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောမှ အစ်ကိုကြီးတို့ ဘယ်လို လုပ်ရမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားလို့ ရမှာပေါ့..ခုနက ဆရာဝန်ကြီး ပြောလို့ ညီမလေးရဲ့ အခြေနေကို အစ်ကိုကြီး သိသင့်သလောက် သိပြီးပါပြီ…” အစ်ကိုကြီးက အညို နဖူးက ဆံပင်လေးတွေ သပ်တင်ပေးရင်း ကြေကွဲနေပုံရသည်… အညို တော်တော်နှင့် အငို မတိတ်… ယောက်းမနှင့် ဟိုလူလည်း အပြင်ရှောင်ထွက် ပေးကြသည်…
အညို့ ဘ၀အကြောင်းကြားပြီး ပိုင်ညိုဦး တစ်ယောက် ယောက်ယက်ခပ်နေသည်…ဒေါသတွေလည်း ပွက်ပွက်ဆူနေသည်… သက်မင်းမောင် ဆိုတဲ့ ကောင်ကို အနားမှာ ရှိလျှင် အသေရိုက်သတ် လိုက်ချင်သည် အထိ… ညီမလေး အညို ရုတ်တရက် သူငယ်ချင်း ထွန်းလတ်နှင့် အတူရောက်လာပြီး အိမ်ရှေ့မှာ မေ့လဲ သွားတော့ ထွန်းလတ်ကိုပင် သူ အထင်လွဲလိုက်သေးသည်.. အညို သတိလစ်နေတုန်း ထွန်းလတ် သေချာ ရှင်းပြမှ အညိုနဲ ဒီကောင် သတ်သတ်ဆီလာတာကို သိရသည်… သူငယ်ချင်းထွန်းလတ်က သူ့ အတွက် ယုံကြည်ရသော ညီအစ်ကိုလိုနေတဲ့ သူငယ်ချင်းမို ညီမဖြစ်သူရဲ့ အဖြစ်ကို ရှက်ရှက်နှင့် ဖွင့်ဟတိုင်ပင်မိသည်…
“ ငါဘာလုပ်ရမလဲကွာ..ငါ့ညီမလေး ကံဆိုးလိုက်တာ…သူ့ မှာ ဘာလို့ ဒီအဖြစ်မျိုးနဲ့ ကြုံရပါလိမ့်.. ငါ့ညီမလေးက သိပ်အပြစ်ကင်းတာကွ… သူ့ ရဲ့ အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ မျက်နှာလေးက အခုတော့….” ပိုင်ညိုဦး ၀မ်းနည်းစွာ စကားကိုပင် မဆက်နိုင်တော့ ထွန်းလတ် မနေနိုင်..“ သူငယ်ချင်း မင်းဒီလို ခံစားနေရလို့ ရော ပြဿနာရဲ့ အဖြေက ထွက်မှာလား…ငါတို့ ခေါင်းအေးအေး နဲ့ ဘာလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကို စဉ်းစားရအောင်လား..” ..“ အေးကွာ..ငါလည်း ပူထူပြီး ဘာမှ မလုပ်တတ်တော့ဘူး…မင်းတတ်နိုင်ရင် ကူညီပါဦးကွာ..” ထွန်းလတ်က ခေတ္တမျှ စဉ်းစားဟန်ပြုပြီး တွေးတွေးဆဆနှင့် “ မင်းမိန်းမ မမော်က ကလေးမရနိုင်ဘူးနော်…အဲ့ဒါ ပတ်ဝန်းကျင်က သိလား..” ထွန်းလတ် စကားကြောင့် ပိုင်ညိုဦး နားမလည်သလို ကြည့်သည်.. “ ဒီလိုလေကွာ… မင်း မိန်းမနဲ့ အညို့ ကို ကိုယ်ဝန် ပြိုင်ရှိခိုင်းလိုက်..” ..သူ အံ့သြတကြီး ပြန်ကြည့်တော့..“ မကြည့်နဲ့ ဟေ့ကောင်..ငါပြောတာ ဆုံးအောင် နားထောင်ဦး..ဒီလိုလေကွာ..မင်းမိန်းမ နဲ့ မင်းညီမကို ကိုယ်ဝန်တူတူ ရှိတဲ့ သဘောဖြစ်အောင် လုပ်…လတ်တလော ငါက မင်းညီမ ယောကျာ်း ယောင်ဆောင် ပေးမယ်..ပြီးရင် ငါတို ရော မင်းတို့ လင်မယားပါ မြို့ ကြီးကို တက်မွေးမယ်ဆိုပြီး သတင်းလွှင့်… ပြီးရင် ငါ့နယ်ကို သွားကြမယ်… မင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲ..ငါက တစ်ကောင်ကြွက်… မိဘတွေ ရှိတုန်းကသာ ဘွဲ့ လေးတစ်ခုလောက်တော့ ရအောင်ယူပါသားရယ်လို့ ပြောလွန်းလို့ ..ဘွဲ့ တစ်ခုရထားတာ… အခုမိဘတွေလည်း ဆုံးရော…ကြုံရာမှာ စီးပွားရေး လုပ်တဲ့ကောင်လေကွာ..”.. ထွန်းလတ် စကားကို ပိုင်ညိုဦး လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားမိသည်.. ထွန်းလတ်က မိဘတွေ ထားခဲ့တဲ့ လက်ငုတ်လက်ရင်း လယ်တွေကို စာရင်းငှား ထားပြီး နယ်စုံလှည့်ကာ ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ် လုပ်နေသည်..
ဟိုတစ်ခါ ပိုင်ညိုဦးတို့ လင်မယား မြို့ တက်တုန်း အိမ်ထောင်သက် ကြာပေမဲ့ ယနေ့ ထိ ကလေးမရတာကြောင့် သူ့ မိန်းမ ကိုယ်ဝန်ဆောင်လို့ ရမရ ၀င်စစ်ခဲ့ရာမှ..မ၀င်းဝင်းမော်ရဲ့ ချွတ်ယွင်းချက်ကြောင့် ကလေး မရနိုင်ဆိုတာ သိတော့ သူတို့ လင်မယား စိတ်မကောင်းစွာ ပြန်လာခဲ့ကြသည်… ထို အကြောင်းအား မမော်က ရှက်လှသည်ဆို၍ မည်သူ့ ကို မျှ မပြောဖြစ်..ထွန်းလတ် တစ်ယောက်သာ သူ ပြောဖြစ်သည်.. “ မင်းညီမ မီးဖွားပြီးမှ မင်းမိန်းမမွေးတယ်ဆိုပြီး ကလေးခေါ်ပြီး ပြန်လာပေါ့ကွာ.. ဒီကြားထဲ မင်းကတော့ ပြန်လိုက် သွားလိုက် လုပ်ပေါ့..” ..“ အေးကွာ..ညီမလေးကို တိုင်ပင်ကြည့်တာပေါ့..”..ပိုင်ညိုဦး သက်ပြင်းကိုသာ လေးတွဲ့ စွာ ချလိုက်မိတော့သည်…
“ ဘယ်လို အစ်ကို.. အစ်ကို သူ ငယ်ချင်းကို အညိုက..ပြီးတော့ ကလေးကို ညိုက ဘာလုပ်ရမယ်…” အညို မောင်ကလွဲပြီး ဘယ်ယောကျာ်းကိုမှ သူ့ ဘ၀ထဲ ဆွဲမသွင်းချင်…“ ညီမလေး…ဒီအတိုင်းနေလို ညီမလေးပဲ အရှက်တကွဲ ဖြစ်မှာလေ.. ထွန်းလတ်ကလည်း ယုံကြည်ရတဲ့သူ တစ်ယောက်ပါ..လူတွေကို လက်ဆုပ်လက်ကိုင် ပြစရာ အစ်ကိုကြီးတို့ မိသားစု ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် ဒီတစ်နည်းပဲ ရှိတော့တယ်… နာမည်ခံရုံ သက်သက် ထွန်းလတ်က ကူညီတာပါ…ပြီးတော့ ညီမလေးက ဒီကလေးကို မွေးဖြစ်အောင် မွေးချင်တာလေ..အစ်ကိုကြီးတို့ က ညီမလေးရဲ့ ကျန်းမာရေးကို သိပ်အားရတာ မဟုတ်ဘူး… ဒါပေမဲ့ ညီမလေး ဆန္ဒ ဖြစ်မြောက်အောင် အစ်ကိုကြီးတို့ က အဖက်ဖက်က စဉ်းစားပြီးမှ စီစဉ်ရတာပါ.. ပြီးတော့ အစ်ကိုကြီးတို့ ဒီကလေးကို ဆက်မွေးမယ်…ညီမလေးက ညီမလေး စိတ်ကြိုက် ဘ၀သစ်ထူထောင်ပေါ့…” အစ်ကိုကြီးက သူမအတွက် စဉ်းစားတာ သူမသိသည်.. အညို ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိပ် အားမရ… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အညို ဒီကလေးကိုတော့ ဖြစ်အောင်မွေးမည်…အညို အသက်နဲ့ လဲ ရင် လဲရပါစေ..ဖြစ်အောင်မွေးမည်… ဘာကြောင့် အညို ဒီလောက် စိတ်ထက်သန်နေသည်ကိုတော့ သူမ မစဉ်းစားချင်တော့… မောင့်ကို သူမ ချစ်ခဲ့တာက အဆုံးထိ ရည်ရွယ် ချစ်ခဲ့တာလေ… မောင် အညို့ နားမှာ မရှိပေမဲ့ မောင်ကိုယ်ပွားလေးကို အညို လိုချင်သည်… မြင်ချင်သည်… အစ်ကိုကြီး စကားကို သူမ ခေါင်းညိတ်လက်ခံလိုက်သည်…
“ ကဲ သူငယ်ချင်း ကိုယ့်အိမ် ကိုယ့်ယာလို သဘောထား..ဘာမှ အားမနာနဲ့ ..ညီမလေးလည်း ကိုယ့် အစ်ကိုလို သဘောထား..အားမငယ်နဲ့ နော်..” ..သူတို့ တွေ ထွန်းလတ်အိမ်ရောက်တော့မှ အနားယူကြရသည်…တစ်လမ်းလုံး အတွေး ကိုယ်စီမို့ဘာစကားမှ မယ်မယ်ရရ မပြောဖြစ်.. အိမ်ရှင် ထွန်းလတ်ကတော့..နေရာ ထိုင်ခင်း ပြင်ဆင်နေသည်..မမော်ကတော့ ပိုင်ညိုဦး စကားကို အမိန့် တစ်ခုသဖွယ် ဘာမှ မငြင်းဆန်ခဲ့ အမြဲ နာခံမြဲ… ခုလည်း ပိုင်ညိုဦး စီစဉ်တာကို ဘာစောဒက မှ မတက်..သူမကလဲ ကလေး ရူး ရူးနေတာဆိုတော့..ကလေးတစ်ယောက် ရမည့်အရေးမို့ သူမလည်း ပျော်ရွှင်နေသည်… ပိုင်ညိုဦးနှင့် အညိုတို့ မောင်နှမ နှစ်ယောက်ကသာ..ဆို့ နင့် ခံစားနေရသည်.. ဒီဒုက္ခတွေ အခက်ခဲတွေကို ညီမလေး အောင်အောင် မြင်မြင် ဖြတ်သန်းသွားနိုင်ပါစေလို့ အစ်ကိုကြီး ဆုတောင်းနေပါတယ် ညီမလေးရယ်…
“ ခုတစ်လော အညို ကြည့်ရတာ သိပ်အားမရဘူး ခဏခဏလည်း မောနေတယ် အစ်ကို… အစားလည်း သိပ်မစားဘူး.. ကိုယ်ဝန်က လရင့်နေပြီဆိုတော့ စိတ်ပူတယ် အစ်ကိုရယ်..အော် သူမှာတဲ့ဆေးတွေရော ပါခဲ့ရဲ့ လား…” ပိုင်ညိုဦး ခရီးရောက်မဆိုက် ညီမဖြစ်သူ အခြေနေကို မမော်က ဆီးပြောသည်… သူနှင့် ထွန်းလတ်က အလုပ်ကိစ္စနှင့်မို့ မကြာခဏ ခရီးထွက်ရသည်… အညို ကို မမော်နှင့်သာ ထားခဲ့ရသည်…“ ဟင်း..ဆေးတွေက ပါပါတယ်.. ညီမလေး ကြည့်ရတာ တအား ပိန်လာတယ်…အစ်ကိုလည်း သိပ်အားမရဘူးကွာ…ခက်တာက သူ ကဆေးရုံ မသွားချင်ဘူးတဲ့… သူကိုယ်တိုင် ဆရာဝန် ဖြစ်နေတော့ အစ်ကိုတို့ လည်း ပြောရခက်တယ်ကွာ..ဒီတစ်ခေါက် အစ်ကို ရန်ကုန်ပါ ရောက်ခဲ့တယ်…အမေတို့ ဆီ ရောက်တော့..အဖေက အခြေနေ သိပ်မကောင်းဘူး..အညို့ ကို အရမ်းတွေ့ ချင်နေတယ်…”…
အဖေ့တွင် သွေးတိုးရော နှလုံးရော ဆီးချိုပါဆိုတော့ အဖေ့ အခြေနေက သိပ်မကောင်း… အဖေက သမီးလို့ တိုးတိုး တစ်ခွန်းပြောတော့ အမေနဲ့ အငယ်မလေးက မျက်ရည်ကျသည်… အမေက သူ့ ကို ခေါ်ကာ တိုးတိုးစကားဆိုသည်..“ မင်း အဖေကို ဆေးရုံမတင်ခင်တစ်ညက သူ အမေ့ကို စကားတွေ ပြောတယ် သားရယ်…သမီးညို ကို သူအိပ်မက် မက်တယ်တဲ့… အိပ်မက်ထဲမှာ သမီးက မျက်နှာ မကောင်းဘူး..အရမ်းကို အားငယ်နေတယ်တဲ့..အဲ့ဒီ စကားတွေကို သူ ဒီလောက်မောနေတဲ့ ကြားက မနည်း အားယူပြီး အမေ့ကို ပြောတယ် သားရယ်..” အမေ သူ့ ရင်ခွင်ထဲ ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုချတော့သည်..အဖေ့ရှေ့ တွင် ဟန်ဆောင်နေသော အမေ သားတစ်ယောက်ရှေ့ ကျတော့ ကလေးတစ်ယောက်ပမာ အားကိုးတကြီး ဖက်ကာ ငိုရှာသည်ပေါ့… ပထမတော့ သူ အမေ့ကို အညို အကြောင်း ပြောမလို့ ပါ…အဖေ့ရဲ့ အပူနဲ့ တင် အမေ့ မျက်နှာက ရုပ်သိပ်မပေါ်… အညို့ အကြောင်းပါကြားရင် အမေ ခံနိုင်ရည် ရှိမည်မထင်..ဒါကြောင့် သူ အငယ်မလေးကိုသာ အကျိုးအကြောင်းရှင်းပြခဲ့ရသည်… မိဘတွေ အနားတွင် အကြီး ဖြစ်သော သူရော အညိုပါ တာဝန် မကျေခဲ့…အငယ်မလေးကိုသာ အဖေနဲ့ အမေ့ကို ဂရုစိုက်ဖို့ မှာကာ သူ ပြန်လာခဲ့ရသည်…
“ ညီမလေး နေသာရဲ့ လားကွယ်..” သူ ၀ယ်လာသော ဆေးတွေကို အညို့ ကို သွားပေးပြီး အခြေနေကို မေးမိသည်.. “ ညီမလေး နေကောင်းပါတယ် အစ်ကိုကြီး… ဒီဆေးတွေ သောက်နေတာပဲလေ..ညီမလေး အတွက် မပူပါနဲ့ … ဒီကလေးကို ညီမလေး ရအောင် မွေးမှာပါ…” အညို ကြည့်ရတာ စိတ်တော့မလျှော့..
ဒါပေမဲ့ အတွင်းမှာ ခံစားနေရတာကို ညီမလေး မျက်ဝန်းတွေက တဆင့် အစ်ကိုကြီး ရိပ်မိပါတယ်ကွာ… ထွန်းလတ်ပင် အညို အပေါ် သံယောဇဉ်တွယ်နေမိသည်… ဆရာဝန်မလေး တစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်က ဆိုးလွန်းသလို အညို့ အတွက် သူလည်း ပိုင်ညိုဦးနှင့် ထပ်တူ ခံစားမိသည်… သူတို့ နှစ်ယောက် သက်ပြင်း ကိုယ်စီ ချလိုက်ကြသည်…
အချိန်တွေ တရွေ့ ရွေ့ ကုန်ဆုံးကာ အညို့ မီးဖွားရက်ပင် ရောက်လာခဲ့သည်… ဧည့်ခန်းတွင် ပိုင်ညိုဦးနှင့် ထွန်းလတ် ယောက်ယက် ခတ်နေသည်… အိပ်ခန်းထဲတွင်တော့ အညို့ ရဲ့ ညီးငြူ စုပ်သပ်သံတွေက ဆက်တိုက် ကြားနေသည်… တစ်ခါတစ်ခါ အသက်ရှုသံ ပြင်းပြင်းတွေပါ ပါလာသည်… သူနာပြု ဆရာမလေးနှင့် အတူ လက်သည်ရော မမော်ပါ အခန်းထဲတွင် အောင်အောင်မြင်မြင် မွေးဖွားနိုင်ရန် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားနေကြသည်… အညိုက ခေါင်းအရမ်းမာသည်… ဆေးရုံကို ဘယ်တော့မှ မသွားဟု တင်းခံနေတော့ ယခုလို စွန့် စွန့် စားစား မွေးနေရသည်ပေါ့… အညိုဆေးရုံ မသွားချင်တာ သူသိသည်… ဟိုကောင်နှင့် အဆက်အသွယ် ရှိသူ တစ်ယောက်ယောက် သိသွားမှာကို မလိုလား..ပြီးတော့ အညို နှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဖြစ်ဖူးသူတွေလည်း ပါကောင်းပါနိုင်သည်… သူကိုယ်တိုင်ကလည်း အညို ခုလို အဖြစ်မျိုးကို လူများများ အသိမခံချင်ခဲ့…
“ ၀ါးးးးးး..” အခန်းထဲမှ ၀ါးခနဲ စူးစူးဝါးဝါး ကလေးငိုသံကြောင့် သူနှင့် ထွန်းလတ် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ၀မ်းသာ အားရ ပြိုင်တူ ဖက်မိကြသည်….. “ အညို အညို…အစ်ကိုရေ လုပ်ပါဦး…” အခန်းထဲမှ မမော် ရဲ့ ငိုသံကြီးကြောင့် သူတို့ အပြေးအလွှား သွားကြည့်တော့ အသက်မဲ့နေပြီ ဖြစ်သော ညီမလေး အညို… မျက်လုံးတွေက ဖွင့်လို့ … သူ့ ကို တစ်ခုခု မှာနေသယောင်… သူမ ဆုပ်ထားတဲ့ လက်သီးတွေက ဒီကလေးကို သူမ ဘယ်လောက် အသက်နဲ့ ရင်းခဲ့ရသည်ကို ဖော်ပြနေသယောင်… သူမ ကတိအတိုင်း ကလေးကိုတော့ လူ့ လောကထဲ ရောက်အောင် ခေါ်ခဲ့ပြီး သူမကတော့ အားလုံးနှင့် ဝေးရာကို ထွက်သွားခဲ့သည်…. “ ညီမလေးးးးးးးးးး…..” အညိုကို သူ ဖက်ပြီး အားကုန်အော်ကာ ငိုချ လိုက်မိတော့သည်…..
အညို့ နာရေးကိစ္စ အ၀၀ကို ထွန်းလတ်ကသာ ဦးဆောင် စီစဉ်သည်… ပိုင်ညိုဦး ဒီအဖြစ်ဆိုးကြီးကို အိပ်မက် တစ်ခုလိုသာ သဘောထားချင်သည်… သူ့ ညီမလေး အညို သူတို့ ကို စောစောစီးစီး လောက ထဲက ကျောခိုင်း ထွက်သွားမည်ဟု သူ ဘယ်တုန်းကမှ မတွေးထားခဲ့… ခုတော့ ညီမလေးက သူ့ သမီးလေးကို သူ့ ကိုယ်စား ထားသွားခဲ့သည်… “ ညီမလေး ရေ….စိတ်ချလက်ချသာ သွားပါတော့ကွာ… သမီးလေးကို အစ်ကိုကြီး တစ်သက်လုံး ကိုယ့်သမီးလိ စောင့်ရှောက်သွားပါ့မယ်…ငါ့ညီမလေး ဖြစ်လေရာ ဘ၀တိုင်းမှာ ဒီလို အဖြစ်မျိုးက ကင်းပါစေလို့ အစ်ကိုကြီး ဆုတောင်းပေးပါတယ်… အညိုရေ အမျှ အမျှ အမျှ…”…
အညို့ ရက်လည်ပြီးလျှင် ပြီးချင်း ပိုင်ညိုဦးတို့ ပြန်ချင်ပေမဲ့ ကလေးက ငယ်သေးတာကြောင့် လလည်စောင့်ပြီးမှသာ ပြန်ဖြစ်တော့မည်… “ ကိုပိုင်ညိုဦး ရှိလား ရန်ကုန်က ဖုန်းလာနေတယ်..” သူ့ စိတ်ထဲ ထင့်ခနဲ ဖြစ်သွားသည်… သူ အငယ်မလေးကို ဖုန်းနံပါတ်ပေးခဲ့သည်.. သူ အပြေးတပိုင်း ဖုန်းလာကိုင်တော့ ဖုန်းထဲမှာ အငယ်မလေး ရဲ့ ငိုသံကို ကြားလိုက်ရသည်… အခြေနေကို သူ ရိပ်မိလိုက်သည်…
ဆေးရုံကို သူ ရောက်တော့ “ အစ်ကိုကြီး …..ဟီး ဟီး” အငယ်မလေး သူ့ ကို ပြေးဖက်ပြီး ငိုရှာသည်.. အမေကတော့ အဖေ့ကိစ္စတွေ နှင့် အပူလုံးကြွနေသည်…သူ့ ရဲ့ ရင်တွင်း အပူ သောကတွေကို ဒီမိသားစုကို ဘယ်လို ပြောရပါ့မလဲ..“ အဖေ မဆုံးခင် တစ်ပတ် အလိုလောက်က သူ မညိုကို အိပ်မက်မက်တယ်လို့ ပြောတယ်..သူ့ ကို မညို လာနှုတ်ဆက်တယ်တဲ့…အဲ့နောက်ပိုင်း အဖေ့ အခြေနေ ပိုဆိုးလာတယ်.. အသက်ကယ်ဆေးတွေလည်း လေးလုံးလောက် ထိုးရတယ်…ခုတော့ ခုတော့ အဖေ ညီမလေးတို့ ကို နှုတ်ဆက်သွားပြီ အစ်ကိုကြီးရယ် …..” ညီမလေး အားရအောင် ငိုပါစေလေ…သူ့ ရင်တွေ ကွဲထွက်တော့မည်…“ အစ်ကိုကြီး မညို မညိုရော သက်သာရဲ့ လားဟင်..” အငယ်မလေးက အငို တစ်ဝက်နှင့် အစ်မကို စိတ်ပူစွာမေးတော့ ..သူ ဘယ်လို ပြန်ဖြေရမည်လဲ… သူတွေဝေနေဆဲ “ သား…”…အမေက ခုမှ သူ့ ကို တွေ့ သည် ထင်သည်.. အမေ့ကို ဆီးဖက်ထားလိုက်ရသည်.. အမေလည်း သူ့ အတိုင်းပင် ခံစားနေရရှာမည်… အမေ့ကို ကြည့်ရတာ ယိုင်နေပြီ… သူကိုယ်တိုင်လည်း အခြေမခိုင်ချင်တော့..သို့ သော် သူတောင့်ခံနိုင်ရမည်… သူသာ ပြိုလဲ ခဲ့လျှင် အမေနှင့် အငယ်မလေး ဘယ်သူ့ ကို သွားအားကိုးမလဲ..သူ အံကို တင်းတင်း ကြိတ်ထားမိသည်… “ အမေ အားမငယ်ပါနဲ့ …သားရှိပါတယ်..” “ သမီးလေး အညို ဘယ်တွေ ရောက်နေလဲဟင်… ဖေကြီး ဒီလိုဖြစ်သွားတာတောင် သမီးလေး သိရဲ့ လား… ဖုန်းလည်း မဆက်ဘူး..သူ အဆင်ပြေရဲ့ လား နေရော ကောင်းရဲ့ လား မသိပါဘူး သားရယ်.. အမေစိတ်ပူလိုက်တာ…” အမေက အဖေ့ကိစ္စကို ခဏ မေ့ထားသလိုပင်..အညို့ ကို ပူပင်နေသည်..အော် အမေဆိုတာ သားသမီးကို ဦးစားပေးတတ်တာပါလား… သူ ဘာမှ ပြန်မပြောဖြစ်… တိတ်ဆိတ်စွာ ကြေကွဲနေမိသည်…
အဖေ့ မြေချတဲ့နေ့ … အမေကတော့ တည်ငြိမ်သွားသည့်ပုံစံမို့ စိတ်နည်းနည်း သက်သာရသည်..အမေကို ကြည့်ရသည်မှာ တရားနှလုံး သွင်းနေသည်ထင်သည်… အေးလေ… သွားသည့်သူက သွားနှင့်ပြီ… ကျန်ရစ်သူတွေက ပူဆွေးနေရင် သွားလေသူတွေ ဖြောင့်ဖြောင့် မသွားနိုင် ဖြစ်နေမည်... အမေ့အခြေနေကို အကဲခတ်ကာ သူ အညို့ အကြောင်းကို ဖွင့်ပြောမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ထားသည်…
“ သား အမေ့ကို တစ်ခုခု ပြောစရာရှိလား..” အမေက ပါးနပ်သည်..သူ့ မျက်နှာ အရိပ်အကဲ ကိုကြည့်ကာ တည်ငြိမ်သော လေသံနှင့် မေးသည်… ပိုင်ညိုဦး တွေးတွေးဆဆ နှင့် ချင့်ချိန်နေမှန်း သိတော့..“ ပြောစရာရှိတာ ပြောပါ သား.. လောကဓံကို အမေခံနိုင်ပါပြီ…နောက်တစ်ပတ်လောက်ဆို တရား စခန်း သွားတော့မယ်… အငယ်မလေးကိုတော့ သားနဲ့ အမေအပ်ခဲ့မယ်နော်…”… အော် အမေက သံယောဇဉ် အပူတွေ အကုန် ဖြတ်နေပြီကိုး… အငယ်မလေး မျက်နှာကြည့်တော့ ငိုမဲ့မဲ့ မျက်နှာငယ်လေးနှင့်…“ အညို မရှိတော့ဘူး အမေ…” ပြောရင်း အညိုမျက်နှာကို မြင်ယောင်မိတော့ သူ့ ပါးပြင်တစ်ဖက် မျက်ရည်တွေ လိမ့်ဆင်းလာသည်… အငယ်မလေးက ဟီးခနဲ ငိုချပြန်သည်… သူ့ အမေ့မျက်နှာကို အကဲခတ်သလို ကြည့်တော့ ခဏ မှင်သက်ပြီး အရိပ်တချို့ ဖြတ်ပြေးသွားသည်… ပြီးမှ ၀မ်းနည်းမှုတွေကို ထိန်းထားသော အသံ “ အမေ သိနေတယ်.. သားရယ်…အမေ့ သမီးလေး ကံမကောင်း ရှာ ဘူး ထင်တယ်… ဖေကြီး တစ်ယောက် သမီးလေးကို သတိယနေတုန်းက အမေ ရိပ်တော့ ရိပ်မိတယ်… ဒါပေမဲ့ အမေ မေးလို့ သားဖြေမှာကို အမေ မကြားနိုင်သေးလို့မမေးခဲ့တာပါ.. ဖေကြီးကိုလည်း သိမသွားစေချင်ဘူးလေ..ဒါပေမဲ့ ဖေကြီးကတော့ သိနေပုံရတယ်… သတ္တ၀ါတစ်ခု ကံတစ်ခုပေါ့” အမေက ဆွေးဆွေးမြေ့ မြေ့ ပြောတော့ သူတို့ မောင်နှမ နှစ်ယောက် ငိုမိပြန်သည်… အမေ ဖြေနိုင်သွားပြီလား မျိုသိပ်ထားတာလား…. အမေ့ရဲ့ မျက်ဝန်းတွေ ရီဝေနေသည်… အစ်ကိုကြီး ဆုတောင်းနေပါတယ် …အဖေနဲ့ ညီမလေး ကောင်းရာ ဘုံဘ၀ ရောက်ကြပါစေ…
သက်မင်းမောင်တစ်ယောက် အညို့ ကို ဆက်သွယ်လို့ မရခဲ့…. စိတ်ကတော့ပူသည်..ဒါပေမဲ့ ဒီမှာလည်း စံပယ်ထွေးနှင့် ကိစ္စကို သူ အပြီး ဖြတ်ချင်ဇောနှင့် လောနေသည်… ဒီကိစ္စ အမြန်ပြတ်မှသာ သူနဲ့ အညို ပြည့်ပြည့်၀၀ ပျော်နိုင်မည်..သူလည်း အညို့ ကို စိတ်သန့် သန့် နှင့် ချစ်နေနိုင်မည် မဟုတ်လား…သူနဲ့ အညို မြန်မြန် နီးစပ်ဖို့ အတွက် နောင်ရေးသေချာဖို့ အတွက် သူ ကြိုးစားနေသည်….ဒါတောင် စံပယ်ထွေးက တော်တော်နှင့် လက်မခံ… အလျှော့ မပေး.. အချိန်ဆွဲနေသည်…. နောက်ဆုံး သက်မင်းမောင်ဘက်မှ နင်လိုချင်တာ တောင်းတော့ဟုဆိုမှ လက်ရှိနေတဲ့ အိမ် ခြံ နှင့် ကလေးနာမည်နှင့် ဘဏ်မှာ သိန်းတစ်ရာ ပေးမှသာ သူ သက်မင်းမောင်နှင့် ကွာပေးမည်တဲ့… တကယ်ဆို စံပယ်ထွေးအား သက်မင်းမောင် ညစ်လျှင်ရသည်.. သူတို့ လက်ထပ်စာချုပ်က တကယ်တော့ အကျုံး မ၀င်မှန်း စံပယ်ထွေး မသိ.. ဒါပေမဲ့ ကလေးမျက်နှာထောက်ကာ စံပယ်ထွေး ဆန္ဒကို လိုက်လျောလိုက်သည်… ကိစ္စအားလုံး ပြီးသွားတော့မှ သူ အညို့ ကို အရမ်းတွေ့ ချင်လာသည်…. သူနှင့် အညိုရဲ့ အနာဂတ်ကို စိတ်ကူးနဲ့ ကောင်းကောင်း ပုံဖော်ရင်း ကြည်နူးနေမိသည်… သားတွေ သမီးတွေနှင့် ပျော်စရာကောင်းသော မိသားစုလေး ဖန်တီးမည်…..
သက်မင်းမောင် ဒီနေ့ ပြန်လာမည် ဆိုတဲ့ အကြောင်း အညို့ ကို အကြောင်းကြားလိုသည်…သို့ သော် ဖုန်းလည်း ဆက်လို့ မရသည်မို့သူ အမြန်ပြန် ရောက်မှသာ အကျိုးကြောင်း ရှင်းပြတော့မည်… အိမ်ရောက်တော့ ဖုန်အနည်းငယ် တက်နေသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို သတိထားမိသည်… သူ့ တွင်ပါလာသော သော့နှင့်ဖွင့်ဝင် လိုက်သည်နှင့်…သူ့ ရင်ထဲ အမည်မသိ ဝေဒနာ တစ်ခု ရောက်ရှိလာသည်….သူဘာမှန်းတော့ ရေရေ ရာရာ မသိ… ခရီးပန်းလာသည်မို့ရေအရင်ချိုးလိုက်သည်… ရေချိုးပြီးသည်နှင့် သူ ဆေးရုံသို့ ထွက်ခဲ့လိုက်သည်..
သူ့ ကို မြင်သည်နှင့် မသီတာက “ ဟယ် ကိုသက်မင်းမောင်..ပြန်လာပြီလား…အညိုရော နေကောင်းလား.. ကျွန်မဆီကို ဖုန်းလေး တစ်ချက်တောင် မဆက်ဘူးနော်…” သူ အံ့သြပြီး ဘာပြောလို့ ပြောရမှန်းပင် မသိ…“ ဟဲ့..အစ်မမေးနေတာရော ကြားရဲ့ လား… ဘယ်လို ဖြစ်နေတာလဲ..အူကြောင်ကြောင်နဲ့ ..” မသီတာ သတိပေးမှ အသိဝင်သလိုနှင့်…“နေပါဦး မသီတာ..အညိုက ဒီမှာ မရှိဘူးလား..ဘယ်သွားလို့ လဲ..” “ ဘုရားရေ..” မသီတာ ဘုရားတမိသည်…“ အညို က မင်းဆီလိုက်သွားတာလေ..သူ့ မှာ နေမကောင်းတာက တစ်ဖက် ကိုယ်ဝန်က တစ်ဖက်နဲ့ မို့ သူ အလုပ်ထွက်ပြီး မင်းဆီလိုက်သွားတယ်လေ… ဒါတွေ မင်း မသိဘူးလား… ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်ကုန်တာလဲဟယ်…” မသီတာက နားမလည်စွာ ရေရွတ်သည်… “ ဟင့်အင်း..ကျွန်တော် ဘာမှ မသိပါဘူး အစ်မ…ဘာရယ် အညို့ မှာ ကိုယ်ဝန်ရှိတယ်..ဟုတ်လားအစ်မ…ကျွန်တော့မှာ အိမ်မှာလည်း ကိစ္စလေးတွေ ရှုပ်နေလို့ ..ဖုန်းကို ပုံမှန် မဆက်ဖြစ်ဘူး..ဆေးရုံကို ဆက်တော့လည်း မရဘူး အစ်မရဲ့ ..” “ သြော်…ဟုတ်တယ် ဆေးရုံက ဖုန်းက ပျက်နေတာ တော်တော်ကြာပြီ… ဒါဆို အညိုက ဘယ်ရောက်သွားတာလဲ.. သူ သိပ်နေကောင်းတာ မဟုတ်ဘူး…သူ့ နှလုံးက ”.. မသီတာ အပြောကို သူ ဆုံးအောင် နားမထောင်နိုင်တော့.... သူချက်ချင်းဆိုသလို အိမ်ကို အပြေးအလွှား အိမ် ပြန်ခဲ့သည်…
သူတို့ နှစ်ယောက် အိပ်ခန်းထဲတွင် အညို သူ့ အတွက် တစ်စုံ တစ်ခု ထားခဲ့ လို ထားခဲ့ငြား သူရှာကြည့်သည်…ဘာဆို ဘာမှ မတွေ့ …စာလေးတစ်စောင် စကားလေး တစ်ခွန်းပင် အညို့ သူ့ အတွက် ချန်မထားခဲ့…ဗီိရိုထဲမှာ အညို့ အ၀တ်အစား နည်းနည်းပါးပါး လျော့နေတာကလွဲလို့အရင်အတိုင်းပင်… အညိုက သူ့ အတွက် ဘာမှ ချန်မထားခဲ့သလို သူလည်း အညို့ ကို ရှာမတွေ့ ခဲ့… သူ့ မျက်လုံးတွေ ကျီးကန်းတောင်းမှောက် ရှာရင်း စားပွဲပေါ်မှာ ပန်းအိုးလေးနှင့် ဖိထားသည့် စာအိတ်လေးတစ်ခုကို မျက်စေ့ရောက်သွားသည်..သူ အားရ၀မ်းသာ ဖွင့်ကြည့်မိတော့ သူနှင့် စံပယ်ထွေးတို့ သားအမိ ဓါတ်ပုံ တစ်ပုံသာ… ဟင်….ဒါကို အညို အထင်လွဲသွားတာ ဖြစ်မည်… တောက် တစ်ချက် ပြင်းပြင်းခေါက်လိုက်သည်… သူအရုပ်ကျိုးပြတ်နှယ်..မွေ့ ယာပေါ် ထိုင်ချလိုက်သည်… စိတ်တွေ ဆောက်တည်ရာမရ… ဟာ မဟုတ်ဘူး… အညို ဒါတွေက မောင် ရှင်းခဲ့ပြီးပါပြီ…အညိုရယ် မောင် ပြန်လာတဲ့ အထိတောင် မစောင့်နိုင်တော့ဘူးလား... အညို့ ကို မောင် လိမ်ခဲ့တာ မဟုတ်ရပါဘူးကွာ… မောင့်ကို တစ်ယောက်ထဲ ထားခဲ့တာလား… အညို မောင့်ကို ရှင်းပြခွင့်လေးတောင် မပေးခဲ့ဘူးလားကွာ… အညို့ အိမ်လိုက်သွားဖို့ သူ မရဲပါ… သူ့အပြစ်နဲ့ သူမို့ ..အညို့ မိဘတွေကို ရင်မဆိုင်ရဲ….တစ်ခါဖူးမှ ရင်မဆိုင်ခဲ့ဘူးသော ယောက္ခမများနှင့် သူ မျက်နှာချင်း မဆိုင်ချင်သေး.. သူ အညို့ အိမ်နား သွားပြီး အညို့ အရိပ်များ တွေ့ လိုတွေ့ ငြား စောင့်ကြည့်ခဲ့သေးသည်… ထူးခြားမလာခဲ့… သူ အညို့ ကို တွေ့ အောင် အရင်ရှာကြည့်ချင်သည်…
သူ အညို့ ကို ရှာခဲ့သည်မှာ ရက်မှ လ လမှ နှစ်ပင်ပေါက်တော့မည်… အညို့ ကို မပြောနှင့် အညို့ ရဲ့ သတင်း အစအနလေးပင် ကောက်မရခဲ့… သက်မင်းမောင်ရဲ့ အနာဂတ်တွေ တဖြည်းဖြည်း မှေးမှိန်စပြုလာသည်… ခြေရာဖျောက် ကောင်းလွန်းလှချည်လားကွာ… အညိုရေ မင်းမရှိရင် မောင် မနေတတ်ဘူး… ပြန်လာပါကွာ… မောင့်ကို ရှင်းပြခွင့်လေးတော့ ပေးသင့်ပါတယ်… သက်မင်းမောင် တစ်ယောက် ဝေဒနာတွေ နှိပ်စက်လို့လူရုပ်ပင် မပေါက်တော့… သောက်လိုက်သည့် အရက်က နေ့ စဉ်ရက်ဆက် … လူ နှင့် စိတ်က သိပ်မကပ်… အရာရာဟာ ကံစီမံတာဆိုရင် ကံကြမ္မာရဲ့ ဒဏ်ခတ်မှုက သူ့ အတွက် ဘာကိုမှ ပြင်ဆင်ချိန် မရလိုက်နိုင်အောင်ပဲ ပြင်းထန်လွန်းလှပါတယ်…
ကြာလာတော့ သက်မင်းမောင် တစ်ယောက် ဂယောင် ခြောက်ခြား ဖြစ်လာသည်… သူ့ ရဲ့ စိတ်ကို အညိုက လွှမ်းမိုးနေသည်… တစ်ခါတစ်လေ သူ အညို နှင့်ပင်တွေ့ သလိုလို…. စိတ်ကူးထဲမှာ အညို နဲ့ ခဏခဏတွေ့ ဖူးသည်… စကားတွေဆိုသည်… အညိုက သူ့ ဘ၀ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပင်မက ဘ၀တစ်ခုလုံးကို လွှမ်းမိုးထားလိုက်ပြီ… ကံကြမ္မာရဲ့ ရက်စက်မှုက ထိုမျှနှင့် အပြီးမသတ်သေး.. ဒုက္ခဆိုသည့်အမျိုးက တစ်ယောက်တည်း ဘယ်တော့မှ မလာ…အပေါင်းအသင်းဖွဲ့ ၍ လာတတ်ကြသည် မဟုတ်လား…
သက်မင်းမောင် အညို ရှာပုံတော် ဖွင့်ရင်း ဆိုင်ကယ် အက်စီးဒင့် ဖြစ်၍ ခါးအောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံး လှုပ်မရတော့… ဒီလို ဝေဒနာဆိုးနှင့် ဒုက္ခိတ ဖြစ်သွားရသည့် သားအတွက် ယူကျုံးမရ ဖြစ်ကြရသည်… သားလေးရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ကံဆိုးခြင်းအတွက် ဖြည်မဆည်နိုင်ကြတော့…. “ ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ သားလေးရယ်…” သူတို့ သိပ်ချစ်ရသော သားအတွက် ရင်ကွဲမတတ် ခံစားကြရသည်… ထို့ နောက်ပိုင်းတော့ သက်မင်းမောင် မည်သူနှင့်မျှ စကားမပြောတော့… အညို လို့ တစ်ခါတစ်ခါ တီးတိုး ရေရွတ် တတ်သည်မှ အပ… သူ့ တွင် ဘာခံစားချက်မှ မရှိတော့လောက်အောင်..အေးစက်သွားသည်…
သူ အညို့ ကိုလည်း ဒီအခြေနေမျိုးနှင့် မတွေ့ လိုတော့… အညို ပုန်းလက်စ နဲ့ သူ့ ကို တစ်သက်လုံး ရှောင်ပုန်းနေပါစေတော့… မောင်တို့ ရဲ့ ဖူးစာ ကုန်ချိန်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ မှတ်ယူပါ့မယ်… မောင့်ရင်ထဲက အညို့ ကို ချစ်တဲ့ အချစ်တွေကတော့ မောင် အသက်ရှိသရွေ့ မကုန်မခမ်း ဆက်ရှိနေဦးမှာပါ… ကမ္ဘာကြီးရဲ့ တစ်နေရာမှာ အညို ရှိနေတဲ့ အတွက် မောင် ကျေနပ်နေပါတယ်… အညိုရေ..မင်းနဲ့ အတူကြည့်ခဲ့တဲ့ ကောင်းကင်ကို မင်းတစ်ခါလောက်ကြည့်မလားလို့ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ခဏခဏ မော့ကြည့်မိတယ်ကွာ… မောင့်ရင်ထဲက စကားတွေ အချစ်တွေကို လမင်းနဲ့ ကြယ်လေးတွေက တဆင့်ပဲ မောင် ပြောတော့မယ်နော်… ကြားရဲ့ လား အညိုရေ… အညို့ အပေါ် လှည့်စားရက်ခဲ့တဲ့ မောင့်ရဲ့ ဇာတ်သိမ်းကတော့ အကျည်းတန်ခဲ့ပါပြီ… မောင့်အပြစ်တွေကို ပေးဆပ်ရတယ်လို့ ပဲ မောင် သဘောထားပါတယ်… အညို တစ်ယောက် ကျန်းကျန်းမာမာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ရှိနေနိုင်ပါစေလို့ မောင်ဆုတောင်း နေပါတယ် အညိုရယ်…
“ ဟင် သမီး သဒ္ဒါ ဘာလို့ ငိုနေတာလဲ..” “ ဖေဖေ့ ပုံပြင်က ၀မ်းနည်းစရာ ကောင်းတာကိုး…ဟင့် ဟင့်..” မေသဒ္ဒါညိုကို ကြည့်ကာ ဦးပိုင်ညိုဦး တစ်ယောက် ရင်နင့်မိသည်… “ အော် သမီးရယ် သမီးက ဖေဖေ့ကို ပုံပြောပြပါဆိုလို့ ဖေဖေက ပြောပြတာလေ… ဖေ့သမီးလေးက အရွယ်ရောက်ပြီ… ပညာလည်း စုံတော့မယ်ဆိုတော့ သိသင့် သိထိုက်တာ မမှားသင့် မမှား ထိုက်တာလေးတွေကို အတုယူရအောင် ဖေဖေက ဇာတ်လမ်းဆင်ပြီး ပြောပြတာလေ..ဖေ့သမီးလေးက တကယ် မှတ်နေတာကိုး… ကဲပါ တိတ်တော့ ပုံပြင်ပဲ ဟာကို သမီးရယ်..ဘာလို့ မျက်ရည်တွေ အကုန်ခံမှာလဲ..ကဲ ကဲ မျက်ရည်တွေ သုတ်လိုက် သွားအိပ်တော့နော်… ညဉ့်နက်နေပြီ သမီးရဲ့ … ” .. သူ မမော်ကို စစ်ကူတောင်း သလို လှမ်းကြည့်တော့ မမော်ရဲ့ မျက်ဝန်းမှာလဲ မျက်ရည်တွေ ဝေ့နေသည်… “ ဟုတ်သားပဲ သမီးရယ်..ဖေကြီးက တော်တော်ဆိုးတယ်..ကလေး အိပ်ခါနီးကို ဘာတွေ ပြောမှန်း မသိဘူး..လာ လာ မေကြီး တခြား ပုံပြောပြီး သိပ်မယ်နော်…” မမော်ခေါ်ရာနောက်ကို လိုက်သွားသော သမီးနောက်ကျောကို ကြည့်ကာ သူ သက်ပြင်းကို ဖွဖွ ရှိုက်မိသည်…
ဟိုးဝေးဝေးက မိုးမျှော်တိုက်ကြီးတွေရဲ့ တဆုံး ငေးကြည့်ရင်း…သူအတိတ်ကို ပြန်စဉ်းစားမိသည်… ညီမလေး အညို နှင့် အဖေဆုံးပြီးမကြာ သူနှင့် အငယ်မလေးလည်း လက်ရှိနေနေတဲ့ ရန်ကုန်က အိမ်ကို အမေ့ သဘောတူညီမှုနှင့် ရောင်းကာ ပိုင်ညိုဦး နိုင်ငံခြားကို ထွက်သွားခဲ့သည်… သမီးလေးကို မမော်နှင့် အငယ်မလေးနှင့်အတူ သူငယ်ချင်း ထွန်းလတ်ကပါ ၀ိုင်းဝန်းစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ကြလို့ လည်း သူ လှည့်ကြည့်စရာ မလိုအောင် အလုပ်ကိုသာ အာရုံစိုက် လုပ်နိုင်ခဲ့သည်… တစ်စတစ်စ သူ အဆင်ပြေ လာတော့ သူငယ်ချင်းထွန်းလတ်ကို အငယ်မလေး နှင့်လက်ဆက်ပေးကာ သူရှိရာသို့တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက်ခေါ်ခဲ့သည်…သမီးလေး ပညာရေးအတွက် အစစ အရာရာ သူစီမံခဲ့သည်..သူ့ ရဲ့စနစ်တကျ စီမံမှုနှင့် သမီးလေးရဲ့ ကြိုးစားမှုကြောင့် အခုဆို သမီးလေးက ဆရာဝန်မကြီးတောင် ဖြစ်တော့မည်…
ရာသီနှစ်လ အခါခါ ပြောင်းပေမဲ့ ညီမလေး အညိုကို တစ်ရက်မှ မမေ့ပါဘူး… ညီမလေးရဲ့ အဖြစ်ဆိုးမျိုး မကြုံရလေအောင် သမီးလေးကို သွန်သင် ဆုံးမနေမိတာပေါ့….အခုလောက်ဆို ညီမလေး အညို ဘယ် ဘ၀ ဘယ်ဘုံတွေ ရောက်နေပြီလဲ… ညီမလေးသာ မြင်နိုင်မယ်ဆို သူနဲ့ ချွတ်ဆွတ်တူသော သူ့ အမွေဖြစ်တဲ့ ပါးချိုင့်ကလေးတွေပါ အပိုင်ရထားသော..သူ့ လို ပုံပြင်နားထောင်တာကို နှစ်သက်သော…သူ့ လို ဆရာဝန်မကြီး တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်သော သမီးလေး မေသဒ္ဒါညို ကို မြင်ရင် ရောက်ရာကနေ ကျေနပ်နေမှာပါ… ဦးပိုင်ညိုဦး တစ်ယောက် ပြုံးနေတာလား ၀မ်းနည်းနေတာလားတော့ မသိပါ…. သူ အမြင်တွေ မှုန်ဝါးနေတဲ့ အခိုက် မျက်စေ့ကို ခေတ္တ မှိတ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ ပါးပြင် တလျှောက် ပူပူနွေးနွေး မြစ်နှစ်စင်းက အလိုလို စီးဆင်းသွားပါတော့သည်….
မှတ်ချက်။ ။ စာဖတ်သူ ပရိသတ်များကို ကာရံ တစ်ခုလောက် တောင်းပန်ပါရစေ... ခုလို ဇာတ်လမ်းရှည်ကြီးကို အချိန်ပေးပြီး စောင့်ဖတ်ရတဲ့ အတွက် အနူးအညွတ် တောင်းပန်ပါရစေ...စိတ်ကြိုက် မဖြစ်သေးလို့ ပြင်ဆင်ရင်း ကြာသွားတာကို ခွင့်လွှတ် ပေးစေလိုပါသည်.. အပိုင်းခွဲရန် စဉ်းစားထားသော်လည်း ကျွန်မ မောင်နှမများကို အားနားလို့အစအဆုံး ဖော်ပြလိုက်ပါသည်...ကာရံ ဇာတ်လမ်းကို အစအဆုံး ဖတ်ပြီးပြီ ဆိုရင် အချိန်ရပါက ဝေဖန်ချက်လေးများ ရေးပေးစေလိုပါတယ်... ပထမဆုံးရေးတဲ့ ဇာတ်လမ်းမို့လိုအပ်ချက် အားနည်းချက်များ ရှိနိုင်ပါသည်... စာဖတ်သူများ မနှစ်သက်သော သို့ မဟုတ် လိုအပ်သည်ဟု ထင်မြင်ရသော အကြောင်းအရာလေးများ ရှိပါက ကာရံကို ကူညီသော အနေဖြင့် မှတ်ချက်လေးများ ရေးပေးစေလိုပါသည်...သို့ မှသာ..နောက်နောင်တွင် ဒီထက်ကောင်းသော ဇာတ်လမ်းမျိုး ဖန်တီးနိုင်ရန် အထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်...လာရောက် စာဖတ်သူများကို ထာဝစဉ် ကျေးဇူးတင် လေးစားလျှက်....ကာရံဆူး
(မျက်စေ့ ညောင်းသွားသူများအား ကာရံမှ မျက်စဉ်း အလကား ခတ်ပေးပါမည်... မျှော်ရလွန်းလို့ လည်ပင်းရှည်သူများအတွက်လည်း လက်ခမဲ့ လည်ပင်း ဖြတ်ပေးပါသည်.....:P)
Posted by ကာရံဆူး at 2:53 PM6comments:
မေသက်ပိုင်ညို၏ ကံအလှည့်အပြောင်း (၁)
“အညို နေမကောင်းဘူးလား” အညို မျက်နှာလေး နွမ်းနေသည်မို့ သက်မင်းမောင် ဂရုဏာ သက်စွာ မေးတော့ “ မဟုတ်ပါဘူးမောင်..အညို့ ရဲ့ လူနာ တစ်ယောက် ဆုံးသွားလို့ ပါ..” ပြောရင်းက မျက်နှာလေး ငြိုးသွားပြီး မျက်ရည်ပင် ရစ်ဝိုင်းလာသည်မို့ “ သြော်..အညိုရယ် ဆရာဝန်ဆိုတာ ဒီလိုမျိုးတွေ ခဏခဏ ကြုံရမှာလေ…၀မ်းနည်းမနေပါနဲ့ တော့ အညိုရယ်..အညိုကို ကြည့်ရတာ အခုရက်ပိုင်း သိပ်နွမ်းတာပဲ.. နေရော ကောင်းရဲ့ လား…မောင် ပရက်ရှာ တိုင်းကြည့်ပေးမယ်လေ..”.. “ နေပါစေ မောင်ရယ် … အညို ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး..နေကောင်းပါတယ်..” အညို တစ်ယောက် သူ့ လူနာမဆုံးခင်ကလည်း စိတ်ရော လူရော အနားမရ…ပင်ပန်းထားသည်…အခုလည်း လူနာဆုံးသွားသည့်အတွက် စိတ်ထိခိုက်နေလို့ သာ နွမ်းနေတာ နေမှာပါဟု သက်မင်းမောင် တွေးမိသည်… တကယ်တော့ အညိုနေမကောင်းပါ.. မသီတာနှင့် အညို နှစ်ယောက်သာ သိသည်…အညို နှလုံးက သိပ်မကောင်း..အညို အထက်တန်းကျောင်းသူ ဘ၀ကတည်းက အညို့ တွင်လေးဘက်နာရောဂါရှိသည်… ထိုမှ တဆင့်တက်၍ နှလုံးက သိပ်မကောင်းချင်..အရင်က ခဏခဏ အမောဖောက်သည်…အသက်ရှုကြပ်သည်…အညိုက ဘယ်အရာကို မဆို ထိခိုက်လွယ်သည်… ခံစားလွယ်သည်…တစ်ခါတစ်ရံ အလွမ်းအဆွေးကားများ ကြည့်၍ပင် ငိုဖူးသည်… ရင်နှင့် ခံစားပြီး ကြည့်သောအခါများတွင်ဆို ရင်ဘတ်ထဲက မကြာခဏဆိုသလို အောင့်တတ်သည်…သို့ သော် ဆေးကို ကြိတ်သောက်နေ၍သာ လူမသိခြင်း ဖြစ်သည်…အညိုကို လူတွေက ရောဂါသည်ကြီး တစ်ယောက်လို ဆက်ဆံမှာကို အညို မလိုလား… ထို့ ကြောင့်ပင် မည်သူကိုမျှ အသိမပေးခြင်းပါ…
ဒါပေမဲ့ အညိုကလည်း လူမမာ တစ်ယောက်ပုံလို ဘယ်တော့မှ မနေ…အမြဲတမ်း လန်းဆန်း တက်ကြွနေသည်…မိမိ နွမ်းနေလျှင် မိမိ လူမမာပုံပေါက်နေလျှင် မိမိ လူနာတွေကို ဘယ်လို အားပေးရမလဲ..ထို့ ကြောင့် အတတ်နိုင်ဆုံး အညို ကျန်းမာအောင်နေသည်… တစ်ပတ် အတွင်းပင် အညို ပြန်လည် လန်းဆန်းလာပြီး အရင်အတိုင်း ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်လာသည်…
“ အညိုရေ…မောင် နောက် တစ်ပတ်ထဲမှာ အိမ်ခဏ ပြန်ဦးမယ်…အမေလည်း သိပ်နေမကောင်းဘူးတဲ့..” “ ဟုတ်လား..အညိုရော လိုက်ရမလားဟင်..” “ မလိုက်ပါနဲ့ ဦး အညိုရယ်..အညိုက နေလည်း သိပ်ကောင်းသေးတာ မဟုတ်ဘူး.. ပြီးတော့ မောင်တို့ နှစ်ယောက်လုံး ခွင့်ယူလို့ မဖြစ်ဘူးလေ..” အညိုရဲ့ မျက်နှာငယ်ငယ်လေးတွေ့ တော့ သက်မင်းမောင် ရင်ထဲ မကောင်းမိ…အညိုက သက်မင်းမောင် ဘာပြောပြော စောဒက မတက်… နားလည်ပေးသည်..ထို့ ကြောင့် အညို့ ကို တိုး၍ တိုး၍သာ သူချစ်မိသည်…အညိုရယ် တစ်နေ့ တော့ အညို့ ကို မောင့်မိဘတွေဆီ ခေါ်မှာပါ…မောင့်ရဲ့ အရိပ်မည်းတွေ ရှင်းလင်းပြီးတဲ့ တစ်နေ့ ပေါ့..အခုတော့ အညိုလေးကို မညစ်နွမ်းစေချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ပါ…
“ အညိုရေ မောင် မနက်ဖြန် ဂျုတီပြီးတာနဲ့ ကားဂိတ်ဆင်းတော့မယ်နော်…အညိုက နေ့ လည် ဂျူတီဆိုတော့ မောင့်မိန်းမလေးကို သေသေချာချာ မနှုတ်ဆက်နိုင်မှာ စိုးလို့ ပါ..” မောင်က အညို့ ခါးလေးကို ဖက်ရင်း ဆိုတော့..အညို အလိုလို ၀မ်းနည်းလာသည်…“ မောင်ရယ် သိပ်အကြာကြီး မနေနဲ့ နော်…အညို မောင့်ကို သတိယနေမှာ..”..သြော်…အညိုရယ်…တစ်ခုခုဆို ထိခိုက် ခံစားလွယ်တဲ့ အညို အခုလည်း မျက်ရည်တွေ ကျနေပြန်ပြီ…ဒီလောက် ဖြူစင်ပြီး သနားစရာကောင်းတဲ့ အညို့ ကို မောင်လည်း အကြာကြီး မခွဲနိုင်ပါဘူး..သက်မင်းမောင် ရင်ထဲနင့်သွားသည်…“ စိတ်ချပါ အညိုရယ်..မောင်လည်း သိပ်မကြာပါဘူး..တစ်ပတ် ဆယ်ရက်လောက်ပါ..အညို့ ဆီကို အမြန်ဆုံးပြန်လာမယ်နော်..” တကယ်တော့ သက်မင်းမောင် ဟိုမှာ ဒီလောက် မနေချင်ပါ… အမေ့ ကျန်းမာရေး အကြောင်းပြကာ သူ့ ရဲ့ ရှင်းစရာ ဇာတ်လမ်းတွေကို ဒီတစ်ခေါက် အပြီး ရှင်းချင်တဲ့ စိတ်ကြောင့်သာ သူ ပြန်ရမှာ…
ညက အညို တော်တော်နှင့် အိပ်မပျော်၍ မိုးလင်းခါနီးမှသာ အိပ်ပျော်သွားသည်…မနက်ကျတော့ အညိုမနိုးသေး…သက်မင်းမောင်လည်း ဆေးရုံက ဂျုတီပြီးသည်နှင့် ကားဂိတ် တစ်ခါတည်း ဆင်းရမည်မို့အ၀တ်အစားထုတ်တွေ ယူကာ ထွက်လာခဲ့သည်… စိတ်ထဲမှာတော့ လုပ်ရမည့် အစီစဉ်တွေကို အကွက်ချနေမိသည်…
အညို မောင့်ကို နှုတ်မဆက်လိုက်ရ၍ စိတ်ထဲမကောင်း…ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း ဒေါသ ဖြစ်မိသည်…ညက အရင်ရက်တွေက ပင်ပန်းထားသည့် အရှိန်နှင့် တစ်ရေးမှ မနိုး… အညိုနိုးတော့ ၁၁နာရီပင် ခွဲတော့မည်…မျက်နှာသစ်ပြီး စားသောက်ဖို့ ပြင်ဆင်ကာ အစားကို စားသည်ဆိုရုံမျှ စားကာ ဆေးရုံ သွားတော့မည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်ကာ ရေမိုးချိုးသည်..ဟိုရောက်၍ အညိုကံကောင်းလျှင် မောင်နှင့် ဆုံနိုင်သေးသည်…ထို အတွေးနှင့် ခပ်သွက်သွက်ပင် ထွက်လာခဲ့သည်… ဒီနေ့ ဘယ်လိုဖြစ်သည် မသိ…အညို စိတ်တွေလေးနေသည်… ခေါင်းထဲတွင်လည်း မူးနောက်နောက်…
ဆေးရုံရောက်တော့ မောင်က သွားနှင့်ပြီတဲ့…အညိုလည်း စိတ်ပျက်လက်ပျက်နှင့် ၀ပ်ထဲ ၀င်ကာ အလုပ်စလိုက်တော့သည်…စောနေသေးသည် မှန်သော်လည်း လူက အားနေလျှင် မောင့်ကို ပို၍ သတိယလိမ့်မည်… ၀ပ်ထဲက အထွက် လူက ဘယ်လို ဖြစ်သွားသည် မသိ…မိုက်ခနဲ…အနားမှ မသီတာ အဖြတ်နှင့်တိုး၍ လှမ်းဆွဲလို့ သာ အညို ကြမ်းပေါ် မရောက်ချင်းပါ… “ အညို ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ…လာ လာ ” မသီတာက နားနေခန်းထဲ တွဲခေါ်လာသည်…ခဏနေတော့ အညို ပျို့ ပျို့ တက်လာသည်…ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်… အရမ်းအန်ချင်လာ၍ မသီတာက လက်ဆေးကန်တွင်ပင် အညို့ ကို နောက်မှ နှိပ်ပေးသည်…
“ အညို …အစ်မတော့ သိပ်မသင်္ကာဘူး..လာ စစ်ကြည့်ရအောင်..” ဟုဆိုကာ စမ်းသပ်မှုတွေ ပြုလုပ်နေသည်…အညိုလည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိနေသည်… ဆရာဝန် တစ်ယောက်လုပ်နေတာပဲလေ… ဒီလောက်တော့ ရိပ်မိသည်..သို့ သော် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားတာ မရှိ…မောင်ကလည်း ခရီး ထွက်သွားသည်နှင့် တိုက်ဆိုင်စွာပင်…အညို့ တွင် ကိုယ်ဝန် ရှိနေပြီဆိုတာ သိသည်… တွေးရင်း ဘာကို အားငယ်မှန်း မသိ အားငယ်လာသည်…လူတစ်ကိုယ်လုံး အင်အားတွေ ကုန်ခမ်းသွားသလို နုံးဖတ်လာသည်… “ အညို့ မှာ ကိုယ်ဝန် ရှိနေပြီ…ဒါပေမဲ့ အညို့ ကျန်းမာရေး အခြေနေက အစ်မတော့ သိပ်အားမရဘူး…ဘာလို့ ကြိုကြိုတင်တင် မကာကွယ် ထားတာလဲ အညိုရယ်…အညို့ အတွက် အစ်မ စိုးရိမ်တယ်..” မသီတာက ကိုယ့် အစ်မရင်းလို ဖြစ်နေလို့ စေတနာ စကား ဆိုသည်… “ အညိုလည်း ခါတိုင်းလိုပဲ…ပေါ့ပေါ့ဆဆ နေမိတယ် အစ်မရယ်.. အခုလို ဖြစ်လာမှတော့ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ…အညိုတို့ က ဆရာဝန်ဆိုတော့ လူ့ အသက်တစ်ချောင်းကို တန်ဖိုးထားရမှာပဲပေါ့ အစ်မရယ်…”… မသီတာက သက်ပြင်းမောကြီးချကာ အညို့ ကို သနားတဲ့ မျက်ဝန်းတွေနှင့်ကြည့်ကာ “ အေးလေ…ဖြစ်လာမှတော့ အညို့ ကိုသာ ကျန်းမာရေး ကောင်းအောင် လုပ်ပေးရုံပဲ ရှိတာပေါ့..ဒါပေမဲ့ ဘာမှ စိတ်အား မငယ်ပါနဲ့ အညိုရယ်..စိုးရိမ်စရာလည်း မရှိပါဘူး…သက်မင်းမောင် မရှိပေမဲ့ အစ်မတို့ တွေ ရှိနေတာပဲ..သူ့ ကိုရော ဘယ်တော့ အကြောင်းကြားမလဲ…” “ ညကျရင် မောင် ဖုန်းဆက်လိမ့်မယ်..အဲ့ဒီခါကျမှပဲ အသိပေးလိုက်တော့မယ်.. အခုတော့ အညို နားချင်တယ် အစ်မရယ်..” “ ဒါဆို အညို အိမ်ပြန်လိုက်လေ..ဒီကအတွက် ဘာမှ ပူမနေနဲ့ နော်..”…အညိုလည်း စိတ်တွေ လေးလံ နေတာမို့ အိမ်မှာပင် ပြန်နားလိုက်သည်…
အညို ခဏမှေးခနဲ အိပ်ပျော်သွားသည်…နိုးတာနှင့် အိမ်ရှေ့ မှာ ခဏ ထွက်ထိုင်နေတုန်း..စာပို့ သမားတစ်ယောက် အိမ်ရှေ့ လာရပ်သည်မို့ အညို့ အတွက် တော်တော် ထူးဆန်းနေသည်… “ ဒေါက်တာ သက်မင်းမောင်ရှိလား..” “ သြော်…သူ မရှိပါဘူး… ခရီး သွားပါတယ်..ကျွန်မ သူ့ အမျိုးသမီးပါ… ဘာကိစ္စရှိလို့ လဲ…” အညိုလည်း တစ်ခါမှ စာတွေဘာတွေ မလာဖူး၍ စိတ်ဝင်စားနေသည်…“ အော်..ဟုတ်ကဲ့…ဒေါက်တာ သက်မင်းမောင် အတွက် စာပါ…အစ်မလေး လက်မှတ်ထိုးယူထားလို့ ရပါတယ်…” ဆို၍ အညို လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်သည်…စာပို့ သမား ထွက်သွားသွားချင်း အညို စူးစမ်းလိုစိတ်ကို မအောင့်အီးနိုင်..မောင့်စာဆို၍ ပိုလို့ ပင် အံ့သြမိသည်…မောင့်ဆီကို ဘယ်တုန်းကမှ စာမပြောနှင့် ဖုန်းတောင် မလာဖူးပေ….မောင်လာမှ ပေးမည်ဟု စဉ်းစားမိသော်လည်း စာအိတ်ပေါ်မှ လက်ရေးက အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ရဲ့ လက်ရေးဟု ထင်မိသည်…စာအိတ်လေးက နည်းနည်းမာသည်…အထဲတွင် တစ်ခုတော့ တစ်ခုပဲ… စိတ်လှုပ်ရှားလွန်း၍ ရင်ခုန်နှုန်းတွေ မြန်နေသည်… သိချင်ဇောတွေ ထိန်းမနိုင်တော့တာကြောင့် စာအိတ်လေးကို ဖွင့်လိုက်မိသည်….
(မှတ်ချက်။ စာဖတ်သူတွေ မျက်စိတွေ ညောင်းမှာ စိုးလို့ အပိုင်းထပ်ခွဲဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်...ဆက်ရန်လေးကို ထပ်မျှော်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်...:P)
Posted by ကာရံဆူး at 4:02 PM 8 comments:
မာယာဝတ်ရုံနက်ကို လွှမ်းခြုံလို့ 
အသံလုံတဲ့ ခြေသံတွေနဲ့ ဝင်လာပြီး
မျှော်လင့်ချက်တွေ လိမ်းကျံလို့ 
မောင့်ရဲ့ ရက်စက်မှုသွေးတွေ စွန်းထင်နေတဲ့ လက်နဲ့ 
ကျွန်မ နှလုံးသားထဲ စိုက်ချခဲ့တယ်…
အချစ်တစ်ခုကို မြဲမြံစွာ ကိုင်တွယ်ထားမိလို့ 
မျှော်လင့်ချက်တွေ ကျွန်မ နှလုံးသားထဲ
ကျွန်မ မျိုချခဲ့ဖူးတယ် မောင်…
အရံသင့် ခင်းထားတဲ့ လမ်းမဟုတ်လို့ 
မောင့်လက်ကို မြဲမြဲတွဲလို့ 
ခပ်ရဲရဲ ကျွန်မ လျှောက်မှာပါပဲ…
နွေနေ့ ခင်းလို ပူပြင်းတဲ့
ကျွန်မ ခိုဝင် နားနေခဲ့တာ
တံလျှပ်ကို ရေပဲ မြင်နေမိလို့ ပါ…
မောင့် ခြေအဆင်းမှာ ချနင်းပြီး
ကျွန်မ မမိုက်မဲချင်တော့ပါဘူး မောင်…
ပုံလေးကို google က ယူပါသည်...
Posted by ကာရံဆူး at 10:48 AM6comments:
“ ဟယ် ကိုသက်ကြီး ပြန်ရောက်နေပြီတော့..” ဖြူဖြူခိုင်က ပြောလည်းပြော ကြည့်လည်း ကြည့်မို့ စံပယ်ထွေးလည်း သူကြည့်ရာ လိုက်ကြည့်မိတော့…သားလတ်လတ် မျက်ခုံး မျက်လုံးကောင်းကောင်း တည်ကြည်သည့် အသွင်ဆောင်သည့် ယောကျာ်းတစ်ယောက်…စံပယ်ထွေးတို့ အလုပ်လုပ်သော ဆိုင်နှင့် မျက်စောင်းထိုး ကွမ်းယာဆိုင်တွင် ဆိုင်ကယ်ကို ခွကာ ဖြူဖြူခိုင် အစ်ကို သူငယ်ချင်း တစ်သိုက်နှင့် လေပေးဖြောင့်နေသည်….“အဲ့ဒါ ဘယ်သူလဲ..” ဖြူဖြူခိုင်ရဲ့ အံ့သြ၀မ်းသာသံကြီးကြောင့် စံပယ်ထွေးလည်း စပ်စုလို၍ မေးလိုက်သည်…“ဈေးထိပ်က ယမင်းသူ ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့ သားလေ..သူက အခု ရန်ကုန်မှာ ဆေးကျောင်းတက်နေတာ…နင်က ငါတို့ မြို့ က မဟုတ်တော့ သူ့ အကြောင်း ဘယ်သိမလဲ..သူ့ အစ်ကိုကလည်း ဆရာဝန်ပဲ..သူ့ အစ်မ ယောကျာ်းကလည်း ဆရာဝန်ပဲ..သူက အငယ်ဆုံး..ငါတို့ မြို့ မှာတော့ လူချမ်းသာ စာရင်းဝင်ပေါ့…ကိုသက်ကြီးက သဘောကောင်းတယ်…သူများဆိုလည်း အားနာပြီး အရမ်း ကူညီတတ်တယ်…ဒီမြို့ က အပျိုတွေက ကိုသက်မင်းမောင်ကို ချိန်နေကြတာလေ… သူက မဆွတ်ခင် ညွှတ်ချင်နေကြတာ..”..ဖြူဖြူခိုင် စိတ်ရှည် လက်ရှည်နှင့်ပြောသော စကားများသည် စံပယ်ထွေးအတွက် တွေးစရာ ငေးစရာပါ… ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် အားငယ်နေတာ ခုလို ကြားရတော့ စိတ်ထဲမှာ အတွေး တစ်ခု ၀င်းလက်လာတယ်…စံပယ်ထွေး အဓိပ္ပါယ် တစ်ခုနှင့် ပြုံးလိုက်တာကို ဖြူဖြူခိုင် တစ်ယောက် မြင်ပုံပင်မရ…
စံပယ်ထွေးက ကိုသက်မင်းမောင်တို့ မြို့ နှင့် နည်းနည်းလှမ်းသော ရွာက ရွာသူ..အသားက ညိုညို..ရုပ်က အချောကြီး မဟုတ်ပေမဲ့ ကြည့်ပျော် ရှုပျော်ရှိသည်..ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကလေးကလည်း ၁၇နှစ် အရွယ် အပျိုပေါက်.. စံပယ်ထွေးတို့ မှာ မောင်နှမ နှစ်ယောက်..အမေ နောက် အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ကတည်းက အစ်ကိုကြီးက အိမ်မှာ မနေ..လမ်းပေါ်မှာ အချိန်ပြည့် မူးရူး သောက်စားရင်း ကြုံရာမှာနေတယ်…အမေ ပန်းနာရောဂါနဲ့ ဆုံးတော့မှ အိမ်ကို တစ်ခေါက်ပြန်လာတယ်..စံပယ်ထွေးကို ပထွေးနဲ့ နေလို့ မဖြစ်နိုင်လို့အိမ်ကနေ ဒီမြို့ ပေါ်မှာ အဖေ့ဘက်က အမျိုးတော်စပ်တဲ့ အဒေါ်အိမ်မှာ ထားပြီးကတည်းက ပေါ်မလာတော့… အဒေါ်လို့ သာပြောတာ…စပ်မှ တော်တဲ့ အဒေါ်ပါ..စံပယ်ထွေးကိုလည်း အိမ်ဖော်လိုသာ ထားသည်…တစ်နေ့ တစ်နေ့ သူပြောသမျှ သူဆဲဆူသမျှခံနေရတဲ့ ဘ၀က ကျွတ်ချင်သည်.. ဒါကြောင့်လည်း ဒီ စတိုးဆိုင်မှာ ဖြူဖြူ အကူအညီနဲ့ အရောင်းစာရေး ၀င်လုပ်ဖြစ်သည်..ဒါတောင် ရတဲ့ လစာ အကုန်ပေးပါ့မယ် ပြောမှ သဘောတူညီမှုရခဲ့တာ..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ အဆူအဆဲက နည်းနည်းတော့ သက်သာသွားသည်…အလုပ်ဝင်ပြီး တစ်ပတ်အကြာ ဖြူဖြူ အစ်ကို သူငယ်ချင်း ကျော်ကျော်နှင့် ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားကြသည်..ကျော်ကျော်က အမေတစ်ခု သားတစ်ခု.. ဈေးထဲမှာ ကုန်ခြောက်ဆိုင်လေး ဖွင့်ထားတယ်…အိုးပိုင် အိမ်ပိုင်နဲ့ ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးလေးနဲ့ စိုစို ပြည်ပြည် နေရတဲ့ ကျော်ကျော်ကို အစကတော့ ရည်းစားဖြစ်ရတာ စိတ်ထဲမှာ ကျေနပ်သလိုလို…အခု ကိုသက်မင်းမောင်နှင့် ယှဉ်လိုက်တော့မှ ဘယ်လို မှ ယှဉ်လို့ မရ… စံပယ်ထွေး တွေးချင်ရာတွေးပြီး ညနက်ထိ တော်တော်နှင့် အိပ်မပျော်ခဲ့…
“ စံပယ် နေမကောင်းဘူးလား..မျက်နှာလည်း မကောင်းဘူး…”..ကျော်ကျော်က စိုးရိမ်မကင်း မေးတော့ “ မဟုတ်ပါဘူး.. စံပယ့်ဘ၀ကို တွေးပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာပါ..”..“ သြော်..စံပယ်ရယ် ဘာများ စိတ်မကောင်းဖြစ်စရာရှိလဲ..စံပယ်နားမှာ ကျော်ရှိတာပဲလေ..”..“ စံပယ် ဒီလို ဘ၀မျိုးက အရမ်း လွတ်မြောက်ချင်တာပဲ ကျော်ရယ်..”..“ ဟေ့ကောင် ကျော်ကျော်..” စံပယ်တို့ ထိုင်နေတဲ့ အအေးဆိုင်ထဲ ရုတ်တရက် ၀င်လာတဲ့သူကို သူ တို့ နှစ်ယောက်စလုံး စကားစ ပြတ်ကာ အလန့် တကြား မော့ကြည့်တော့ စံပယ်ရင်တွေ ဒိုင်းခနဲ အခုန်မြန်လာသည်…စံပယ်ရဲ့ ညစဉ်အတွေးထဲက စိတ်ကူးယဉ် မင်းသား ကိုသက်မင်းမောင်… “ ဟာ ကိုသက်ကြီး…ဘယ်တုန်းက ရောက်တာလဲ..ကျွန်တော်လည်း ဆိုင်ကိစ္စနဲ့ အလုပ်နည်းနည်း ရှုပ်နေလို့ အစ်ကို ရောက်တာ မသိလိုက်ဘူး.. အော်…ကိုသက်..ဒါ ကျွန်တော့်ချစ်သူ စံပယ်ထွေးတဲ့..စံပယ် ဒါ ကိုသက်မင်းမောင်တဲ့..ရန်ကုန်မှာ ဆေးကျောင်းသွားတက်နေတာ…”… ကျော်ကျော် မိတ်မဆက် ပေးပါစေနဲ့ လို့ဆုတောင်းပေးမဲ့ မပြည့်တော့ပါ…စံပယ်ထွေးရဲ့ စိတ်ကူးတွေ အခိုးအငွေ့ တွေ ဖြစ်သွားလို့ “ ဟုတ်ကဲ့..” တစ်လုံးသာ ပြောနိုင်သည်..သူနဲ့ ကိုသက်ကတော့ စကားတွေ ဖောင်ဖွဲ့ လို့ …
“ ဟေး…ကျော်ကျော်..”.. “ ဟာ ကိုသက် အစောကြီးပါလား…ဈေးလာတာလား..” “ အေး မုန့် စားမယ်ဆိုပြီး ထွက်လာတာ…တစ်ယောက်တည်း ပျင်းတာနဲ့ မင်းဆီ လှည့်လာတာ..လာကွာ တို့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် သွားရအောင်…” အမေက ဘုရားရှိခိုးပြီး ခဏနေလာတော့မှာမို့ ဘေးဆိုင်မှ မအေးမာကို ဆိုင်ခဏကြည့်ဖို့ မှာရင်း နှစ်ယောက်သား ထွက်လာကြတယ်… “ ငါက မင်းဆိုင်မှ ဖွင့်ပါဦးမလားလို့ .. ဒီရောက်တော့ မင်းကအစောကြီး အလုပ်ကြိုးစား လှချည်လားကွ..”…“ ကြိုးစားရမယ် ကိုသက်ရ…နောက် နှစ်နှစ် သုံးနှစ်လောက်ဆို ကျွန်တော် မိန်းမ ယူမလို့ ..ကောင်မလေးက သိပ်အဆင်မပြေဘူးလေ…”.. ကျော်ကျော်ဆီက သူ့ ကောင်မလေး အကြောင်းကြားတော့ ဂရုဏာ သက်မိသည်..“ အေးကွာ… မင်းအရွယ် က အိမ်ထောင်ပြုဖို့ စောသေးပေမဲ့..ကိုယ့် အခြေအနေ ကိုယ် အသိဆုံးပေါ့…လိုတာရှိပြောကွာ ကူညီမယ်…သောက် သောက်..”…ကျော်ကျော်တစ်ယောက် စိတ်ညစ်သွားမည်စိုး၍ ဟိုဟိုဒီဒီ သူ စကား လမ်းလွှဲ ပြောပေမဲ့ ကျော်ကျော်ကတော့ ငေးငေးငိုင်ငိုင်နှင့် လက်ဖက်ရည်ခွက်ကို ငုံ့ သောက်နေတော့သည်…
နောက်ပိုင်းလည်း သက်မင်းမောင် တစ်ယောက် တခြားသူငယ်ချင်းတွေက အလုပ်ကိုယ်စီမို့ ပျင်းလျှင် ကျော်ကျော်ဆီသာ ရောက်ဖြစ်သည်..ကျော်ကျော်က ကိုယ်ပိုင် အလုပ်ဆိုတော့ သိပ် ပြဿနာ မရှိ..လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လည်း လိုက်ထိုင်နိုင်သည်..တစ်ခါတစ်လေ သူတို့ သမီးရည်းစား နှစ်ယောက်ကြား ပါသွားတတ်သေးသည်… သူလိုက်သွားတာ တခြား အကြောင်းကြောင့်တော့ မဟုတ်… ကျော်ကျော်နှင့် စံပယ်ထွေးကလည်း လိုလိုလားလား ခေါ်သည်..ပြီးတော့ စားကျ သောက်ကျရင် သက်မင်းမောင်ပဲ ရှင်းပေးချင်သည်… သူတို့ လေးတွေကို စာနာ သနားလို့ ပါ….သူ့ မှာ ညီမ မရှိတော့ စံပယ်ထွေးကိုလည်း ကိုယ့်ညီမ တစ်ယောက်လို ခင်မင်သည်.. စံပယ်ထွေးကလည်း သူ့ ကို အရင်ကထက် ပို ရင်းနှီးလာသည်…သိပ်မကြာလိုက်ပါ…ခွင့်ရက်ကလည်း စေ့တော့ သက်မင်းမောင် တစ်ယောက် အားလုံးကို နှုတ်ဆက်ပြီး ရန်ကုန် ပြန်လာခဲ့သည်…စံပယ်ထွေးက မျက်ရည် အ၀ိုင်းသားနှင့်… အားလုံးကတော့ စံပယ်ထွေး အကြံကို မသိကြတော့ သံသယ မ၀င်ခဲ့ကြ… ထို အချိန်ထိ သက်မင်းမောင် သူ့ ကံကြမ္မာကိုရော စံပယ်ထွေး အကြံကိုရော လုံးလုံး မရိပ်မိခဲ့ချေ…
ဒီတစ်ခေါက် အိမ်ပြန်တော့ ကျော်ကျော် အတွက်ရော စံပယ်ထွေး အတွက်ပါ လက်ဆောင်တွေ ၀ယ်သွားဖြစ်သည်…ခါတိုင်းလိုပင် သူတို့ သုံးယောက် ဆုံဖြစ်ကျတယ်… “ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ခါတိုင်းလို ကြာမှာ မဟုတ်တော့ဘူးကွ…စာတွေများလာပြီလေ…တစ်ပတ်လောက်ပဲ နေမှာ..” သက်မင်းမောင် ကျော်ကျော်တို့ နဲ့ ဆုံတုန်း ပြောလိုက်တာပါ…“ အော် ဘာလိုလိုနဲ့ ကိုသက်ကြီးတောင် ဆရာဝန် ဖြစ်ဖို့ နီးလာပြီနော်…ကြင်ယာတွေ ဘာတွေ မရှာတော့ဘူးလားဗျ…” ကျော်ကျော် စကားက စံပယ်ထွေးကို လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်သွားစေသည်…ကိုသက်မင်းမောင် ဖြေမဲ့ အဖြေကိုလည်း ရန်ခုန်စွာ စောင့်စားမိသည်… “ အာ ကျောင်းမှာတော့ အပျိုချောလေးတွေ ရှိတာပေါ့ကွ..ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ကျောင်းစာနဲ့ ကိုယ် ဆိုတော့ အဲ့ဒီဘက်လည်း မလှည့်အားပါဘူးကွာ…မင်းပြောမှ သတိယတယ်…ကျောင်းပြီးရင်တော့ မပြောတတ်ဘူး..ဟဲဟဲ”.. သက်မင်းမောင် စကားကို ဘာတွေ သဘောကျသည် မသိ သွားတဖြီးဖြီးနဲ့ လိုက်ရယ်နေသော ကျော်ကျော်ကို သာ ထုရိုက်လိုက်ချင်စိတ်ဖြစ်မိသည်…
စံပယ်ထွေး စိတ်ညစ်သည်… အဒေါ်ကလည်း တမှောင့် ဒီကြားထဲ ဘယ်မှာနေပြီး ဘယ်က ဘယ်လို ပေါ်လာမှန်း မသိတဲ့ အစ်ကိုကလည်း ပိုက်ဆံ လာလာတောင်းနဲ့….အစ်ကို ကြည့်ရတာ ဆေးတွေ ဘာတွေ စွဲနေသလိုပဲ….စိတ်တွေ ရှုပ်လိုက်တာလေ… ထွက်ပေါက်..ဟုတ်တယ်.. ထွက်ပေါက် တစ်ခုတော့ ရှာရတော့မယ်… မွန်းကြပ်လာပြီ..စံပယ်ထွေးဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုကို ချအပြီး အိပ်ပစ်လိုက်တယ်….
သက်မင်းမောင် ဒီနေ့မြို့ ပြင်က သူ့ ဦးလေးဆီ သွားမလို စောသေးတာမို့့ဆိုင်ကယ်ကို ခပ်ဖြည်းဖြည်းမောင်းလာခဲ့တယ်… ဟိုင်းဝေးလမ်းလည်း ဖြစ်..မနက် ၆နာရီ ဆိုတော့ ကားလည်းရှင်း လူလည်း ရှင်းသည်… ဟင်..ဟိုမှာ စံပယ်ပါလား..သူ့ ဆိုင်ကယ်ကို လှမ်းတားနေတာ စံပယ်…“ ဟင် စံပယ် လက်ထဲမှာ လည်း အထုပ်နဲ့ စောစော စီးစီး ဘာဖြစ်လာတာလဲ..”..“ နောက်မှ မေးပါ ကိုသက်ရယ်..စံပယ်ကိုသာ လိုက်ပို့ ပေးပါ..” “ ဘယ်ကိုလဲ..ဘယ်သွားမလို့ လဲ..” “ ပြောမယ် ပြောမယ်..မောင်းတော့..” ပျာယီပျာယာ နဲ့ ဘာမှ မပြောသေးပဲ ဆိုင်ကယ်ပေါ် ရောက်တာနဲ့ အတင်းမောင်းခိုင်းတော့သည်… သက်မင်းမောင်လည်း ဘုမသိ ဘမသိ မောင်းလာလိုက်သည်… စံပယ်ထွေး ညွှန်ပြသော ခြံထဲသို့ ဆိုင်ကယ်ကို မောင်းဝင်လိုက်သည်… ခြံက နည်းနည်းတော့ အိုနေပြီ..လူသူ ရှိပုံလည်း မပေါ်… အထဲရောက်တော့ “ ကဲ စံပယ်..ကိုယ့်ကိုလည်း ပြောပါဦး…ဘာတွေ ဖြစ်လာတာလဲ…”..“ စံပယ်ကိုလေ..ဒေါ်လေးက သူ့ အသိ လယ်ရှင်တစ်ဦးနဲ့ ပေးစားတော့မလို့ တဲ့..အဲ့ဒီလူကြီးက မုဆိုးဖို..အသက်က လေးဆယ်..ကိုသက်ပဲ စဉ်းစားကြည့်ပါဦး..”…တုန်ရီ နေတဲ့ အသံနဲ့ပြောလည်း ပြောငိုလည်းငို…ပြီးတော့ သူကပဲ “ အဲ့ဒါ ကျော်ကျော်နဲ့ ခိုးရာလိုက်လာတာ…အဒေါ်ရိပ်မိမှာ စိုးလို့စံပယ်က အရင် ထွက်လာတာ… ကျော်ကျော်က နောက်ကနေ လိုက်လာမှာ…”.. ကျော်ကျော်သိသည်ဆို၍ နည်းနည်းတော့ စိတ်သက်သာရာ ရသွားသည်…သို့ သော် ဒီကိစ္စကို ကျော်ကျော် ဘာလို့ သူ့ ကို အသိ မပေးတာလဲ…တကယ်ဆို သူ့ ကို တိုင်ပင် အသိပေးသင့်သည်ပဲ… အေးလေ ဗြုန်းစားကြီးဆိုတော့ သူ့ ကို မပြောလိုက်တာနေမှာပါ..ပြီးတော့ မနေ့ က ကျော်ကျော်နဲ့ တွေ့ တော့ ဒီနေ့ သူ မအားတဲ့ အကြောင်း မြို့ ပြင်ကို သွားမယ်လို့ ပြောခဲ့တာ..ဒါကြောင့် အကူညီ မတောင်းတာနေမှာ..ကောင်မလေးကို ကြည့်တော့လည်း သနားစရာ…“ ကျော်ကျော် မလာခင် အထိတော့ စောင့်ပေးပါနော် ကိုသက်..”..သူလည်း အင်း တစ်လုံး ခံပြီး အိမ်ရှေ့ က ခုံတန်းလေးမှာ ထွက်ထိုင်နေလိုက်သည်… သူနဲ့ စံပယ် နှစ်ယောက်တည်း… အိမ်ထဲမှာ နေလို့ မသင့်တော်ဘူးလေ… သက်မင်းမောင်က ဘာမှ မသိရှာ…စံပယ်ကတော့ အိမ်ထဲမှာ ကိုယ့် အကြံနှင့်ကိုယ်…
“ ကိုသက်…ကော်ဖီသောက်ပါဦး…မနက်က ဘာမှ မစားရသေးဘူး မှတ်လား..”… စံပယ်က ကော်ဖီခွက် ချရင်း အိမ်ထဲ ပြန်ဝင်သွားလေသည်…ကောင်မလေးကြည့်ရတာ တစ်မျိုးပဲ…ခိုးရာလိုက်တာဆိုတော့ ရှက်နေတာ နေမှာပါလေ… သူလည်း ဗိုက်ဆာဆာနှင့် ကော်ဖီကို ကုန်အောင် သောက်လိုက်သည်… ဟိုကောင် ကျော်ကျော်ကလည်း တော်တော်နှင့်မလာသေး…ခဏနေတော့ သူ့ မျက်စိတွေ ဘယ်လို ဖြစ်သည် မသိ…လေးလံလာသည်…မနက်က အစောကြီးထလို့ အိပ်ချင်လာတာလား..မဟုတ်နိုင်…သူ ဘယ်လိုမှ တင်းမခံနိုင်တော့…အသိတွေ အမှောင် အတိဖုံးသွားပြီ…
ဘယ်အချိန်ထိ သူအိပ်ပျော်သွားသည် မသိ…သူ့ နားထဲ ဆူညံ ပေါက်ကွဲသံတွေ ၀င်လာတယ်…မျက်စိကို ဖွင့်လိုက်တော့ မီးဝင်းဝင်းတောက်နေတဲ့ မျက်လုံးနဲ့ သူ့ ကို ၀ါးစားတော့ မတတ်ကြည့်နေတဲ့ ကျော်ကျော်…သူ့ ဘေးကို ကြည့်တော့ တရှုံ့ ရှုံ့ ငိုနေတဲ့ စံပယ်…သူ ဘယ်ရောက်နေတာလဲ…ဟာ..သူ့ ကိုယ်သူ ပြန်ကြည့်တော့ အ၀တ် မရှိ အောက်ခံ ဘောင်းဘီတိုကို စောင်ဖုံးအုပ်ထားသည်…စံပယ်ကလည်း ထမိန်ရင်လျားကို တဘက် ပတ်ထားသည်… ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်တာလဲ..သူက ဘယ်လိုလုပ် ဒီ အိပ်ခန်းထဲ ရောက်နေတာလဲ…သူ အပြင်မှာ ထိုင်နေတာပါ…နောက်မှ သူ အခြေနေကို နည်းနည်း သဘောပေါက်သလို ဖြစ်လာပြီး အလန့် တကြား “ ကျော်ကျော်…မဟုတ်ဘူး…မဟုတ်ဘူး..မင်း မင်း ထင်သလို မဟုတ်ဘူးနော်..ငါ ငါ အပြင်မှာ ထိုင်နေတာ… စံပယ်..ဟဲ့ စံပယ်..နင် ပြောလိုက်လေဟာ..”… သူ့ စကား ဆုံးအောင် မပြောလိုက်ရပါ..ခွပ်ဆိုသော အသံနှင့် သူ့ မေးရိုး တစ်ခုလုံး ပူထူသွားသည်…“ ဒီမှာ ကိုသက်…မိန်းမ ဒီလောက် ရှားသလား…ခင်ဗျားကြီးဗျာ… လုပ်ရက်တယ်.. တောက်..ဟာ…”.. ကျော်ကျော်နောက် လက်သီးတစ်ချက် ထပ်ထိုးဖို့ လက်ကို အမြှောက်..“ ဟဲ့ ဟဲ့ အို..မလုပ်ကြနဲ့ လေ…ဟဲ့ကျော်ကျော်..တော်ပြီ.. မလုပ်နဲ့ တော့..”..ဒီမိန်းမကြီးက ဘယ်သူလဲ ..သူ့ နောက်မှာလည်း အသက် အစိတ်အရွယ် ယောကျာ်း တစ်ယောက်..ပြီးတော့ ကျော်ကျော် အမေ…သူတို့ ကရော ဘာလို့ ရောက်လာကြတာလဲ…စံပယ်ကလည်း ငိုရှိုက်မြဲ… သက်မင်းမောင် ခေါင်းတစ်ခုလုံး ပေါက်ကွဲမတတ် သွေးတွေ ဆူဝေနေသည်… သူ့ သိက္ခာ သူ့ မိသားစု အရှက် အားလုံး လူပုံအလည် ရစရာ မရှိတော့…စံပယ် မင်း ယုတ်မာ လှချည်လားကွာ…
သူနှင့် စံပယ်ကို လက်ထပ်ပေးကြသည်…သူက လက်ထပ်တာကို ရပ်ကွက်ထဲတွင်ပင် အကျဉ်းရုန်းရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်…ရပ်ကွပ်ရုံးမှာပင် လက်မှတ်ထိုး…စံပယ်က အသက် ၁၇နှစ် ကျော်ရုံသာ ရှိသေးသည်…သို့ သော် စံပယ်ဘက်က သူ နှင့် အိမ်ထောင်ကျသွားခြင်းကိုသာ အဓိက ထားသည့် အတွက် သိပ်ပြီး အရေးတယူမရှိလှ… အိမ်နီးချင်းကို လက်ဖက်ရည်တိုက်.. ဒီလောက်ပါပဲ… သူမကျေနပ်ပါ… ဒါ သူ့ ကို သက်သက် အကွက်ဆင် ဖမ်းတာ..အဖေနဲ့ အမေဆို သူ့ ကြောင့် မြို့ မှာ မျက်နှာ ပျက်ရပြီ…သူ့ ကို စကားတောင် မပြော..အစ်မလည်း ထိုနည်း အတိုင်းပင်..သူ့ ကို နားလည်သူဆိုလို့ အစ်ကိုကြီး သက်ဝင်းအောင် နှင့် သူ့ ခဲအို ကိုမြင့်စိုး နှစ်ယောက်ပဲ ရှိသည်…သူ ပြောတာကို ဘယ်သူမှ လက်မခံ… အစ်ကိုကြီးကတော့ လက်ခံသည်…သို့ သော်…ဘယ်သူ မပြု မိမိမှုလို့ သာ ပြောသည်…. သက်မင်းမောင် တစ်ယောက် ရွဲ့ တော့သည်…အကြီးအကျယ် ပေါက်ကွဲဖြစ်သည်…သူ ၏ မင်္ဂလာဦးညတဲ့.. သက်မင်းမောင် တစ်ယောက် ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ မူးတော့သည်… မိစံပယ်ကို သူ မုန်းတီးမိသည်… သူ ဘာကြောင့် ဒီလို လုပ်သည်ဆိုတာကို သူ သဘောမပေါက်…
“ ကိုသက်..အရမ်းမူးနေပြီ..လာပါ အိပ်ခန်းထဲ သွားရအောင်နော်..”..“ ဖယ်စမ်း…နင် ငါ့အသားကို မထိနဲ့ .. နင့်အသားကို ငါမထိတာတောင် နင်က ငါ့ကို အပိုင်ကိုင်နိုင်တယ်..ဟင်းဟင်း..နင်နဲ့ ငါ ဘာမှ မဖြစ်ဘူးဆိုတာ ဘယ်သူမှ မယုံကြဘူးနော်… နင်က ငါ့ကို တော်တော် လိုချင်နေတာလား..ငါ့မယား သိပ်ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့…အဟပ်ဟပ်…” သက်မင်းမောင် ခြောက်ကပ်ကပ် ရယ်သည်…. သက်မင်းမောင် စကားများသည် သာမာန် မိန်းကလေးတစ်ယောက်အား အရှက်နှင့် သိက္ခာ မရှိအောင်ကို စော်ကားသလို ဖြစ်ပေမဲ့ စံပယ်အတွက်ကတော့ ကိုယ့်အပြစ်နဲ့ ကိုယ်မို့သူပြုသမျှ လည်စင်းခံရုံသာ တတ်နိုင်သည်…မိမိဘ၀ကိုသာ အားမလို အားမရနှင့် မျက်ရည်သာ တွင်တွင် ကျမိတော့သည်… သူမအတွက် မင်္ဂလာဦးညသည် ကိုသက်၏ အငြိုးများနှင့် ဒေါသများ ပေါက်ကွဲထွက်သော ညတစ်ညသာ ဖြစ်တော့သည်..
သူခေါင်းတွေ တော်တော်ကို နောက်ကျိ ကိုက်ခဲနေသည်… ညက သူတော်တော် မူးပြီး စံပယ်ထွေးနှင့် ဘာတွေပြော ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့သည်ကို သူ မသိတော့… သေချာတာကတော့ သူ တော်တော်ကို ပေါက်ကွဲခဲ့လိမ့်မည်… ဒီနေ့ သူ ရန်ကုန် ပြန်ရမည်… ဒီနေရာနှင့် ဝေးရာကိုသာ သူ ထွက်သွားမည်… သူ စိတ်က တော်တော်နှင့် မပြေသေး..သူ ရေခဲသေတ္တာထဲက အရက်ပုလင်းထပ်ထုတ်ပြီး ထပ်သောက်သည်..ထပ်မူးလျှင် သူ့ အတွက် ပို သက်သာမည်… သူဘာမှ မစဉ်းစားတော့.. အရက်သောက်ပြီး ရန်ကုန် ပြန်ခဲ့သည်…
နောက်ပိုင်းတွင်လည်း အိမ်ကို လင်ယောကျာ်း တာဝန်အရ နောက်ပြီး မိဘတွေကို တွေ့ ချင်စိတ်နှင့်သာ ပြန်ပြန် လာခဲ့ရသည်…မိစံပယ်ကို သူ နည်းနည်း မှ မကျေနပ်… မိစံပယ်ကတော့ ဘာမှ ပြန် မပြောရှာ..သူ ပြောဆို ပြုသမျှ ခေါင်းငုံ့ သာ ခံသည်… သူအိမ်ရောက်တိုင်းလဲ အရက်ကိုသာ အဖော်ပြုသည်.. မည်သူနှင့်မျှလည်း မတွေ့ … ကျော်ကျော် တစ်ယောက်သာ သူ့ ကို လာတောင်းပန်သည်.. သူမှားသွားသည့်အကြောင်း..စံပယ်ထွေးနှင့် သူ့ အစ်ကိုက ဒီအစီအစဉ်ကို စီစဉ်တာကို သူ နောက်မှ သိရတဲ့ အကြောင်း… စံပယ်ထွေးက သူ့ ရဲ့ လက်ရှိဘ၀က လွတ်မြောက်ချင်လို့ ဒီလို ကြံစည်တာ ဖြစ်လို့ စံပယ်ထွေး အပေါ်ကို စိတ်မနာပါနဲ့ လို့ သူ့ ကို တောင်းပန်ရင်း ပြောသွားသေးသည်…ကျော်ကျော် ဘယ်လိုပင် ပြောပြော သူ့ ဘ၀ကို လှေကား တစ်ခုလို အသုံးချသွားတဲ့ စံပယ်ထွေးကို လုံးဝ မကျေနပ်… စံပယ်ကလည်း သူ့ ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်သွား၍ သက်မင်းမောင် အရက်သောက်လျှင်လည်း ဘာမှ မစွတ်ဖက်..မဟန့် တားချေ… သူမ အတွက်က ဘ၀လုံခြုံရေးသာ အဓိက…သူများအိမ်မှာ ကပ်နေရတဲ့ ဘ၀က ကျွတ်ဖို့ သာ..စိတ်ရှိသည်လေ… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အချိန်တန်လျှင် မြို့ မျက်နှာဖုံး လူကြီးများ၏ ချွေးမ..ဆရာဝန်ကတော် ဖြစ်လာမှာမို့ ကျန်တာတွေက သူမ အတွက် သိပ်အရေးမကြီးပါ…
မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ အရက်ခွက်ကိုင်ကာ မော့တော့မည့်ဆဲဆဲ…“ သား ”..အမေ့ရဲ့ တုန်ယင်နေတဲ့ အသံကြောင့် သူ့ လက်တွေ လမ်းတ၀က်တွင်ပင် ရပ်တန့် သွားသည်… “ အမေ… သားဆီ လာတာလား..”… သက်မင်းမောင် အိမ်ထောင်ကျကတည်းက မိဘတွေက အရင်လို နွေးနွေးထွေးထွေး သိပ်မရှိလှ… သူ့ ဆီကိုလည်း မလာကြတော့..ဒီမနက်တော့ သူ့ အမေ သူ့ ဆီ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်လာတော့ သူအံ့သြ ၀မ်းသာစွာ မေးလိုက်မိခြင်းပါ ….သက်မင်းမောင်က သူတို့ အိမ်ထောင်ရေးကြောင့် သူ့ မိဘတွေက စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်မည်စိုး၍ အိမ်ခွဲနေခဲ့သည်ဆိုပေမဲ့ သူ့ အိမ်နှင့် သူ့ မိဘတွေ အိမ်က သိပ်တော့ မဝေးလှ…လမ်းတစ်လမ်းသာ ခြားသည်…သူမရှိသော အချိန်များတွင် စံပယ်ထွေး တစ်ယောက်ထဲမို့ အိမ်ဖော် တစ်ယောက် ငှားပေးထားသည်… “ မင်းအဖေ မသိအောင် အမေ ဈေးသွားမယ်ဆိုပြီး ထွက်လာတာ..မင်းမိန်းမရော..”.. အမေက အိပ်ခန်းထဲ အကဲခတ် သလို လှမ်းမေးသည်..“ မရှိဘူး အမေ ဈေးသွားတယ်..”.. “ သားလေးရယ်…အမေ ငါ့သားကို သတိယလိုက်တာလေ…မင်းအဖေက မသွားနဲ့ လို့ တားထားလို့ …မင်းအဖေကိုတော့ စိတ်မနာပါနဲ့ သားရယ်..သူက သားကို အရမ်း အားထားတာလေ… သူ့ ရင်ထဲမှာလည်း တော်တော်ထိခိုက်ခံစားနေရတာ အမေသိတယ်…. အမေ့သား အကြောင်းကိုလည်း အမေသိပါတယ်..သားဒီလို ကိစ္စမျိုးကို သားစိတ်နဲ့ ဘယ်တော့မှ မကျူးလွန်ဘူးဆိုတာ.. ဒါပေမဲ့သားရယ် ကံတရားက ဒီလို ဖြစ်လာပြီပဲ… သားဘ၀ကို မနစ်မွန်းစေချင်ဘူး..သား ဒီလို ဖြစ်နေရင် အမေ ရင်ကွဲရပါလိမ့်မယ်…အဖေနဲ့ အမေဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆရာဝန် ဖြစ်အောင်သာ သားကြိုးစားပေးပါ သားရယ်…အမေ တောင်းပန်ပါတယ်…” အမေ့ရဲ့ တိုးလျှိုးတောင်းပန်သံကြောင့် သူလည်း မျက်ရည် မထိန်းနိုင်တော့..“ အမေရယ်..” ..“ သား ဘယ်သူ့ အတွက်နဲ့ မှ အသက်မရှင်ရင်တောင် အမေ့အတွက် အမေ့သားလေး အသက်ရှင်ပေးပါ သားရယ်..”.. သက်မင်းမောင်က အငယ်ဆုံးသားမို့ အမေ့အချစ်တွေပုံကာ ချစ်သည်… အမေ့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေကို အမေချစ်တဲ့ သား ဖြည့်ဆည်းပေးရမည်ပေါ့…“ အမေ မငိုပါနဲ့ တော့..စိတ်ချပါ..အမေ ဖြစ်စေချင်သလို သား ဖြစ်အောင် လုပ်ပါ့မယ်…”..
“ အစ်မ ဆေးသောက်ရအောင်..” ကိုသက် ပြန်သွားတိုင်း အိပ်ခါနီး အိမ်ဖော် အေးမာက ဆေးလာတိုက်နေကျပါ… ကိုသက်ရှိလျှင်တော့ သူကိုယ်တိုင်တိုက်သည်…သူမကို မယုံလို့ ပါ… သူမ ဒီဆေးတွေကို မသောက်ချင်… မနက်က ဒေါ်လေး ပြောခဲ့သော စကားများကိုလည်း သူမ နားယောင်နေသည်… “ ညည်းတို့ လင်မယား အဆင်မပြေသေးဘူးလား…ကလေးယူလိုက်ပါလားအေ.. ကလေးရှိတော့ ညည်းယောကျာ်းလဲ တော်ရုံဆို ပစ်မသွားနိုင်ဘူးပေါ့…ညည်းယောကျာ်းက ညည်းကို သိပ်ကျေနပ်တာ မဟုတ်ဘူး…အခုလို ဆင်ထားတာကိုပဲ ညည်းက ကျေနပ်မနေနဲ့ …သူက တစ်နေ့ ညည်းကို ပစ်ချင် ပစ်သွားနိုင်တယ်နော်…”… ဒေါ်လေးက ယူစကသာ ဗြစ်တောက် ဗြစ်တောက် ပြောပေမဲ့ မြို့ မျက်နှာဖုံး ဆရာဝန်လောင်းကို မိစံပယ် အမိဖမ်းခဲ့လို့ စိတ်တွင်းကတော့ ကျေနပ်နေတာ သူမသိသည်…ခက်သည်က ကိုသက်…သူမကို အရင်ကတည်းက သတိပေးထားဖူးသည်…“ မိစံပယ် နင်ဟာ အများအမြင်မှာ ငါ့မိန်းမပဲ..အဲ့ဒီတော့ ငါကလည်း နင့်ကို ၀တ္တရားအရ မယားတစ်ယောက်လို ထားမှာပါ..အေး တစ်ခုတော့ရှိတယ်နော်…ငါ့ကို ကလေးတွေ ဘာတွေ ယူပြီး ချည်နှောင်ဖို့ တော့ နင်ဘယ်တော့မှ မကြိုးစားနဲ့ …”…ကိုသက်က ပြောသာ ပြောရသည်… သူ့ ကို လက်ဝတ်လက်စားက အစ ဆင်သည်… သူမ လူပုံအလယ်တွင်တော့ တင့်တင့်တယ်တယ်နေရသည်… ကိုသက် ဒီလိုပြောတာကလည်း တကယ်တမ်း ကလေး မရသေးလို့ ပြောတာနေမှာပါ… ကလေးရတယ်ဆိုရင် သူ ၀မ်းသာမှာပါ..ဒေါ်လေးပြောတာ ဟုတ်မှာ.. ကလေးသံယောဇဉ်နှင့်ဆိုလျှင် ကိုသက် စိတ်တွေ ပျော့ပျောင်းချင်ပျော့ပျောင်း လာနိုင်သည်…ပြီးတော့ သူမကိုလည်း ထားပစ်ခဲ့ဖို့သိပ်မလွယ်ကူလှတော့ပေ… ထို မျှော်လင့်ချက်ကလေးနှင့် အေးမာ မသိအောင် သူမ ဆေးတွေကို ခိုးခိုး လွှင့်ပစ်ခဲ့သည်…
သူမတွင် ထင်သည့် အတိုင်း ကိုယ်ဝန်ရလာသောနေ့ တွင် သူမ အကြီးအကျယ် စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်…ကိုသက် မသိအောင် ဖုံးထားရသည် မဟုတ်လား….ချက်ချင်းကြီးတော့ ကိုသက်ကို အသိမပေးချင်…. မဖုံးနိုင် မဖိနိုင်ဖြစ်မှသာ သူမ ဖွင့်ပြောတော့မည်… ကိုသက် မိဘတွေကလည်း အိမ်မတူတော့ မရိပ်မိသေး…
ကိုသက်ရဲ့ အပြုမူ အပြောဆိုတွေက စံပယ်အတွက် စိတ်အနှောင့် အယှက် ဖြစ်သည်ကတော့ မှန်သည်… တစ်ခါတစ်လေ..စံပယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ် မေးကြည့်သည်…မိမိလုပ်လိုက်တာ မှားသွားပြီလားလို့ …ဒါပေမဲ့ ဒီလို ဘ၀မျိုး နေရစားရ သွားလာရတာကို စဉ်းစားကြည့်တော့ မိမိလုပ်ရပ်ကိုပင် ကျေနပ်မိသည်…ကိုသက်ကို ချစ်မချစ်တော့ မသိ…သူမဘ၀ အနေလှဖို့ က အဓိကကျသည်လေ..ဒီလိုဘ၀မျိုးကို ကိုသက်ကို စတွေ့ ကတည်းက ညစဉ်ညတိုင်း အိပ်မက်မက်ဖူးသည် မဟုတ်ပါလား….ဟုတ်သည် စံပယ် မမှား…စံပယ် ဒီလို ဘ၀မျိုးလိုချင်နေတာလေ…
တစ်ခါတစ်လေ တော့လည်း ရင်ထဲမှာ မွန်းကျပ်လာသည်…တစ်စုံတစ်ယောက်ကို တိုင်ပင် ဖွင့်ဟချင်သည်.. ကိုသက် သူမ အပေါ် ရက်စက် စိမ်းကားစွာ ပြုမူ ဆက်ဆံသောအခါများတွင် သူမ သိမ်ငယ်မိသည်… ရင်ဖွင့်ချင်သည်… ထို့ ကြောင့် ရံဖန် ရံခါများတွင် ကျော်ကျော်နှင့်ဆုံပါက မိမိ အိမ်ထောင်ရေးကို ပြောပြမိသည်… ကျော်ကျော်ကလည်း အစပိုင်းကသာ သူမအပေါ် စိတ်နာသည်…နောက်ပိုင်းတွင် သူမ ဘ၀ကို စာနာသည်…နားလည်ပေးသည်…
သက်မင်းမောင် ဒီနေ့ အိမ်ရောက်တာနှင့် စံပယ်ထွေးအား မတွေ့ …ထို့ ကြောင့် သူငယ်ချင်းများနှင့်ဆုံရန် လက်ဘက်ရည်ဆိုင် ထွက်လာခဲ့သည်… သူတွေ့ လိုက်သည်က လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထဲတွင် ကျော်ကျော်နှင့် စံပယ်ထွေး… သူ သ၀န်မတိုပါ..သို့ သော် သူဝင်သွားလျှင် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မည်စိုး၍ သူတမင် ရှောင်ထွက်ခဲ့သည်… သူ့ စိတ်ထဲတွင် သူတို့ နှစ်ယောက်ကို တွေ့ လိုက်ရ၍ ထူးထူးခြားခြား ဘာမှ မခံစားရပေ…
အိမ်ရောက်လို့ ခဏအကြာ စံပယ်ထွေး ပြန်ရောက်လာသည်…မျက်နှာက ဖြူဖတ်ဖြူရော်…သူ့ ကိုလည်း မရဲတရဲ ကြည့်သည်… သူက ဘာမှ မပြော…ပုံမှန် နေနေကျအတိုင်းပင်…စာကြည့်နေလိုက်သည်… “ အိမ်ရှေ့ မှာ ဘယ်သူမှ မရှိကြဘူးလား…” အိမ်ရှေ့ မှ အော်သံကြား၍ သူရော စံပယ်ထွေးရော လှမ်းကြည့်လိုက်သည်… သူ့ ယောက်ဖ စံပယ်ထွေး အစ်ကို…ဒီလူက ဒီအိမ်ကို မကြာခဏ ၀င်ထွက်စားသောက်နေကျအပြင်..တစ်ခါတစ်ရံ စံပယ်ထွေးဆီမှ ပိုက်ဆံတောင်းတတ်သည်… သက်မင်းမောင်လည်း စကားရှည်မည်စိုး၍ မသိချင်ဟန်ဆောင်နေတတ်သည်..ဖြစ်နိုင်လျှင် ဒီအသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့် မပတ်သက်ချင်… “ အစ်ကို ဘာကိစ္စ ရှိလို့ လဲ..” စံပယ်ထွေး ကိုသက်ကို မသိမသာ စောင်းကြည့်ရင်း ပြာပြာသလဲ မေးလိုက်သည်…သက်မင်းမောင်က သူ့ အစ်ကိုကို မကြည်ဖြူတာ စံပယ်ထွေးသိသည်…“ ငါ ပိုက်ဆံပြတ်နေလို့ ..အဲ့ဒါ..” မျက်နှာက မထီတရီ… သက်မင်းမောင်ကိုလည်း လှမ်းအကဲခတ်လိုက်သေးသည်… “ အစ်ကိုကလည်း ဟိုတစ်ပတ်က ငါးသောင်းပေးထားတယ်လေ..” သူတို့ မောင်နှမ တိုးတိုးကျိတ်ကျိတ် ပြောနေပေမဲ့ ဧည့်ခန်းနှင့် သိပ်မဝေးလှ၍ သက်မင်းမောင် အကုန်ကြားနေသည်… “ ဟာ နင်ကလည်း ပိုက်ဆံ ငါးသောင်း ဒီခေတ်မှာ ဘာသုံးလို့ ရမှာလဲ..” ဟင်း…တော်တော်လာတဲ့လူ..ကိုယ်ကိုတိုင် ဒီပိုက်ဆံ ရအောင် ရှာကြည့်စမ်းပါ…သက်မင်းမောင် စိတ်ထဲမှသာ ပြောမိသည်…“ ဟာ..အစ်ကိုကလည်း စံပယ်မှာ မရှိဘူး..”..“ ဘာလဲ…နင်က ကျေးဇူးကန်းတာလား..နင်ဒီလို ဘ၀မျိုးရောက်အောင် ဘယ်သူလုပ်ပေးခဲ့တာလဲ.. ဟမ်… နင်မေ့သွား ပြီလား..” …သက်မင်းမောင် ဒီစကားကြားတိုင်း ရင်ဘတ်က စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းနာကျင်မိသည်… ညီမရင်းကာ လုပ်စားသော အစ်ကိုတစ်ယောက်ကိုလည်း သူတော်တော်လေး ရွံရှာမိသည်….သူ့ ကို ဒီလို လုပ်ခဲ့တာ ဒင်းတို့ မောင်နှမ နှစ်ယောက်…တောက်… သက်မင်းမောင် တောက်ပြင်းပြင်းခေါက်ပြီး လမ်းထိပ် ထွက်လာခဲ့သည်…ဒင်းတို့ ပြောတာ ဆက်နားထောင်နေလျှင် သူ လူသတ်မိလိမ့်မည်…
မနက်ဖြန် သက်မင်းမောင် ရန်ကုန် ပြန်မှာမို့ စံပယ်ထွေး ပစ္စည်းတွေ သိမ်းပေးနေရင်း သက်မင်းမောင် အရိပ်အကဲ ကြည့်နေသည်…ကိုယ်ဝန်ကိစ္စ သက်မင်းမောင်ကို အသိပေးချင်သည်…သူမ ကြာရှည်စွာ ဖုံးဖိမထားချင်တော့…ယခုပင် သုံးလ ရှိနေပြီ မဟုတ်လား…အပျိုဗိုက်မို့ သိပ်မသိသာလှ….ယခုနေ သူမတွင် ကိုယ်ဝန်ရှိနေသည်လို့ များပြောလိုက်လျှင် သက်မင်းမောင် ဘယ်လို နေမည်နည်း…သူမ သိချင်စိတ်တွေ ပြင်းပြနေသည်…သက်မင်းမောင်ကိုလည်း ကြောက်သည်… သက်မင်းမောင်ကလည်း သူ့ အား စံပယ်ထွေး တစ်ခုခုပြောချင်နေပုံရသည်ကို ရိပ်မိသည်… မိစံပယ် ဘာတွေ ပူဆာဦးမလဲဟု တွေးနေမိသည်…ဟိုတစ်ခါလည်း သက်မင်းမောင် အမေ ဆွဲသော ဆွဲကြိုးမျိုးလိုချင်သည်ဟု ပူဆာတုန်းက သူ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး သိပ်မပြောချင် ပြီးတော့ မိစံပယ်က ကလေးစိတ်မကုန်သေး၍ သူများလုပ်တာ လိုက်လုပ်ချင်တာနေမှာပါလို့ တွေးရင်း အမေ့အား ပြောပြကာ ၀ယ်ပေးခဲ့သည်…ယခုလည်း ဘာလိုချင် နေသည်မသိ… သက်မင်းမောင် အကြည့်နှင့် စံပယ်ထွေး အကြည့်တို့ ဆုံတော့ စံပယ်ထွေး တုန်သွားသည်…
“ ဟဲ့..မိစံပယ်…ငါ့ကို ဘာပြောမလို့ လဲ..” သက်မင်းမောင်ကပင် စိတ်မရှည်စွာမေးလိုက်သည်…“ ဟိုလေ..ဟို..ဟို…”..တစ်ဟိုဟိုနဲ့ ထစ်ငေါ့နေသော စံပယ်ထွေးအား သူအားမလို အားမရ ဖြစ်နေတုန်း.. “ကျွန်မမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီ…”.. “ ဘာ……” သက်မင်းမောင် ထိတ်လန့် တကြားအော်ထည့်လိုက်သည်.. လက်ထဲက စာအုပ်ပင် လွတ်ကျသွားသည် အထိ….“ မိစံပယ် ငါ့ကို ပြန်ပြောစမ်း…” “ စံပယ်မှာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလို့ ..အဲ့ဒါ”…“ ဟာ ဘယ်လိုလုပ် ရှိသွားတာလဲ..နင် နင် ငါ မသိအောင် ဆေးတွေ လွှင့်ပစ်လိုက်တာလား..အေးမာ မိအေးမာ..လာစမ်း” “အေးမာ ဘာမှ မသိပါဘူး..ကိုသက်… စံပယ်ဘာသာ စံပယ် သဘောနဲ့ ..” “ တိတ်စမ်း…နင့်သဘောနဲ့ နင်လုပ်ရအောင် နင်က ဒီအိမ်မှာ ဘာလဲ…နင့်ကိုငါ ဘာပြောခဲ့လဲ…နင့်မှာ ဦးနှောက် မရှိဘူးလား…ငါမချစ်တဲ့ နင့်ကို ယူရလို့ ငါ့မှာ ဘယ်လောက် စိတ်ဆင်းရဲ ရလဲ…အခုတစ်ခါ နင့်သွေးကို ငါမလိုချင်ဘူး..” “ အို စံပယ်လည်း ကလေးလိုချင်တာပေါ့..ပြီးတော့ ကိုသက်က ကလေးသံယောဇဉ်..” “ တော်စမ်းပါ…နင် ငါ့စကားကို နားမထောင်ပဲ နင်က ထင်ရာစိုင်းတာလား မိစံပယ်…” သက်မင်းမောင် အတ္တကြီးစွာ ပြောနေတာကို စံပယ်ထွေးကတော့ အောင်နိုင်သူ အပြုံးနှင့် ကြည့်နေသည်…“ ငါ့ဘ၀ကို နင် တစ်ခါပဲချည်လို့ ရမယ်..နင် နားလည်လား..အေး နင့်လုပ်ရပ်တွေအတွက် နောင်တ ကောင်းကောင်းရရစေမယ် ”..သက်မင်းမောင် ဒေါသတကြီး အခန်းတွင်းမှ ထွက်သွားသည်…အေးမာကတော့ နားမလည်ခြင်းများစွာနှင့် စံပယ်ထွေးကို တစ်လှည့် သက်မင်းမောင်ကို တစ်လှည့် ငေးကြည့်နေတော့သည်…စံပယ်ထွေး ရင်တွေ နာကျင်လိုက်တာ..သူ့ သွေးကိုတောင်သူက သံယောဇဉ် မထားတဲ့ အပြင် အငြိုးမီးတွေ တောက်လောင်နေလိုက်တာ… စံပယ် ကလေးယူမိတာ နောင်တပင် ရချင်ချင်…
မနက်စောစော သက်မင်းမောင် ကားဂိတ်ဆင်းခဲ့သည်…စံပယ်မျက်နှာကို သူမကြည့်ချင်…ကံဆိုးစွာ သူ့စာအုပ်တစ်အုပ် စာကြည့်စားပွဲပေါ်တွင် ကျန်ခဲ့သည်..ကားထွက်ဖို့ စောသေး၍ သူ အိမ်ပြန်ယူလိုက်သည်…အိမ်ရှေ့ တွင် ရပ်ထားသော ဆိုင်ကယ်တစ်စီး..ဖိနပ်ချွတ်တွင်..ယောကျာ်း ဖိနပ်တစ်ရံ မိန်းမ ဖိနပ်တစ်ရံ…သူ စိတ်မ၀င်စား..စာကြည့်စားပွဲမှ သူ့ စာအုပ်ယူပြီး ပြန်ထွက်မည် အပြု.. “ညဉ်းနဲ့ အေ…နည်းနည်းပါးပါး အပျော့ဆွဲ ဆွဲပြီးပြောပါတော့လား..ဒီမှာ ယောကျာ်းဆိုတာ ပတ်ချွဲ နှပ်ချွဲလုပ်တာကို ခံချင်ကြတာအေ့..ဒီမယ် ညဉ်း ဒီကိုယ်ဝန်ကို တစ်ခုခု လုပ်မယ် မကြံနဲ့ နော်…ဒီကလေးနဲ့ မှ တို့ က သက်မင်းမောင်ကို အပိုင်ချည်ထားနိုင်မှာ…” စံပယ်ထွေး အဒေါ်အသံနှင့် အစ်ကို အသံက မရှေးမနှောင်း အကြံအစည်တွေ တူညီစွာ ထွက်လာသည်..“ ဟုတ်တယ်..မိစံပယ်…ငါတို့ ဒီလို အကွက်ထဲဝင်လာအောင် ဘယ်လို စီမံခဲ့ရတယ်ဆိုတာ နင်အသိဆုံး..အေး ကံကောင်းလွန်းလို့ ဟိုကောင်က ဘာမှ မပြောပဲ နင့်ကို အသာတကြည် ယူလိုက်တာ..ငါတို့ ဒါကို လက်လွှတ်လို့ မဖြစ်ဘူး..ဒီကောင့်စိတ်တွေ က အစိုးရတာမဟုတ်ဘူး…ဒီကလေးက ငါတို့ အတွက် အနာဂတ်ပဲ..” အခန်းတွင်းတွင် သူ မရှိတော့ဘူး အောင်းမေ့၍ သူတို့ ရဲ့ မဟာစီမံကိန်းကြီးကို အကွက်ကျကျ စီမံနေသော ထို တူဝရီး သုံးယောက်..စိတ်ဓါတ်တွေက အောက်တန်းကျလှသည်…
သူ ရုတ်တရက် ပေါက်ကွဲထွက်သွားသည်… ကန့် လန့် ကာကို မ၍ အိပ်ခန်းထဲ ၀င်သွားသည်… သူ့ ကို မြင်သည်နှင့် ..အားလုံး အထိတ်တလန့် နှင့် ကြက်သေသေသွားကြသည်… “ ကိုသက်..ကိုသက်..”.. စံပယ်ထွေး မျက်နှာသွေး မရှိတော့..သူ သုံးယောက်စလုံး မျက်နှာကို စေ့စေ့ကြည့်ပစ်လိုက်သည်… “ ငါမရှိတော့ဘူးထင်ပြီး နင်တို့ က ဒီမှာ စီမံကိန်းတွေ ရေးဆွဲနေတာပေါ့..ဟုတ်လား…နင်တို့ အားလုံးဟာလေ…ငွေသာရမယ်ဆို ဘာမဆို အကုန်လုပ်မဲ့ အတန်းအစားတွေပါလား.. နင်တို့ တော်တော် အရှက်နည်းလှချည်လား..တော်တော် အောက်တန်းကျလှချည်လား.. ဒီမှာ နင်တို့ အားလုံး မျှော်လင့်သလို မဖြစ်စေရဘူး…အေး နင်တို့ ဒီလောက် မက်နေတဲ့ ပိုက်ဆံ ငါပေးမယ်..နင်တို့ အားလုံး ထွက်သွားကျ..ဘယ်လောက်လိုချင်လဲ ပြော..”..
“ အို ဒီလို လက်လွတ်စံပါယ် မပြောနဲ့ လေ…စံပယ်မှာက မပေါ့မပါးကြီးနဲ့ ..” စံပယ်ထွေးက မခိုးမခန့်ခြိမ်းခြောက်သလိုပြောတော့ “ နင့်ဘာသာ ဘာဖြစ်ဖြစ် ဂရုမစိုက်ဘူး…နင်တို့ လို အောက်တန်းကျတဲ့ မျိုးရိုးကိုလဲ ငါမလိုချင်ဘူး..”.. “ မောင်သက် မင်းက ဒီလို ပြောလာမှတော့ တို့ ကလဲ ပြတ်ပြတ် ပြောရတာပေါ့..တို့ ဘက်ကတော့ လုံးဝ ကွာမပေးနိုင်ဘူး…ဒီကလေးကို မင်းရဲ့ သွေးကို ငါတို့ ကလည်း ရအောင်မွေးမှာပဲ…ငါ့သဘောဟာ ငါ့တူမ သဘောနဲ့ တူတူပဲ…” စံပယ်ထွေး အဒေါ်ရဲ့ မျက်နှာက ရမက်လုံးတွေ ဝေနေသည်…မက်လည်း မက်လောက်စရာ..သက်မင်းမောင် အဘွားက သူ မဆုံးခင်က သူ့ အချစ်ဆုံး မြေးဖြစ်သူ သူ့ အား အမွေတွေ အားလုံးပေးခဲ့သည်…လက်ဝတ်လက်စား…နေစရာ တိုက်နှင့်ခြံအပြင်…မြို့ ပြင်က စိုက်ခင်းနှင့်ခြံပါ အားလုံးကို သူ့ နာမည်နှင့်လွှဲပေးထားသည်…
သူ တို့ က ဒါတွေကို သိထားတော့ သက်မင်းမောင်ကို လွယ်လွယ်နှင့် လက်မလျှော့… သက်မင်းမောင် သွေးတွေ ဆူဝေ သွားသည်.. “ တောက် ခင်ဗျားတို့ ခင်ဗျားတို့ တွေ…အေး ဒီလောက်တောင် ဖြစ်လှတဲ့ ဟာတွေ..နေကြ..နင်တို့ မက်လှပါ ချည်ရဲ့ ဆိုရင် နင်တို့ နေခဲ့ကြ..ငါသွားမယ်..ဘယ်တော့မှလည်း နင့်တို့ ဆီ ပြန်မလာဘူး..မှတ်ထား..”.. သူတို့ အားလုံး ဘာမှ ပြန်မပြောနိုင်ခင်..သူ ထွက်လာခဲ့သည်… တော်တော် လူပါးဝတဲ့ဟာတွေ…သက်မင်းမောင်ဒေါသတွေ ထွက်လွန်းလို့မျက်နှာကြီး နီမြန်းနေသည်.. သူတော်တော်နှင့် စိတ်မပြေ…ကားချိန်လည်း မမှီတော့ ၍ သူ မိဘတွေဆီ ထွက်လာခဲ့သည်…
အမေ့ကို ဖြစ်ကြောင်း ကုန်စင်ပြောပြတော့ “ အေးလေ…ငါ့သားလေး ဘ၀က ကံဆိုးလိုက်တာ…အမေ့ သား ဘာမှ စိတ်ဓါတ်မကျနဲ့ …အမေတို့ အားလုံး ဒီကိစ္စကို ကြည့်စီစဉ်ပါ့မယ်…သားသာ သားဘ၀ ရှေ့ ရေးအတွက် လုပ်ပါသားရယ်… သားဘ၀ကို ဘယ်တော့မှ အနစ်မခံနဲ့ …ပြီးရင် ငါ့သား ဒီနေရာနဲ့ ဝေးဝေးကိုသာ လျှောက်ပြီး အဲ့မှာပဲနေတော့…အမေတို့ အတွက် ဘာမှ နောက်ဆံ မတင်းနဲ့ …နောက်လဆို မင်း အစ်မ လင်မယားလည်း ဒီကို တာဝန်ကျမှာပဲ…ငါ့သားအမေတို့ အတွက် စိတ်သာချနေပါ…အချိန်ကြာလာရင် သူတို့ လောဘတွေ သူတို့ ကို ပြန်ဒဏ်ခတ်မှာပါ…” အမေက သူ့ ကျောလေးကို ပွတ်ရင်း သူ့ ကို ဖျောင်းဖျသည်..အဖေကတော့ သူ့ ကို နှမြော တသစွာ ကြည့်နေသည်… မိဘတွေကို အရှက်ကွဲစေခဲ့တဲ့သား…ကိုယ့်ရဲ့ မိသားစု အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ဘယ်လိုမှ ၀င်မဆန့် တဲ့ ထို စိတ်ဓါတ် အောက်တန်းကျသော စံပယ်ထွေးတို့ ဝန်းကျင်တွင် သူလည်း တစ်ရက်မျှပင် မနေချင်…
သို့ နှင့် သူလည်း ဒီမြို့ လေးကို ရောက်လာသည်… သူရောက်ပြီး သိပ်မကြာ..ကြားရသည့် စံပယ်ထွေးတို့ သတင်းကား မကောင်းလှ….စံပယ်ထွေး အဒေါ်က လေဖြတ်ပြီး ဆုံးသည်…အစ်ကိုလုပ်သူကတော့ ဆေးမှုနှင့် ထောင်ကျပြီး…ထောင်ထဲတွင်ပင် ခုခံအား ကျဆင်းတဲ့ ရောဂါနှင့် ဆုံးသည်… သူတို့ ရဲ့ အကုသိုလ်တွေက သူတို့ ကို ဒုက္ခပေးသွားသည်… စံပယ်ထွေးကတော့ သမီးလေးမွေးသည်ဟု ကြားသည်…
သူ အိမ်က ထွက်လာကတည်းက အမေတို့ က စံပယ်ထွေးတို့ သားအမိ အပေါ် ကြည့်ရှု စောင့်ရှောက်ထားသည်… စံပယ်ထွေးက သူ့ တွင် အားကိုးစရာမရှိ၍ အိမ်မှာပင် နေခွင့်ပြုရန် တောင်းဆိုလို့ အမေတို့ က မေတ္တာ ရှေ့ ထား ကာ ခွင့်ပြုထားသည်ဟုဆိုသည်…မည်သို့ ပင်ဆိုစေကာမူ စံပယ်ထွေးနှင့် သူ့ အသိုင်းအ၀ိုင်း လုပ်ရပ်များအပေါ် သက်မင်းမောင် ဒီတစ်သက် မကျေတော့ပါ…..မိမိရဲ့ ဂုဏ် အသိုင်းအ၀ိုင်း စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကြောင့် လှေကားတစ်ခုသဖွယ် နင်းချေခံခဲ့ရခြင်းကို ဘယ်တော့မှ မမေ့…အမြဲတမ်း နာနာကြည်းကြည်း မုန်းတီးနေမိတော့သည်….
ကလေးကို သူမတွေ့ ချင်ပါ…သူ့ သွေးဟုပင် သူ မခံယူချင်…သူ့ တွင် ဖခင်စိတ် မရှိလို့ တော့ မဟုတ်ပါ..သို့ သော် သူ့ အတွက် နာကြည်းချက်တွေ သိပ်များလွန်း အားကြီးနေတော့ သူ့ သမီးမျက်နှာပင် မကြည့်ချင် ဒါပေမဲ့ လစဉ်တော့ ပုံမှန် ငွေပို့ သည်… တစ်နေတော့ မဖြစ်မနေ့ သူပြန်သွားရသည်….အမေသွေးတိုးလို့ မူးလဲသည်ဟု အစ်မက အကြောင်းကြားလို ရောက်သွားခဲ့သည်...မရောက်တာလဲ ဘာလိုလိုနှင့် သုံးနှစ်ပြည့်တော့မည်ပဲ… အမေတို့ ကို သတိတော့ယသည်..ထို့ ကြောင့်လည်း တစ်ခေါက်လောက်တော့ သူ သွားမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ကာ လာခဲ့သည်…အိမ်ရောက်တော့ အမေ တော်တော်လေး ထူထူထောင်ထောင် ဖြစ်နေပြီ… သားကို တွေ့ လိုက်ရတာလည်း ပါမည်ပေါ့… အမေသက်သာသွား၍ ချက်ချင်းပင် သူ ပြန်မည်လုပ်တော့ အမေနဲ့ အစ်မက သူ့ သမီးလေးကို ၀င်ကြည့်သွားပါဟု တောင်းပန်ရှာသည်..သို့ နှင့် အစ်မနဲ့ အတူ အိမ်ဘက် ထွက်လာခဲ့သည်..
စံပယ်ထွေး ကလေးကို ချော့သိပ်နေတုန်း သူ ရောက်လာတာ မြင်တော့ မအံ့သြပါ…စံပယ် အတွက် နေသားကျနေပြီ…အရာရာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံနှင့် လိုလေသေးမရှိ သူ ထားထားသည်ပဲလေ… သူမအတွက် သူ ရှိခြင်း မရှိခြင်းက သိပ်မထူးဆန်း… အချိန်တန်ရင် သူ့ သမီးလေးက သူ့ အမွေတွေကို ဆက်ခံရမည်လေ… သမီးလေးကို သူ့ အစ်မလက်ထဲ ထည့်တော့ …ကိုသက့် သမီးမျက်နှာကို စေ့စေ့ကြည့်နေသည်…
သက်မင်းမောင် ကလေးကို ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး အသေအချာ တစ်ချက်ကြည့်သည်…သူနှင့် တူတာ ဘာမှ မရှိ….သူ့ အမေ စံပယ်ထွေးနှင့် တစ်ရုပ်တည်း…မျက်လုံး မျက်ခုံး နှာတံကအစ… အသားအရည် အဆုံး စံပယ်ထွေးတို့ မျိုးရိုးဘက်ကို လိုက်သည်..သူ့ စိတ်တွင် ကလေးမျက်နှာ မြင်လိုက်ရ၍ အနားဟောင်းက အနာသစ် ဖြစ်သွားသလိုပင်….ဒီကလေးက သူ့ ကို ပစ်ခွင်းမည့် စံပယ်ထွေး၏ မျှားတစ်စင်း… သူဆက်မနေချင်တော့…သူ စံပယ်ထွေးအား နှုတ်မဆက်ပဲ ချာခနဲ လှည့်အထွက်…“ ကိုသက် သမီးလေးက ဘာအပြစ်မှ မရှိရှာပါဘူး..ကိုသက် သူ့ အပေါ်ကိုတော့ အမုန်းတရားတွေ မထားစေချင်ဘူး… သမီးလေးကို ငဲ့ညှာတဲ့ အနေနဲ့ ကိုသက် မပြန်ခင် စံပယ်တို့ မိသားစုလေး အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံလောက် ရိုက်ပေးပါလား…” စံပယ်ထွေး သက်မင်းမောင်ကို နောက်ဘယ်အချိန် ပြန်တွေ့ ရမည် မသိသောကြောင့် သမီးလေးအတွက် စဉ်းစားကာ တောင်းဆိုလိုက်ခြင်းပါ…. “ ဟုတ်သားပဲ မောင်လေးရယ်..ရိုက်ပေးလိုက်ပါ..” အစ်မလုပ်သူက ကြားမှ ၀င်ပြော၍ သူ သဘောတူ လက်ခံလိုက်သည်… စံပယ်ထွေးတို့ သားအမိအပေါ် သူ ဂရုဏာ မသက်ချင်…ဒီဇာတ်လမ်းကို စံပယ်ထွေးက သူမ ဆန္ဒအတိုင်း ကခဲ့သည်လေ...သက်မင်းမောင်က အရုပ်တစ်ရုပ် မဟုတ်လို့သူမ ကြိုးဆွဲရာ ကပြအသုံးတော် မခံနိုင်..သူမလိုချင်သည်က သူ့ ထက် သူ့ ရဲ့ ဂုဏ် ပကာသနတွေ… သက်မင်းမောင်ကလည်း စံပယ်ထွေးကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနှင့်မျှ ချစ်ကြည့်၍ မရ…သူ့ ရင်ထဲတွင် စံပယ်ထွေး အတွက် အမုန်းနှင့်အငြိုးသာ ရှိသည်…
သက်မင်းမောင်တို့ အိမ်တွင်းရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်က စံပယ်ထွေးတို့ အပေါ် သူ အငြိုးနဲ့ မုန်းတီးနေသည့် အတွက် တစ်ချို့ က ပစ်တင်ကြသလို တစ်ချို့ ကဂရုဏာသက်ကြသည်… ဘယ်သူတွေ ဘာပဲ ပြောပြော သက်မင်းမောင် မမှု… ဒါကြောင့်လည်း သက်မင်းမောင် လောကကြီးနဲ့ အံမ၀င်ဂွင်မကျ နေလာခဲ့တာ သုံးနှစ်ကျော်လို့ လေးနှစ်ပင်ရောက်တော့မည်… ဒီမြို့ လေး ကို တာဝန်ကျပြီး အညို့ ကို မတွေ့ ရသေးတဲ့ အချိန်ထိတော့ သူဟာ မကျေနပ်ခြင်း များစွာနဲ့ပေါက်ကွဲရာ လမ်းကြောင်းအတိုင်း စီးမျောနေတဲ့သူပေါ့… အညို့ ကို တွေ့ လိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ အားလုံးဟာ ပြောင်းပြန် စီးဆင်းနေတဲ့ တေးသွား တစ်ပုဒ် ဖြစ်သွားခဲ့သည်…
မောင်မတရားဘူးဆိုတာ သိပါတယ်..မောင်ဟာ ဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့ နှလုံးသား တစ်စုံကို အညို့ ကို မပေးနိုင်ခဲ့ဘူး… အညို့ ကို မောင် ဖုံးကွယ်ထားခဲ့တယ်… အညိုကို မောင် အရမ်း အားနာတယ်..သနားလည်း သနားတယ်… အညို စိတ်ချပါ..အညို့ အတွက် မောင်နဲ့ အညို တို့ ရဲ့ ရှေ့ ရေး အတွက် အားလုံးကို မောင် စဉ်းစားပြီးသားပါ…. မောင့်အတိတ်ရဲ့ အရိပ်မည်းတွေကြောင့် အညိုကို မထိခိုက်စေချင်ဘူး…မောင့်ရဲ့ အရိပ်မည်းတွေကို မောင်ကိုယ်တိုင် ဖယ်ရှားပေးပါ့မယ်…ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့… မောင့်ကို ချစ်ခြင်းတစ်ခုကို သင်ကြားပေးခဲ့တာ အညိုပါ…အညိုသာ မောင့်အနားမှာ ထာဝရ ရှိနေပေးပါ….အညိုရယ်….မောင့်ဘ၀ အတွက် အညိုသာအလိုအပ်ဆုံးပါ…
Posted by ကာရံဆူး at 3:54 PM 8 comments:
ကာရံရဲ့ ဘလော့ကို လာရောက်ကြတဲ့ မောင်နှမများ အားလုံးကို ကာရံရဲ့ ပျက်ကွက်မှုများ အတွက် အရင်ဦးဆုံး တောင်းပန်ပါရစေ...ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ကာရံ ဘလော့ကို ပစ်ထားတာ သုံးပတ် ပြည့်ပါတော့မယ်။ တကယ်တော့ ပစ်ထားချင်လို့ ပစ်ထားရတာ မဟုတ်ပါဘူး... ပြောရရင် ကော်နက်ရှင် ဖြတ်ခံထားရလို့ ပါ...ဘာကြောင့် ဖြတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ မပြောတော့ပါဘူး...
ဒီရက်ပိုင်းမှာ ကာရံလည်း အတော့်ကို စိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရလို့ ပါ...အဓိကကတော့ သူဌေးနဲ့ ရန်ဖြစ်နေရလို့ ပါပဲ...ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကာရံ ဘလော့လေးမှာ အသစ်မတင်နိုင်တာရော ကာရံ မောင်နှမတွေရဲ့ အိမ်လေးတွေကို လိုက်မလည်နိူင်တာရော စိတ်ထဲမှာ မကောင်းပါ...မိမိရဲ့ ဆန္ဒတွေကို ချိုးနှိမ်ပြီး ဇာတ်ဆရာအလိုကျ အလိုက်သင့် နေနေရတဲ့ ဘ၀မို့အားလုံးကို နားလည်စာနာပေးပါလို့ တောင်းပန်ပါရစေ...
အခုတော့ ကော်နက်ရှင် ပြန်ရရချင်း ဘလော့ကို အပြေးကလေးရောက် လာရပါပြီ...ဒါပေမဲ့ သူဌေးနဲ့ တိုက်ပွဲကတော့ အခုထိ စစ်ပြေမငြိမ်းသေးပါဘူး...ဆက်လက်တိုက်နေရဆဲပါ...ဘာပဲပြောပြော ဘလော့လေးကို ပြန်မြင်ရလို ရင်ထဲပီတိ ဂွမ်းဆီထိသလိုပါပဲ... ကာရံမောင်နှမများကို အမြန်ဆုံး အကြွေးဆပ်ပါ့မယ်...၀က်ဝံလေးရဲ့ တဂ်ကိုလည်း ပျက်ကွက်ခဲ့သလို ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်...ရင်ထဲမကောင်းပါ...စိတ်မဆိုးပါစေနဲ့ လို့ ဆုတောင်းနေပါတယ်...မမကိုး စီပုံးမှာ လာမေးထားတာကိုလည်း နေကောင်းပါတယ်လို့ ဖြေနိုင်ပေမဲ့ နောက်တစ်ခု အတွက်တော့ ပြန်ဖြေဖို့ အင်အား မရှိသေးပါ...ကိုသားကြီးကိုလည်း ကိုရီးယား ဇာတ်လမ်းတွဲလောက်တော့ မကြာတော့ပါဘူးလို့ ...ကိုရန်ကုန်ရဲ့ ဆုတောင်းလေးကြောင့်တော့ ကျန်းမာနေသေးကြောင်းပါ..အခြား အားလုံး အားလုံးသော မျှော်နေကြသော မောင်နှမများကို ကာရံအကြွေးတွေ ပြန်ဆပ်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းလေး ပါးပါရစေရှင်...အားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေ..
Posted by ကာရံဆူး at 10:55 AM6comments:
သက်မင်းမောင် နှင့် မေသက်ပိုင်ညိုတို့ ၏ ပစ္စုပ္ပန်
အိမ်ရှေ့က ကားသံကြားတယ်…နာရီကြည့်တော့ ညတစ်နာရီပင် ထိုးနေပြီ… “ ဟဲ့…နင်ကားကို ဖြေးဖြေးမောင်းနော်… ဒီက လမ်းတွေ နင် သိပ်ကျွမ်းတာ မဟုတ်ဘူး..” ဒါအညို့ အသံ..သြော်…အညိုက သူစိမ်း ယောကျာ်းကို စိတ်ပူတတ်တယ်နော်… မောင့်ကိုရော စိုးရိမ်ဖော်ရရဲ့ လား အညိုရယ်…
“ ဟင်..ကိုသက်မင်းမောင်…မအိပ်သေးဘူးလား…” မျက်ရည်တွေနဲ့ ..မောင်ကို မြင်တော့ အညို ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်းမသိဘူး… လန့် လည်း လန့် သွားတယ်…“ ဟို ဟို ဟိုလေ…သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ …”.. “အို…”…မောင်က ဘာမှ ပြန်မပြောပဲ ကျွန်မ စကားမဆုံးခင် ကျွန်မကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် လှမ်းဖက်လိုက်တယ်… ကျွန်မလေ… ဘာကြောင့်မှန်းမသိ… ငြင်းဆန်သင့်မှန်း သိနေပေမယ့် အသိတရားတွေ လေနဲ့ အတူပါသွားတာလား.. …ကျွန်မ ရင်တစ်ခုလုံး နွေးထွေး လုံခြုံသွားသလို ခံစားရတယ်….မောင်ကလည်း စကားမဆို ကျွန်မကလည်း နှုတ်ဆိတ်နဲ့ …ဒီညက လမင်းကြီးနဲ့ကြယ်ကလေးတွေ ပိုပြီး လင်းနေသလို အရင်ညတွေထက် ပိုလှလို့ နေပါပေါ့လား…
မနက်ကျတော့ မောင်မမေးပေမဲ့ လိုအပ်မယ်ထင်လို့ ပြီးတော့ အညိုကိုယ်တိုင်ကလဲ ရှင်းပြချင်လို့မနေ့က သူငယ်ချင်း လင်မယား အလည်ရောက်လာလို့ သွားတွေ့ တဲ့အကြောင်း..သူတို့ တွေနဲ ၁၀တန်းအထိတူတူနေလာကြတာ မတွေ့တာလဲ ကြာ..ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းဇင်မာက ခရီးပန်းပြီး နေမကောင်းဖြစ်ချင်နေတာနဲ့သူတို့ တည်းတဲ့ နေရာထိ လိုက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း …. ဟိုရောက်တော့ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေ ပြောရင်း ညစာစားပြီးမှ ပြန်လာတဲ့ အကြောင်း မောင့်ကို စီကာ ပတ်ကုံး ပြောပြလိုက်တယ်….အညိုစိတ်ထဲရော မောင့်စိတ်မှာပါ ဘာမှ မရှိ နိုင်အောင်ပေါ့ပါးသွားတယ်…. ချစ်သူတွေ ကြားမှာ သံသယဆိုတာ မရှိနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပဲ မဟုတ်လား…
ချစ်ခွန်းတွေ ဖွဲ့ ဖွဲ့ နွဲ့ နွဲ့ မောင် မပြောပေမဲ့ မောင်နဲ့ အညို နားလည်မှုရတဲ့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားကြတယ်…တကယ်တော့ ချစ်သူဘာဝ တီတာနေရမဲ့ အရွယ်တွေလည်း မဟုတ်တော့ဘူးလေ.. သို့ ပေမဲ့ မချစ်ဖူးလို့ အချစ်ရူး ဖြစ်တတ်ကြတာ သဘာဝပါ… မောင့်ကိုလည်း အညိုက မျက်စိအောက်က အပျောက်မခံသလို မောင်ကလည်း အရိပ် တကြည့်ကြည့်နဲ့ ပါပဲ…မောင်နဲ့ အညိုတို့ ရဲ့ ချစ်သူကာလလေးက အရမ်းကို ပျော်ရွှင်စရာ ကြည်နူးစရာတွေ အပြည့်ပါပဲ…
ချစ်ကြပြီဆိုရင် အရာရာတိုင်းကို ကြည့်တဲ့ မျက်စိက အချစ်တွေ ဖုံးလွှမ်းလို့ လှပနေရဲ့ …နေ့ ရက်တိုင်းဟာ ရက်ရာဇာတွေချည်းပါပဲ…. နေထွက်ရင်လည်းလှ နေ၀င်ရင်လည်း လှတာပါပ…ဲ မောင်က သူ့ ကို မောင်လို့ စခေါ်ခိုင်းတဲ့ နေ့ ကတော်တော်တော့ ရယ်စရာ ကောင်းသည်…မောင်လို့ အညိုကလည်း ခေါ်ဖို့ ပါးစပ်ကမရဲ….မောင့်ပုံစံကလည်း ရှက်ကိုးရှက်ကန်း… အညို တိုးတိုးလေးခေါ်တော့ မောင့် မျက်နှာ ၀င်းပသွားလိုက်တာ…တကယ်ဆို မောင်က အညိုထက် နှစ်လပဲ ကြီးတာပါ…ဒါပေမဲ့ အညိုက ကလေးလို နေချင်တယ်..မောင်ကလည်း အစ်ကိုကြီးလို ဖြစ်ချင်တော့ အပေးအယူမျှသွားတာပေါ့…. မောင်က ညညဆို အညိုကို ပုံပြင်လေးတွေ ပြောပြတတ်တယ်… ဘယ်သူနဲ့ မှ စကား များများ မပြောတဲ့ မောင်က အညိုနဲ့ ဆိုရင် စကားတွေက ပြောမကုန်ဘူး….မောင် စကားပြောတိုင်း မောင့်မျက်ဝန်းတွေက ပြုံးနေတယ်… မောင့် ပါးပြင်က မွှေးညှင်းနုနုလေးတွေကို ငေးကြည့်ရင်း မောင် ပြောတာတွေ နားထောင်ရတာ…အညိုအတွက်တော့ တကယ့်ကို မမေ့နိုင်စရာပါ….
နားရက် တူတူ ကျတဲ့ အခါများဆို မောင်နဲ့ အညိုတို့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ချစ်လို့ ကို မ၀ဘူး…အရင်က အညို စားချင်ခဲ့တဲ့ မောင့်လက်ရာလေးတွေကို မြည်းရုံတင်မက စိတ်ကြိုက် စားခွင့်ရခဲ့တယ်… မောင်က တကယ့်ကို စိတ်ရှည်ပါတယ်.. မောင် ကစားချင်တဲ့ Scrabble ကိုလည်း အညို စိတ်မပါပေမဲ့ မောင့်အတွက် ကစားပေးခဲ့တယ်….မောင်က အညိုစကားပြောတာလေးကို ကြည့်ပြီး အသည်းယားလာရင် အညို့ ပါးချိုင့် လေးတွေထဲကို လက်ညှိုးနဲ့ ထိုးထည့်တတ်သေးတယ်…မောင် ဒီလောက် ပျော်နေတာကို အညို အရင်က စိတ်ကူးထဲတောင် ထည့်ကြည့်လို့ မရဘူး…သြော်…အချစ်က အရာရာကို စေခိုင်းနိုင်တဲ့ မှော်ဆရာ တစ်ယောက်ပါပဲ…
မောင်နဲ့ အညိုတို့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားကြတာကို မနာလိုစိတ်နဲ့စောင်းမြောင်းပြော တတ်တဲ့ ကိုဟန်သစ်ထူးကြောင့် တစ်ခါတစ်ခါ စိတ် အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရသေးတယ်… သူက အရင်က ကြုံးဝါးထားတာကိုး…အညိုကို သူအပိုင်ကြံမယ်လို့ ..ဒါပေမဲ့ အညိုက သူ့ ကို လုံးဝ စိတ်မ၀င်စားတော့ သူ့မှာနာလိုခံခက်ကြီးပေါ့… မောင့်ကိုလည်း မကြာမကြာ ပုတ်ခတ်သေးတယ်… မောင်က ကြားဝင်လုတယ်ပေါ့.. အစကတည်းက အညိုက သူ့ ကို မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ထက် မပိုခဲ့တာ သူနားမလည်ခဲ့ဘူး…သူထင်တာ မောင်သာ မရှိရင် အညိုက သူ့ ဘက်ကို စိတ်ယိုင်လာမယ်ပေါ့…အချစ်ဆိုတာကို သူနားမလည်လို့ ပါ… နီးစပ်တိုင်း ရင်းနှီးတိုင်း အချစ်မှ မဟုတ်တာ… သူက ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မဟုတ်မဟတ် လုပ်ဇာတ်တွေ ခင်းပြီး အညိုကပဲ သူ့ ကို ကျသလိုလို ပြောတတ်သေးတယ်…
မောင်နဲ့ အညိုတို့ ချစ်သူသက်တမ်းက ကြာလာတော့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲ လူသိများလာတယ်… သူနာပြုဆရာမလေးတွေကလည်း ဘယ်တော့ စားရမလဲပဲ ထပ်ထပ်မေးနေတော့တာပဲ..ဆရာမ မသီတာကလည်း အစ်မတစ်ယောက်လို ဖြစ်နေတော့ “ ညိုရေ…ချစ်သူရည်းစား ဘ၀ဆိုတာ ကြာကြာနေလို့ ကောင်းတာ မဟုတ်ဘူး…ညိုတို့ လည်း ငယ်တော့တာမှ မဟုတ်တာ… အိမ်ထောင်တစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့စဉ်းစားကျတော့..”လို့ တိုက်တွန်းလာတယ်… မောင်နဲ့ ကျွန်မတို့ ကိုယ်ပိုင် ဘ၀သစ် ထူထောင်ဖို့ဆိုတာ အချိန်ရှိတိုင်း တွေးဖြစ်ကြတယ်… မောင့်မိဘတွေက နယ်က အညိုတို့ က ရန်ကုန်ကပါ… မောင့်မိဘတွေက ဝေးတော့ အသက်လည်း ကြီးပြီဆိုတော့ မောင်က သူတို့ ကို အသိပေးရုံပဲ အကြောင်းကြားလိုက်မယ်တဲ့… အညိုကတော့ မိဘတွေကို ခွင့်တောင်းဦးမယ်ဆိုပြီး.. ရန်ကုန်ပြန် လိုက်တယ်.. မောင်က သူ့ မိဘတွေကိုလဲ သွားတွေ့ ပေးပါလို့ မှာလိုက်တော့…မောင့်မိဘတွေ ရှိတဲ့ မြို့ ကို သွားပြီး လက်ဆောင်ပေးပြီး မောင့် အကြောင်းတွေ ပြောဖြစ်ကြတယ်… မောင့်မိဘတွေက မောင့်ကို စောင့်ရှောက်ပေးပါတဲ့…မောင်က ဒီမှာနေရင် အရက်ပဲ ဖိသောက်နေလို့ စိတ်ပြောင်းသွားအောင် သူတို့ ကပဲ နယ်မြေသစ်ကို သွားခိုင်းလိုက်တာတဲ့…မောင့်မှာ ဘာစိတ်ညစ်စရာတွေများ ရှိလို့ မောင်က ဒီလို ဖြစ်နေတာလဲ… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မောင်ကတော့ အညို့ ကို ဖုံးကွယ်ထားမှာ မဟုတ်ပါဘူးလေ…မောင့်ကို ယုံတယ်…စိတ်ချပါ မောင်က လိမ်မာပြီးသားပါ.. အညိုကြောင့် မောင် အရက်နဲ့ ဆေးလိပ်တောင် မသောက်တော့ဘူးလို့ပြောခဲ့ပြီး ပြန်လာလိုက်တယ်…ကိုယ့်ကိုကိုယ် အန်တီတို့ ရဲ့ ချွေးမ ဖြစ်တော့မှာလို့ တော့ မိတ်မဆက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး… မောင်က ဖုန်းဆက်ထားပြီးသားပဲ သူတို့ သိပြီးသားနေမှာပါလေ… မောင့်မိဘတွေ မျက်နှာမှာ အရိပ်တစ်ခုခု ရှိနေသလိုပဲ…ဒါပေမဲ့ မောင့်အပေါ် ဘာသံသယမှ မထားချင်တဲ့ သူပါ…မောင့်ကိုလည်း ဘာမှ မမေးချင်ဘူး…အညိုက မောင့်အပေါ်ကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ပဲ ချစ်ချင်တာ… မောင့်ကို မယုံလို့မောင့်သိက္ခာကို ထိခိုက်မှာ စိုးလို့ ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့မမေးတော့ပါဘူးလေ…
အညို့ မိဘတွေကတော့ အညို့ ကို ဘာမှ မပြောဘူး…“ သမီးကို ဒီအရွယ်ထိရောက်အောင် အသိပညာတွေ အတတ်ပညာတွေ အဖေတို့ ပေးခဲ့ပြီးပြီ…သမီးဘ၀လမ်းကို သမီး စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပါ…သမီးရဲ့ အသိဥာဏ်နဲ့လမ်းမှန်ကို ရွေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့အဖေယုံကြည်ပါတယ်… အဖေက သိပ်မကျန်းမာသေးတော့..သမီးတို့ မင်္ဂလာဆောင်ကို လာနိုင်မှာတော့ မဟုတ်ဘူး…”… အမေကတော့ ၀မ်းနည်းနေတာလား စိတ်ဆိုးနေတာလား မသိဘူး..နှုတ်ဆိတ်နေတယ်… စိတ်ထဲမှာ ၀မ်းနည်းနေပေမဲ့ ဟိုမှာ စီစဉ်စရာ ရှိတာတွေ စီစဉ်ရမှာမို့ရက်ကြာကြာမနေပဲ မိဘတွေကို ကန်တော့ပြီး ပြန်လာလိုက်တယ်…
မောင်တစ်ယောက် အညို ခွင့်ယူနေတုန်း အညို့ ဂျူတီပါ အစားဝင်ပေးနေရလို့ တော်တော်ပင်ပန်းတယ် ထင်တယ်…မျက်နှာလေး ချောင်သွားတယ်…ဒါပေမဲ့ အညို့ ကို မြင်လိုက်လို့ ပြုံးလိုက်တဲ့ မောင့် အပြုံးက အရမ်းကို အပြစ်ကင်းတယ်…မောင့်ရဲ့ လွမ်းဆွတ်မှုတွေကို အညို ခံစားမိပါတယ်… အညိုလည်း လွမ်းတာပါပဲ မောင်ရယ်..မောင့် မျက်နှာ မြင်လိုက်ရတော့ အညို့ ရဲ့ဘာမှန်းမသိတဲ့ သံသယတွေ လေနဲ့အတူ လွင့်ပါသွားတယ်…ဒါကြောင့် အချစ်က တစ်ခါတစ်လေ မျက်ကန်းနဲ့ တူတယ်လို့ ဆိုကျတာပါလား…
မင်္ဂလာဆောင်အတွက် လုံးပန်းနေကြတာ ပင်ပန်းလို့ ပင်ပန်းမှန်းတောင် မသိပါဘူး…မောင်နဲ့ အညို နေဖို့အတွက် သူနာပြုဆရာမလေးတွေကပဲ အိမ်တစ်လုံး စီစဉ်ပေးတယ်… ဆေးရုံအုပ်ကြီးကရော အားလုံးကရော မောင်နဲ့ အညိုကို ၀ိုင်းပြီး ပံ့ပိုးကြတယ်… မောင်နဲ့ အညိုကို လိုက်ဖက်ညီလို့ တဲ့… အင်း..ဖူးစာက ရွာလည်ပြီး တနယ်တကျေးမှာ အိမ်ထောင်ကျလိမ့်မယ်လို့ အညို ထင်မထားဘူး… အခုတော့ မောင်နဲ့ အညို ဘ၀လေးတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီလေ….ပျော်လိုက်တာလေ…
ကြင်စဦး ဇနီးမောင်နှံဆိုတော့ သည်းသည်းလှုပ်နေကြတာပေါ့…မိုးမမြင် လေမမြင် ချစ်ခဲ့ကြတာ…အာဒမ် ဧ၀ ချစ်တာ ရှင်မွှေးလွန်းနဲ့ မင်းနန္ဒာချစ်တာ ဒီလိုမျိုးပဲ ထင်ပါ့… မောင်ကလည်း လင့်ဝတ္တရား ကျေပြွန်သလို အညိုဘက်လည်း မယား ၀တ္တရား မပျက်ခဲ့ပါဘူး… “အညိုရေ…ရေချိုးတာ ကြာလှချည်လား… သြော်…မောင့်မိန်းမလေး နေမကောင်း ဖြစ်နေမှ… မောင်ရင်ကျိုးရပါမယ်… မြန်မြန်လုပ်ပါအညိုရယ်..”… မောင်က အဲ့လို ကြင်နာတတ်သလို..“ မောင်ရေ..ဒီနေ့ မောင်ကြိုက်တဲ့ ကြက်သား ကာလသားနဲ့ငါးပိထောင်းထားတယ်…”…အညိုကလည်း မလျော့သော ချစ်ခြင်းနဲ့ ချစ်တာပါ…
“ မောင်ရေ…ဒီတပတ် မောင်နဲ့ အညို နားရက် တူတယ်နော်…ဈေးသွားဝယ်ချင်တယ်..ဘုရားလဲ မရောက်တာ ကြာပြီ…လိုက်ပို့ နော် မောင်” လို့ အညိုတောင်းဆိုတိုင်း မောင်က လိုက်လိုက်လျောလျော လိုက်ပို့ တတ်သလို “ အညိုရေ မောင်တို့ ဒီနေ့အုန်းနို့ ခေါက်ဆွဲချက်စားရအောင်…”လို့ မောင် ပြောရင်လည်း ဘယ်လောက်ပင် ပင်ပန်းပါစေ…အညိုက မငြီးမငြူ ချက်ကျွေးတတ်ပါတယ်…. တစ်ခါတစ်ခါ မောင် ချော့တာ ခံချင်လို့ အညို စိတ်ဆိုးတိုင်း မောင် မျက်နှာညှိုးနေတတ်တာကလွဲလို့ … မောင်က ချော့လည်း မချော့တတ်ပါ… နောက်ဆုံးတော့ အညိုကပဲ စခေါ်ရတာပါပဲ…
အညိုက ပြန်ခေါ်ရင် မောင်က အတိုင်းမသိ ၀မ်းသာလို့ … “ အညိုရယ် မောင့်ကို စကား မပြောပဲ မနေပါနဲ့ နော်…အညို အဲ့လိုနေရင် မောင် မနေတတ်ဘူး..ဘာမှလည်း လုပ်လို့ မရဘူး.. အညို့ မှာ မောင့်ကို မကျေနပ်တာရှိရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါကွာ..နော်”. ပြီးရင် မောင်က အညို့ ကို သနားတယ်လို့ လည်း ခဏခဏ ပြောတတ်သေးတယ်….ဘာကြောင့် သနားတာလဲလို့ မေးရင် သနားလို့ သနားတာလို့ ပဲ ဖြေတယ်…မောင်က အညို့့ကိုသာ ပွင့်လင်းခိုင်းတာပါ..မောင်ကတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မျိုသိပ်ထားတတ်တာ များပါတယ်…သူ နေမကောင်းဖြစ်ရင်တောင် အညို စိတ်ပူမှာ စိုးလို့ ဘာမှ မပြောပဲ ကြိတ်ခံတတ်တဲ့သူပါ..
မောင်နဲ့ အညိုတို့ ရဲ့ အိမ်ထောင်သည် ဘ၀လေးက သာသာယာယာ အေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် နားလည်မှုတွေနဲ့ ဖြတ်သန်း လာကြတာ…ဒါပေမယ့် မောင်နဲ့ အညိုတို့ မှာ ချွတ်ယွင်းချက်မရှိပါပဲ သားသမီးရတနာမရခဲ့ကြဘူး… အညိုကလည်း ကလေးရလာရင် တာဝန်မကျေမှာစိုးတာပါ ….မောင်ကလည်း လိုလိုလားလား မတောင်းဆိုဘူး….ရခဲ့ရင်လည်း ယူမယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်…တကယ်လို့ များ သားသမီးရလာရင် အညိုကတော့ အိမ်ထောင်ရှင်မ ဘ၀ကို ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးခံယူချင်တာ… အလုပ်ကို နှမြောပေမဲ့ သားသမီးလေးတွေနဲ့ အမေတာဝန် ဇနီးမယား တာဝန်ကို အပြည့်အ၀ ယူချင်တာပါ…ပြီးတော့ ဒီလိုမျိုး ကလေးမရတာဟာ တချို့အိမ်ထောင်သည်တွေမှာလဲ ဖြစ်တတ်တာမို့ဘာမှ သိပ်ပြီး ဂရုတစိုက် မလုပ်ခဲ့ကြဘူး….…ဒီအတိုင်းပဲ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် မလျော့သော ချစ်ခြင်းနဲ့ ချစ်နေကြရင်း အချိန်တွေ ကုန်လွန်ခဲ့တယ်…. ပတ်ဝန်းကျင်ကတောင် မောင်နဲ့ အညိုကို ချီးကျူးကြတယ်လေ… အရမ်းချစ်ကြလို့ … သူများတွေ အဲ့ဒီလို အားကျလောက်အောင် မောင်နဲ့ အညိုက ချစ်ကြတာပါ… နှစ်ယောက်စလုံးအတွက် အချစ်စစ်ဆိုတာ သံသယ မြူမှုန်တောင် မရှိခဲ့တာပါ… ဒါပေမဲ့… ဒါပေမဲ့လည်းပေါ့လေ…….
(သွားကိုက်နေတဲ့ကြားက ကြိုးစား ပန်းစား တင်ထားတာလေးပါ...အားမနာတမ်း ဖတ်သွားကြပါနော်..ဆက်ရန်ကိုလဲ ကြိုးစားပြီး မြန်မြန်တင်ပါ့မယ်...နောက် နှစ်ပိုင်းပဲ ကျန်တော့တယ်ဆိုတာ အသိပေးလိုက်ပါတယ်...မျှော်သူတွေ မောမှာ စိုးလို့ ...:D)
Posted by ကာရံဆူး at 10:48 AM 8 comments:
(ဒီတခါ တင်ပြတဲ့ သရဲ ဇတ်လမ်းက ကိုယ့်တွေ့တော့ မဟုတ်ပါ။
၁၉၈၁- ၁၉၈၂ ခုနှစ် ပတ်ဝန်းကျင်က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ
နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ “ကျောပေါက်ကြီး သရဲ” ဇတ်လမ်း ဖြစ်ပါတယ်။)
၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင် တက္ကသိုလ်များ ဆေးရုံးသို့ ကျောင်းသူ လူနာ
တစ်ဦး အရေးပေါ်အခြေအနေဖြင့် ရောက်ရှိ ခဲ့ပါတယ်။ ယင်း
ကျောင်းသူမှာ မာလာဆောင်က ဟု ကျောင်းသားလောက က
ဆိုကြပါတယ်။ ထိုကျောင်းသူသည် ထိုခေတ်က ဒေသကော်လိပ်
မှ တဆင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပင်မတွင် အထူးပြု သိပ္ပံ ဘာသာ
ရပ် တစ်ခုအား တက်ရောက် ပညာသင်ကြား နေသူ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုကျောင်းသူသည် လက်တွေ့ခန်း (Practical room) တွင် လက်
တွေ့ ပညာရပ်များ သင်ကြားပြီး မိမိ နေထိုင်ရာ အဆောင်သို့
အခြား ကျောင်းသူ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ ပြန်လာ ခဲ့ပါတယ်။
အဆောင်သို့ မရောက်မီ သူ့မ၏ လွယ်အိတ် အတွင်း၌ ပစ္စည်း
တစုံတခု ကို ရှာဖွေ ပါတယ်။ ထိုနောက် သူငယ်ချင်းများကို
“နင်တို့ အဆောင်ကို အရင်ပြန်နှင့်အုံး၊ ငါ့ မှတ်စုစာအုပ် လက်တွေ့
ခန်းမှာ ကျန်ခဲ့ပြီး၊ အဲဒါ ပြန်သွား ယူလိုက်အုံးမယ်၊ နီးနီးလေးဘဲ
ကိစ္စ မရှိဘူး၊ ငါ တစ်ယောက်တည်း သွားလိုက်မယ်”
လို့ ပြောပြီး လက်တွေ့ခန်းဘက်သို့ ထွက်ခွာ သွားပါတယ်။
သူငယ်ချင်းများလည်း ထိုကျောင်းသူနှင့် လမ်းခွဲပြီး အဆောင်သို့
ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ နာရီဝက်ခန့် အကြာတွင် ထိုကျောင်းသူသည်
ခြေထောက်တွင် ဖိနပ်မပါဘဲ မောကြီး ပန်းကြီးဖြင့် အဆောင်အတွင်း
သို့ ပြေးဝင် လာပါတယ်။ သူမအား ဘာဖြစ်လာလဲ၊ ဘယ်သူက
ဘာလုပ်လိုက်လဲလို့ ၀ိုင်းမေးကြသော်လည်း ဘာမှ ပြန်မဖြေဘဲ
၀မ်းနည်းစွာ ငိုကြွေးနေပါတယ်။ ထူးခြားပုံမှာ သူမငိုနေချိန်၌
ငိုသံ လုံးဝ မထွက်ပါ။ အဆောင်မှူး အပါအ၀င် အဆောင်ရှိ သူငယ်
ချင်းများ မေးသော မေးခွန်းများကို ပြန်မဖြေ နိုင်တော့ပါ။ တကိုယ်
လုံး ခြစ်ခြစ်တောက် ကိုယ်ပူလာတာကို တွေ့ရသောကြောင့်
သူမကို တက္ကသိုလ်များ ဆေးရုံးသို့ တင်ပို့လိုက် ရပါတယ်။
ဆေးရုံးရောက်ပြီး ထိုကျောင်းသူသည် ထူးဆန်းစွာ စကားသံလုံးဝ
မထွက်ဘဲ အ တဲ့ ပုံစံ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဆေးရုံးရှိ ဆရာဝန်များက
အမျိုးမျိုး စမ်းသပ် စစ်ဆေးသော်လည်း ကိုယ့်ခန္ဓာတွင် ထိခိုက်မှု
လုံးဝ မတွေ့ရှိရပေ။ ထိုကျောင်းသူသည် တစုံတခုကို လုံးဝ
စိုးရိမ်း ကြောက်လန့်နေသော ပုံစံဖြင့် စိတ္တဇ ဆန်ဆန် ဖြစ်လာ
ပါတယ်။ အဲဒီလိုပုံစံဖြင့် ဆေးရုံးတွင် နှစ်ပတ်နီးပါး ကြာမြင့်လာ
သော အခါ နယ်မှ မိဘများ လိုက်လာပြီး နယ်သို့ ပြန်လည်ခေါ်
ဆောင် သွားပါတယ်။ နောက်တစ်လလောက် ကြာသောအခါ
ထိုကျောင်းသူသည် ပုံမှန်အနေအထားဖြင့် ကျောင်းသို့ ပြန်လည်
ရောက်ရှိ ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါကြမှ သူမ လက်တွေ့ခန်းသို့ မှတ်စု
စာအုပ် ပြန်ယူခဲ့သော ထိန့်လန့်ဖွယ် ဖြစ်ရပ်ဆန်းကို ကျောင်းသား
လောကက ကြားသိ ရပါတယ်။
သူမသည် မှတ်စု စာအုပ်ယူရန် လက်တွေ့ခန်းကို သွားရောက် ခဲ့
ပါတယ်။ အခန်းအတွင်းသို့ ၀င်လိုက်သော အခါ သူမထက် အသက်
အရွယ်အရ ဆယ်နှစ်နီးပါး ကြီးရင့်သော လူကြီးတစ်ယောက်
အခန်းအတွင် ဟိုဘက်လျှောက်လိုက် ဒီဘက်လျှောက်လိုက်
လုပ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူမက ကျောင်းမှ သန့်ရှင်းရေး
အလုပ်သမား အောင်မေ့ပြီး ထိုလူကြီးအား
“ကျမ မှတ်စု စာအုပ် မေ့ကျန်ခဲ့လို့ လာယူတာပါ” ဟု ပြုံးပြပြီး
အခန်းအတွင်းရှိ သူမ ထိုင်ခဲ့သော စာရေးခုံမှ စာအုပ်ကို လိုက်ရှာ
ပါတယ်။ စာအုပ်ကို လုံးဝ မတွေ့သောကြောင့် သူမက ထိုလူကြီး
အား “ဒီနားမှာ စာအုပ်လေး တစ်အုပ်များ တွေ့မိသလား”လို့
မေးလိုက်ပါတယ်။ ထိုအခါ ထိုလူကြီးက ...
“ငါလည်း နင်လိုဘဲ ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဦးသန့် အရေးအခင်းတုန်းက
အိမ်ပြန်နောက်ကျနေတဲ့ ငါ့ညီမလေးကို လိုက်ရှာ နေတာ ဒီနေ့
“ရှင်၊ ဦးလေးက ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဦးသန့် အရေးအခင်း ကတည်းက
ဦးလေး ညီမလေးကို လိုက်ရှာနေတာ၊ ဦးလေး ဆိုလိုတာကို ကျမ
“အေး၊ မင်းနားလည်းအောင် ငါပြောပြမယ်၊ ဦးသန့် အရေးအခင်း
တုန်းက ငါနဲ့ ငါ့ညီမလေးက ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းအတူ
တူ တက်ခဲ့တာပေါ့၊ စစ်တပ်က သေနတ်တွေနဲ့ ပြစ်တဲ့နေ့မှာ ငါ့ညီမ
လေးကို ငါ စိတ်ပူလို့ ဒီလက်တွေ့ခန်းဘက်ကို အလာ စစ်တပ်က
ငါကို ပြစ်လိုက်လို့ ငါသေသွားတာပေါ့၊ ဂျီးသရီးနဲ့ ပြစ်တာလေ၊
မယုံရင် ဒီမှာကြည့်၊ ငါနောက်ကျောမှာ ဘာမှ မရှိတော့ဘူး”
ဟု ဆိုပြီး ထိုလူကြီးက သူ့အင်္ကျီ နောက်ကျောကို လှန်ပြပါတယ်။
ထိုသို့ လှန်ပြလိုက်သော အခါ ထိုလူကြီး နောက်ကျောဘက်တွင်
ဘာမှ မရှိဘဲ သေနတ်နှင့် ပြစ်လိုက်သော အခါ ပွင့်ထွက်သွားသော
ပုံစံ အခေါင်းပေါက်ကြီး မြင်တွေ့ ရပါတယ်။ ထိုအခါ ထိုကျောင်းသူ
ရုတ်တရက် ကြောက်လန့်သွားပြီး လက်တွေ့ခန်း အတွင်းမှ အလျင်
အမြန် ပြေးထွက် ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါ ထွက်ပြေးသွားသော ကျောင်းသူ
အား ထိုလူကြီးက အသံနက်ကြီးဖြင့် လှမ်းပြောလိုက်ပါ သေးတယ်။
“ဦးသန့် အရေးအခင်းတုန်းက ပျောက်သွားတဲ့ ငါ့ညီမလေးကို
တွေ့ရင် ငါဒီမှာ စောင့်နေတယ်လို့ ပြောပေးပါ၊ ညီမလေးရယ်”
ယင်းကိစ္စ သတင်းများ ထွက်ပေါ်ပြီး မယုံကြည်သော အဆောင်နေ
ကျောင်းသား နှစ်ဦးသည် လောင်းကြေး ပုံစံ အလောင်းအစား လုပ်၍
ယင်း သိပ္ပံ လက်တွေ့ခန်းတွင် ညဘက် သွားရောက် အိပ်စက် ကြ
ပါတယ်။ မနက် မိုးလင်းသော အခါ ထိုကျောင်းသား နှစ်ဦးအား
တက္ကသိုလ် အာဏာပိုင်များက တက္ကသိုလ်များ ဆေးရုံးသို့ ထပ်မံ
ပို့ဆောင် လိုက်ရကြောင်း သိရပါတယ်။
(P.S သွားကိုက်နေလို့ ဘာမှ မရေးနိုင်သေးတာပါ...အကြွေးကို လာဘ်ထိုးတဲ့သဘောနဲ့သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ပို့ လိုက်တဲ့ မေးလ်ကို ဆားချက်တာပါ...:P)
Posted by ကာရံဆူး at 10:05 PM 8 comments: